၁။ နမ်ခမ်၊ အင်ဂါးဂါး စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များကို တနိုင်းမြို့တွင် ပြန်လည်နေချထားပေး
၂။ တောင်ကုတ်တွင် ANP ပါတီ အင်အားပြ လှည့်လည်
၃။ မြို့နယ် ၆ ခုကို ပြန်သုံးသပ်ပေးရန် TNP ပါတီက UEC ထံတင်ပြ
၄။ ပလက်ဝ ဒေသခံများထံမှ ဆန်ကို AA အဖွဲ့ ခြိမ်းခြောက်ပြီး ဈေးနှိမ်ဝယ်
၅။ မြန်မာပြည်က ချင်းဒုက္ခသည်တွေကို ကန်ကူညီဖို့ ပြည်ပရောက် ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ တောင်းဆို
၆။ မော်ချီးဒေသအန္တရာယ်ဇုန်မှာနေတဲ့သူတွေ အပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ မလိုလားကြ
၇။ ကရင်အချင်းချင်း စည်းလုံးမှုပျက်ပြားစေသည့် မဲဆွယ်မှုများမလုပ်ရန် ရန်ကုန်ကရင်စာယဉ် သဘောထားထုတ်ပြန်
၈။ ပလက်ဝသို့ စစ်တွေဘက်မှပို့သည့်မဲရုံသုံးပစ္စည်းများ ယနေ့ထိမရောက်သေး
၉။ ဆွမ်ပရာဘွမ် ကျေးရွာနယ်နမိတ်အတွင်း ရွှေသတ္တုတူးဖော်မှုကို ရပ်ဆိုင်းပေးရန်တောင်းဆို
၁၀။ ကျောက်ဖြူ စနဲမြို့အနီး မိုင်းပေါက်ကွဲ၍ ၂ ဦးသေ၊ ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိ
၁၁။ ကိုဗစ်ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပိုမိုလိုက်နာစေရန် KNU ညွှန်ကြားချက်ထုတ်
၁၂။ မော်လမြိုင်မြို့အတွင်း မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီထောက်ခံသူများ စုရုံးလှည့်လည်အင်အားမပြကြရန် ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး အဖွဲ့ မေတ္တာရပ်ခံ
၁၃။ ဆီဆိုင်တွင် ပါတီဝန်းရံသည့်ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်၊ ၃ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာပြင်းထန်
၁၄။ Stay Home ကြေညာထားသည့် ကချင်မှ မြို့နယ် ၂ ခုတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မပြု
၁၅။ ပေါင်မြို့နယ်တွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) ဝန်းရံထောက်ခံသူ အင်အား ထောင်နှင့်ချီ လှည့်လည်မဲဆွယ်
၁၆။ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင်ပြီး အာဏာရပါတီရှုံးနိုင်သည့် မဲဆန္ဒနယ်အချို့ ပယ်ဖျက်မှုအပေါ် ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အား ရှုတ်ချကြောင်း UNDP ပါတီ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး နော်အုန်းလှ ပြောကြား
၁၇။ နမ္မတူမြို့နယ် ပန်လုံကျေးရွာတွင် ၂ ရက်ဆက်တိုက် လူသေအလောင်းများတွေ့
၁၈။ ကျောက်မဲက ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ စုကို ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးရန် တောင်းဆိုမည်
၁၉။ ၂၀၁၅ အတွေ့ အကြုံနှင့် ၂၀၂၀ အတွက်မျှော်လင့်ချက် အစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်၊ ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား ဗဟို ချူပ်ကိုင်မှုလျော့ချရန် တောင်းဆို
၂၀။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မိန်းကလေးဦးရေ ၁၅၀၀၀ ကျော်ကို သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမည်
၂၁။ မြစ်ကြီးနား ကားကြီးကွင်းကို အောက်တိုဘာလကုန်ထိ ပိတ်ထားမည်
၂၂။ ဂုတ်တွင်းလမ်းပေါ်တွင် ကုန်တင်ယာဉ် နှစ်စီးတိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လမ်းပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့
၂၃။ နယ်မြေအပေါ် ဝဲပျံသန်းသည့် တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ်တစ်စီးကို ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ဟု KNU ဆို
၂၄။ သျှမ်းပြည်အစိုးရ ကျောက်မဲ စစ်ရှောင် ၁၇၀၀ ကျော်ထောက်ပံ့ဟုဆို
၂၅။ ရခိုင်တွင် မျိုးတုန်းလုဖြစ်နေသည့် ငမန်းနှင့်ငါးလိပ်ကျောက်များကို အလွန်အကျွံဖမ်းဆီးမှုများကြောင့် လျှော့နည်းလာ
၂၆။ ANP ပါတီ အောင်နိုင်ရေး မာန်အောင်တွင် အင်အားပြပြန်
၂၇။ မောင်တောခရိုင်လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှု ၅ ရက်ကြာရှိလာ၊ လုံခြုံရေးအရ သွားပြင်ခွင့်မရသေး
၂၈။ သီပေါတွင် ကျောင်းဆရာမ ၁ ဦးအပါအဝင် ကိုဗစ်-၁၉ လူနာ ၂ ဦးတွေ့ရှိ
၂၉။ ကိုဗစ်ကြောင့် ရခိုင်တွင် ရေနံယိုဖိတ်မှုတုန့်ပြန်ရေး စီမံချက်အတွက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ မလုပ်နိုင်
တနိုင်းမြို့ရှိ စစ်ရှောင်စခန်းများတွင် ခိုလှုံနေကြသော နန်ခမ်၊ အင်ဂါးဂါးကျေးရွာမှ စစ်ရှောင် အိမ်ထောင်စု ၂၆ စုကို ပြန်လည် နေရာချထားရေးအဖြစ် အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်နေ့တွင် ဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ရွှေနှင့် ပယင်း သတ္တုထွက်ရှိရာ ၎င်းတို့ ဒေသတွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး အစိုးရတပ်မတော်က နယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ရာ ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နှင့် တိုက်ပွဲ ဖြစ်ပွားခဲ့သောကြောင့် တနိုင်းမြို့စစ်ရှောင်စခန်းတွင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်အဖြစ် ၃ နှစ်ခန့်ခိုလှုံနေချိန် ယခု စစ်ရှောင် အိမ်ထောင်စု အချို့က ပြန်လည်နေရာချထားရေးကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
“ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အစီအစဉ်က နေရပ်ပြန်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့ နေရပ်ပြန်ဖို့ အစိုးရနှင့် စစ်တပ်နှင့် အုပ်ချူပ်ရေးဆိုက်ဘက် ရော အကြိမ်ကြိမ် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြည့်ပေမဲ့ သူတို့ရွာကို ပြန်ဖို့က မပြောနဲ့တော့ သွားကြည့်ဖို့တောင် အရမ်းခက်ခဲတယ်။ လုံခြုံမှုမရှိဘူး။ ဘယ်ချိန်မှ ပြန်နိုင်မလဲဆိုတာကို ဘယ်သူမှ မဖြေပေးနိုင်တာကြောင့် စစ်ရှောင်မှာဘဲ နေမယ်ဆိုလည်း တစ်နေရာတည်းမှာဘဲ ကြပ်တိတ်ပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့ကိုယ့်ဘဝကိုကို ကိုယ်ရပ်တည် နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်။” ဟု ပြန်လည်နေရာချထားရေး တာဝန်ခံဆရာ အင်ဖန်နော်တောင် က ပြောသည်။ ၂၀၁၇ ဇွန်လ ၆ ရက်နေ့ နမ်ခမ်ကျေးရွာ တိုက်ပွဲကြောင့် စတင်ထွက်ပြေးလာသူများ ဖြစ်ပြီး ယခု ၃ နှစ်အကြာ စစ်ရှောင်စခန်းတွင်နေထိုင်လာရာမှ ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းဆိုမှုကြောင့် ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ် သည်ဟု ၎င်းကဆက်လက်ပြောဆိုသည်။
လက်ရှိချိန်မှာ ပြန်လည်နေရာချထားရေး နေအိမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မည့် စစ်ရှောင်ပြည်သူများအတွက် ပညာရေး အဆောက်အအုံ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ခွင့်နှင့် ကြာရှည်ခံ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းထိန်းနိုင်ဖို့ လယ်ယာဖော်ထုတ်ရေး၊ နည်းပညာ၊ လက်မှုပညာအစရှိသည့် အခွင့်အလမ်း ကူညီထောက်ပံ့မှုများ လိုအပ်နေကြောင်းသိရသည်။ တနိုင်းမြို့ ကတ်သလစ်စစ်ရှောင်စခန်းတွင် လက်ရှိ နမ်ခမ်ကျေးရွာ၊ အောင်လောဒ်၊ ဆွတ်အိန်ယန်၊ ဆွတ်ရာ စသည့်ကျေးရွာများမှ စစ် ရှောင်ပြည်သူ ၇၂၃ ဦးရှိ ဆက်လက်ခိုလှုံနေကြောင်း သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/22/l3-4/
ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ်မြို့တွင် အောက်တိုဘာလ၂၁ ရက် နံနက်ပိုင်းက ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ (ANP) ကို ဝန်းရံသူ အင်အား ၂၀၀၀ ကျော်ခန့်မှာ ပါတီအောင်နိုင်ရေး ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အလံများ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် မြို့အတွင်း လှည့် လည် အင်အားပြခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။ တောင်ကုတ်မြို့နယ် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖေကြွယ်က “ဒီနေ့ မြို့ ပေါ် ၄ ရပ်ကွက်မှာ ANP အောင်နိုင်ရေးအတွက်လှည့်လည် အင်အားပြကြတာ။ ရပ်ကွက်ထဲက ပါတီကိုအားပေး ထောက်ခံ တဲ့သူတွေက ပါဝင်ပူးပေါင်းကြတာ လူ ၂၀၀၀ ကျော်လောက် ရှိတယ်”ဟု ပြောသည်။ ယင်းသို့ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အင်အား ပြခြင်းကို ချောင်းကုန်းရပ်ကွက်ရှိ ANP မြို့နယ်ရုံးမှ ဦးဥတ္တမလမ်း အပါဝင် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက်များသို့ နံနက် ၈ နာရီ ခွဲအချိန်မှ နေ့လယ် ၁၂ နာရီအထိ လှည့်လည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ ANP အမာခံဖြစ်သော နယ်မြေတို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မရှိတော့သည့်အတွက် တောင်ပိုင်း မဲဆန္ဒနယ်များမှာ ပိုအရေးကြီးသောကြောင့် ယင်းသို့ အင်အားပြရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်း ဆောင်များက ပြောသည်။ ANP ဗဟိုမူဝါဒရေးရာ ကော်မတီဝင် ဦးဖေသန်းက “မြောက်ပိုင်းက ANP အနိုင်ရတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် တွေဟာ အားလုံးအဖျက်ခံရတယ်။ ဒီနှစ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲက တောင်ပိုင်းမှာပဲ များနေတာ။ ဒါကြောင့် လာမယ့် လွှတ်တော် ကို ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့ ပြည်နယ်အစိုးရကို ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက် ဒီအခြေအနေတွေဟာ တောင်ပိုင်းမှာပဲစုပြုံနေတာ။ တောင်ပိုင်း ဟာ အရင်တုန်းက NLD အနိုင်ရတဲ့ နေရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ANP အနေနဲ့ အမျိုးသားရေးလက္ခဏာ တခုဖော်ဆောင် နိုင်အောင် ဒီဒေသတွေမှာ အနိုင်ရဖို့ လိုတယ်”ဟု ပြောသည်။
တောင်ကုတ်မြို့နယ်သည် ပြီးခဲ့သည့်၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ အမျိုသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (NLD) က အနိုင်ရရှိခဲ့ သော နေရာဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ANP ကို ဒေသခံများ ဝန်းရံမှု များနေကြောင်း မြို့ခံများက မှတ်ချက်ပြုကြသည်။ တောင်ကုတ်မြို့ခံ ကိုအောင်နေလင်းက “သူတို့ မဲဆွယ်တာကို တွေ့ရသလောက်တော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ပါတီတွေ အင်အားပြ တုန်းက လူ ၁၀၀ ကျော်လောက်ပဲ တွေ့ရတယ်။ အခုကတော့ ANP ကိုကျတော့ အလွန်များနေတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်ကထက် ဒီနှစ်တော့ ANP ကို ထောက်ခံမှုများတာကိုတွေ့ရတယ်”ဟု ဆိုသည်။ တောင်ကုတ်မြို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပသည့် မြို့ပေါ် ရပ်ကွက် ၄ ရပ်ကွက်မှာ ချောင်းကောက်၊ သိမ်တောင်၊ ဂူတာ၊ ကံပိုင် စသည့် ရပ်ကွက် ၄ ရပ်ကွက်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒမဲ ပေးခွင့်ရှိသူ လူဦးရေ ၂၀၀၀၀ ကျော်သာ ကျန်ရှိတော့ကြောင်းလည်း သိရသည်။ https://burma.i rrawaddy.com/news/2020/10/21/232099.html
ပလောင် (တအန်း) လူမျိုးအများစု နေထိုင်သည့် ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှ မြို့နယ် ၆ ခုအတွင်း ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ် ပြင်ဆင်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) နှင့် သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်ကော်မရှင်များ ထံသို့ တအန်းအမျိုးသားပါတီ (TNP) က စာပေးပို့ထားသည်ဟု သတင်းရရှိသည်။ UEC က အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်သည့် နယ်မြေများကို ကြေငြာရာ ရှမ်းပြည်နယ် မှ မြို့နယ် ၆ မြို့နယ်၏ နယ်မြေအားလုံး၊ အခြားမြို့နယ် ၁၆ ခုမှ ရပ်ကွက် ၈ ခုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃၃ စု တို့ ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုထဲမှ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ မူဆယ်၊ လားရှိုး၊ ကွတ်ခိုင်၊ နမ့်ဆန်၊ မန်တုံ နှင့် ကျောက်မဲမြို့နယ်တို့ အတွင်း ပယ်ဖျက်ခံရသည့် ရပ်ကွက် ၁ ခုနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ၃၆ စုတို့မှာ တအန်းလူမျိုး အများစု နေထိုင်သည့် နေရာများဖြစ်သည့် အပြင် ပဋိပက္ခလည်း မရှိဟု ဆိုကာ ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် TNP က တောင်းဆိုထားခြင်း ဖြစ်သည်။
TNP ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဦးတာကျော်အောင်က “ကျနော်တို့ TNP အနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ကော်မရှင်တွေ ကို စာတင်လိုက်ပါပြီ။ ကန့်သတ်တဲ့ နယ်မြေတွေကို ပြန်စဉ်းစားပေးဖို့ပါ။ မြို့နယ်အလိုက်ချင်းစီက ရတဲ့သတင်း အချက် အလက် အပေါ်မှာမူတည်ပြီး ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရော ပြည်နယ်၊ ခရိုင်ကိုရော ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးဖို့ စာတွေတင် ထားပါပြီ”ဟု ပြောသည်။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ် ကော်မရှင်များကို TNP ၏ မြို့နယ်အလိုက် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပါတီရုံးများမှ အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်က စာတင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး UEC ကို TNP ဗဟိုက ယနေ့ စာပေးပို့လိုက်သည်ဟု သိရ သည်။ ကော်မရှင်အဆင့်ဆင့်သို့ပေးပို့သည့် စာထဲတွင် ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်ကြောင်း သတ်မှတ်ခံရသည့် နယ်မြေများ မှာ နိုင်ငံရေးပါတီအားလုံး ဝင်ထွက်ကာ မဲဆွယ်စည်းရုံးနိုင်သည့် ကျေးရွာများဖြစ်ကြောင်း၊ တိုက်ပွဲမရှိသည့် နယ်မြေများ ဖြစ်ကြောင်းနှင့် လူထုကိုယ်တိုင်ကလည်း မဲပေးလိုသဖြင့် မဲပေးခွင့် မဆုံးရှုံးစေရန် လိုအပ်ကြောင်းတို့ကို အဓိကထား တင်ပြ ထားသည်ဟု သိရသည်။
ထို့ပြင် နမ့်ဆန်မြို့နယ်အတွင်းမှ ပယ်ဖျက်ခံရသည့် ပန်နင်း၊ မြို့သစ် နှင့် ကျောက်ဖြူလေး ကျေးရွာအုပ်စုတို့သည် တိုက်ပွဲ မရှိသည့် အပြင် မြို့နယ်သစ်ကျေးရွာအုပ်စု တစုတည်းတွင် လာရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသည့် အစိုးရ ဝန်ထမ်း၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းများမှာ ဦးရေ ၁၀၀ ဝန်းကျင် အထိ ရှိပါသည်ဟု ဦးတာကျော်အောင်က ပြောသည်။ ကျောက်ဖြူလေးကျေးရွာအုပ်စုမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောလှိုင်ကလည်း ၎င်းတို့ ကျေးရွာအုပ်စုတွင် တိုက်ပွဲလည်း မရှိဘဲ အခြေအနေ တည်ငြိမ်နေသည့် နယ်မြေ ဖြစ်သဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပကြောင်း ကြေငြာလိုက်သည့် အပေါ် ဒေသခံများက လက်ခံနိုင်ခြင်း မရှိပါဟု ပြောသည်။ TNLA ၏ သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်က ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကို ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေအောက်တွင် ကျင်းပခြင်းကြောင့် ထောက်ခံခြင်း မရှိသော်လည်း လူထုက ဒီမိုကရေစီကျင့်စဉ်အရ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲလွတ်လွတ်လပ်လပ် ပေးနိုင်ရန် ၎င်းတို့ တပ်ဖွဲ့ဝင်များက နှောင့်ယှက် ခြင်းပြုမည်မဟုတ်ဟု ပြောသည်။ ၎င်းတို့ လှုပ်ရှားသည့် နယ်မြေများတွင် နိုင်ငံရေးပါတီများ ဝင်ထွက်သွားလာပြီး မဲဆွယ် စည်းရုံးသည်ကိုလည်း နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ဟန့်တားခြင်းများ လုပ်မည် မဟုတ်ကြောင်း ဗိုလ်မှူး မိုင်းအိုက်ကျော်က ပြောဆို ထားသည်။ https://burma.irrawa ddy.com/news/2020/10/21/232100.html
ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း ပလက်ဝမြို့နယ်တွင် တိုက်ပွဲများကြောင့် ဆန် ခက်ခက်ခဲခဲ ဝယ်ယူနေရသည့် ဒေသခံများထံမှ ရက္ခိုင် စစ်တပ် (AA) က ဈေးနှိမ်ပြီး ဆန်ဝယ်ယူခြင်း၊ အဓမ္မ ဆန်တောင်းခံခြင်းများ ပြုလုပ်နေသည်ဟု ချင်းလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့ (CHRO) က ကြေညာချက် တစောင် ထုတ်ပြန်ကာ ပြောဆိုလိုက်သည်။ CHRO မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဆလိုင်းလျန်က “ဆန်က အကန့်အသတ်နဲ့ ဝယ်ယူနေရတဲ့ အချိန်မှာသူတို့က တဖက်က ပြန် ဝယ်ယူနေတော့ အခြေအနေက ဆိုးနေတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျနော်တို့ မှတ်တမ်းအရဆို ဆန်တွေ၊ ပိုက်ဆံ တွေ သူတို့ ကောက်နေတာ ၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ အခု လက်ရှိဖြစ်နေတာဆိုရင် ငရှား အုပ်စုပါ။ တဖက်မှာ မပေးနိုင်သူတွေကို ဒဏ်ငွေ ရိုက်တာတွေလည်း လုပ်တယ်လို့ ကျနော်တို့ သတင်း ရထားပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
AA က ဆန် အဓမ္မတောင်းယူသည် ဟုဆိုကာ CHRO ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် နေရာများမှာ ငရှားကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ ငရှား၊ ကြောင်ချောင်း၊ ဘောင်ဝ၊ နှုံးဘူးကြီးနှင့် နှုံးဘူးငယ် ရွာတို့ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိပေါက်ဈေး ဆန်တအိတ် လျှင် ၇၅၀၀၀ ကျပ် ဝယ်ယူနေရသည်ကို ၄၀၀၀၀ ကျပ်ဖြင့်သာ ပေးချေသည် ဟု ဆလိုင်းလျန်က ဆိုသည်။ CHRO ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် AA က ရွာသားများထံမှ ဈေးနှိမ်ပြီး ဆန်ဝယ်သည့်အပြင် ဆန် ၁ တင်းအိတ်လျှင် ကျပ် ၂၀၀၀ ဖြင့် ထမ်းပြီး AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များ စခန်းချသည့် နေရာသို့ ပိုိ့ခိုင်းသည် ဟုလည်း ရေးသားထားသည်။ CHRO ၏ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည့် ဖြစ်စဉ်သည် လွန်ခဲ့သည့် စက်တင်ဘာ ၁၄ ရက်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ် သည် ဟု သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ တလကျော်ကြာပြီ ဖြစ်သော်လည်း အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်မှ ထုတ်ပြန်ရခြင်းမှာ ပလက်ဝမြို့နယ်သည် အင် တာနက် ဖြတ်တောက် ခံထားရပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်း ခက်ခဲသဖြင့် မြေပြင်မှ သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိ သည်မှာ နောက်ကျပြီး ဖြစ်စဉ် မှန်မမှန်ကို ပြန် အတည်ပြုနေရခြင်းကြောင့် ကြန့်ကြာသွားခြင်း ဖြစ်သည်ဟုလည်း ဆလိုင်း လျန်က ပြောသည်။ CHRO သည် ကုလသမဂ္ဂ လူမှုစီးပွားရေး ကောင်စီ (ECOSOC) က အထူးအကြံပေး အဆင့်အဖြစ်၂၀၁၈ ခုနှစ်မှ စတင် သတ်မှတ်ခံထားရပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်း ချင်းလူမျိုးများ၏ လူ့အခွင့်အရေး အခြေအနေများကို စောင့်ကြည့် လေ့လာကာ မှတ်တမ်း ပြုစုနေသည့် အဖွဲ့ ဖြစ်သည်။
CHRO က လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသည့် အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်ဘဲ ပလက်ဝဒေသတွင် AA ရှိနေသည်ကို မလိုလားသဖြင့် အဖွဲ့အစည်း ဂုဏ်သိက္ခာကျအောင် လုပ်ကြံတိုက်ခိုက်နေသည်ဟုလည်း ဦးခိုင်သုခက စွပ်စွဲသည်။ ထို့ပြင် ဦးခိုင်သုခက “ပလက်ဝ မှာ တပ်မ ၇၇ က စက်လှေတစီးကို ငါးသောင်းကနေ နှစ်သိန်းအထိ ကောက်နေတာရှိတယ်။ ပလက်ဝ အထက် ဘက် ရှင်းလက်ဝမှာ လိုင်လင်းပီဘက်ကလာတဲ့ ဆန်ကို တသောင်းကနေ နှစ်သောင်းအထိ ကောက်တာ ရှိတယ်။ အဲဒီ လူ့ အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက ဘာမှပြောတာ မတွေ့ရဘူး။ ဆန်ဈေး တက်တာကလည်း ဗမာ စစ်တပ်က ပိတ်ဆို့ထားလို့ ဒါတွေ ကို သူတို့ မပြောဘူး။ ဒီ ရီပို့ ထုတ်တဲ့ လူတွေရဲ့ သမာသမတ်ရှိမှုကို ကျနော်တို့က မေး ခွန်း ထုတ်စရာ ရှိပါတယ်” ဟုလည်း ပြောဆိုသည်။ မတ် ၂၉ ရက်ကလည်း မြို့မိမြို့ဖများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ပလက်ဝမြို့နယ် စားနပ်ရိက္ခာသယ်ယူရေး ကော်မတီက ဆမီးမြို့မှ ပလက်ဝမြို့သို့ ဆန်အိတ် ၁၀၀ ကျော် သယ်လာရာ လမ်းခုလတ်တွင် AA တပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး စစ်ဆေးခဲ့ပြီး စားသောက်ရေး အခက်အခဲရှိသည်ဟုဆိုကာ ကာလပေါက်ဈေး အတိုင်း ဆန်အိတ်၂၀ ရောင်းချပေးရန် ပြောဆို ညှိနှိုင်းပြီး မှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/232119.html
အမေရိကန်အရှေ့ဘက်ခြမ်း မေရီလန်းပြည်နယ် ချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ ( CAM – Chin Association Maryland ) က ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းအတွင်း အစီရင်ခံစာ နှစ်စောင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး တခုကတော့ ချင်းပြည်နယ်နဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်တွေမှာ ဖြစ်ပွားနေ တဲ့ စစ်ရေးပဋိပက္ခကြောင့် အိုးအိမ်စွန့်ခွာ ထွက်ပြေးနေရတဲ့ IDP ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် အကြောင်းနဲ့ နောက်တခုက အိမ်နီး ချင်း အိန္ဒိယနဲ့ မလေးရှားမှာ ရောက်နေတဲ့ ချင်းဒုက္ခသည်တွေအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်တွင်းဒုက္ခသည် IDP ဖြစ်နေရ တဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား အနည်းဆုံး (၁၈,၀၀၀) လောက်ရှိတယ်လို့ CAM ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာ ဖေါ်ပြပါတယ်။ အိမ်နီးချင်း အိန္ဒိယ နဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံတွေကို ထွက်ခွာသွားကြတဲ့ ချင်းဒုက္ခသည် အရေအတွက်ကတော့ အိန္ဒိယမှာ (၁)သိန်းကျော်နဲ့ မလေးရှား မှာ ( ၅၆,၀၀၀) ကျော်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ချင်းဒုက္ခသည်တွေကို အမေရိကန်အစိုးရ အနေနဲ့ ထိရောက်တဲ့ အရေးပေါ် အကူအညီပေးရေးနဲ့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထဲမှာ ဒုက္ခသည်အဖြစ် အခြေချ နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့ အောက်တိုဘာ (၂၁) ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ ပြုလုပ်တဲ့ အွန်လိုင်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ရှင်းပြခဲ့ကြောင်း မေရီလန်းပြည်နယ် ချင်း တိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးဇိုသွန်းမှုန်က VOA ကိုပြောပါတယ်။
“ ချင်းပြည်နယ်၊ ပလက်ဝ၊ ဆာမီးမှာရှိတဲ့ အဲဒီ IDP နဲ့ Refugee အကြောင်းကို ကျနော် Report ရေးပြီးတော့ ဒီနေ့ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ပါတယ်။ လုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတခုကတော့ ဒီ Refugee အကြောင်း မလေးရှားမှာ ၅ သောင်း နီးပါး ချင်းတွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့ တခြား မြန်မာပြည်က တိုင်းရင်းသားတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒါကို သမ္မတ Trump ကနေ များများယူဖို့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်းတယ်။ ပြီးတော့ IDP ကျတော့ အခု မကြာခင်မှာ သမ္မတ Trump ကနေ နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာနကပဲ ဖြစ်ဖြစ် USAID ကပဲ ဖြစ်ဖြစ် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု အထောက်အပံ့ အထောက် အကူကို အခုက လက်မှတ်ထိုးတော့မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် တခြား IDP တွေကို များများကူညီပါဆိုပြီးတော့ ကျနော်တို့ တိုက်တွန်း တာဖြစ်ပါတယ်။”VOA က တက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဲဒီ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲမှာ ဝါရှင်တန်ဒီစီ အခြေစိုက် ရွှေ့ပြောင်းအခြေချ သူများနဲ့ ဒုက္ခသည်များ အကူအညီပေးရေး ကက်သလစ်ဘာသာဝင်များအဖွဲ့ ( Migration and Refugee Services) အမှု ဆောင်ဒါရိုက်တာ Bill Canny ကလည်း ချင်းဒုက္ခသည်တွေအပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံက အခြားတိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည်တွေ ကိုပါ လက်ရှိထက် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ ပိုလက်ခံဖို့ သမ္မတထရမ့် အစိုးရကို တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မေရီလန်း ချင်းတိုင်းရင်းသားများအဖွဲ့ရဲ့ အမှုဆောင် ဒါရိုက်တာ ဦးဇိုသွန်းမှုန်က တော့ ပြည်တွင်း IDP တွေအတွက် အခုလို နိုင်ငံတကာကို အကူအညီတောင်းခံနေပေမယ့် လက်ရှိမှာတော့ စစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေဆီ အကူအညီ တိုက်ရိုက်ပေး ပို့နိုင်မယ့် လမ်းကြောင်းတွေ ပိတ်ပင်တားဆီးခံရတဲ့ အခြေအနေမျိုးရှိကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်အတွင်း အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုမှာ လာရောက် အခြေချခွင့် ရှိတဲ့ ချင်းတိုင်းရင်းသား ဒုက္ခသည် ပေါင်း အနည်းဆုံး ( ၆ သောင်း ၃ ထောင်)လောက် ရှိတယ်လို့ အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။ https://burmese.voanews.com/a/myan mar-chin-idp-report-usa-chin-association-of-maryand-/5631090.html
မော်ချီးဒေသ အန္တရာယ်ဇုန်ထဲမှာရှိနေတဲ့ ၁၃ကုန်းခေါ် ယူကော်ခိုကျေးရွာရှိ နေအိမ်တချို့ကို အပြီးရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ အာဏာ ပိုင်တွေက ထုတ်ပြန်ထားပေမယ့်လည်း မြေပြင်မှာနေထိုင်သူတွေက ခေတ္တသာရှောင်ရှားနေတာဖြစ်ပြီး အပြီးပြောင်းရွှေ့ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆန္ဒမရှိကြပါဘူး။ လက်ရှိအခြေအနေရမှာတော့ အန္တရာယ်ဇုန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဒေသခံတွေက မိုးတွင်းကာလမှာ ဆိုရင်မနေကြပဲ တခြားဆွေးမျိုးအိမ်တွေမှာ သွားရောက်နေထိုင်ကြပြီး ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရင် အဲဒီမှာပြန်လာနေပြီး ခဲလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။
ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း က “သူတို့ကရွှေ့ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ အိမ်ကိုတော့မရွှေ့ခိုင်းဘူး။ လူကိုပဲ ရှောင်ခိုင်းတာပေါ့။ တကယ်လို့ ဂဲလုံးတွေကျလာရင် အန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့မှာ တာဝန်ရှိတာပေါ့နော်။ အိမ်ရွှေ့လို့တော့ တရားဝင်မကြေငြာသေး ဘူး။ အခုထိလည်းမရွှေ့ခိုင်းသေးဘူး။ တကယ်လို့နေမယ်ဆိုရင် ညတော့မအိပ်နဲ့ပေါ့။ ညကြရင်တော့ရှောင်ပေးပေါ့။ မိုးများ ရင် အန္တရာယ်ဖြစ်မှာစိုးလို့ပေါ့။”လို့ ပြောပါတယ်။ အာဏာပိုင်တွေက ရွှေ့ပြောင်းခိုင်းတာမဟုတ်ပဲ အန္တရာယ်ကျရောက်မှာ စိုးလို့ ရှောင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်တယ်လို့ သူက ယူဆထားပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ လပိုင်းက ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးနှင့် တခြားသက်ဆိုင်ရာ ဌာနဆိုင်ရာတွေကနေပြီး ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးရာမှာ အဲဒီအန္တရာယ်ဇုန်ထဲမှာ မနေကြဖို့ အပြီးပြောင်းရွှေ့ကြဖို့ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို ညွန်ကြားထားပါတယ်။ ၁၃ ကုန်းခေါ် ယူကော်ခိုကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးဆန်းဝင်းက “ သူတို့နဲ့လည်း လူစုံမတွေ့ရဘူး။ ဟိုဘက်ဒီဘက် ပြောင်း ရွှေ့နေတော့ လူစုံမတွေ့ရဘူး။ ခုနက ပြောသလို သူတို့ကတော့အဲ့လိုမျိုး ဒီ ၂၅ လုံးကိုတော့ ရွှေ့ပြောင်းဖို့ကိစ္စကိုတော့ ပြောသွားတယ်။ ခုနကပြောသလိုမျိုးဟိုနားကနေရာလေးကိုတော့ အဲ့ဒီလက်ပွတ်ပင် KB-0 တို့ဆင်းတဲ့လမ်းအဲ့နား တစ်နေ ရာတော့ ကုမ္ပဏီတွေ ဘာတွေနဲ့ ညိုနိုင်းပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပေးမယ်လို့တော့ရှိတယ်။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်း ရေးအဖွဲ့က ဒါ ၅ သောင်းကနေ ၁ သိန်းပေါ့။ သူတို့ကို ထွေအုပ်ကိုမေးလိုက်တော့ ထောက်ပံ့ကြေးက ဘယ်လောက် လောက်ရှိလဲတော့ ၅ သောင်းကနေ ၁ သိန်းလောက်ပဲရှိတယ်အဲလောက်ပဲ။” လို့ ပြောပါတယ်။
ဌာနပေါင်းစုံကနေ တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတွေက နှစ်ရက်ဆက်တိုက်လာရောက် စစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီး တော့ ရွေ့ပြောင်းဖို့အတွက် ရာအိမ်မှူးတွေကို မှာကြားသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အိမ်တန်ဖိုးနဲ့ ရွှေ့ပြောင်းသယ်ယူရေး စရိတ်က ခန့်မှန်း ငါးသောင်းနဲ့ တစ်သိန်းကြားမှာသာ ရတဲ့အတွက် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်ဘူးလို့ နေအိမ်ပြောင်းရွှေ့မည့်စရင်ထဲမှာ ပါဝင်နေတဲ့ ဒေါ်တင်မာစိုး ကပြောပါတယ်။ အိမ်ရွှေ့ပြောင်းဖို့အတွက် တိကျတဲ့နေရာအသစ်ကို အစိုးရက သတ်မှတ်ထား ခြင်းမရှိသေးပေမယ့် ဒေသခံတွေအနေနဲ့ ခဲလုပ်ကွက်နှင့်ဝေးကွာသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာပါ။ ဒါ့အပြင် အခုလိုရွေ့ပြောင်း ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် နောက်ပိုင်းမှာ ကုမ္ပဏီတွေအနေနဲ့ အဲဒီနေရာကို ခဲသတ္တလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်သွားမှာကိုလည်း ဒေသခံ များ ထင်မြင်စိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ မော်ချီးဒေသမှာ လက်ရှိအချိန်ထိ ကြီးမားတဲ့ မြေပြိုမှု ၃ ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ၁၉၈၅ ခုနှစ် မှာ ပထမအကြိမ်၊ ၁၉၈၈ခုနှစ် မှာ ဒုတိယအကြိမ် နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ တတိယအကြိမ် မြေပြိုမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး လူသေဆုံးမှုနဲ့ လူနေအိမ်များ ပျက်ဆီး ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ မော်ချီးခဲသတ္တုလုပ်ငန်းက နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်ကြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ မော်ချီးဒေသမှာတော့ တရားဝင် လုပ်ကွက် စုစုပေါင်း ၁၂၆ ကျဉ်း ရှိပြီး လုပ်သားဦးရေ ၁၃၀၇ ဦးရှိပါတယ်။ https://ww w.bnionline.net/mm/ news-76411
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ရေးရာကိုယ်စားလှယ်လောင်းများအနေဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ကရင်လူမျိုး အချင်းချင်း အမျိုးသားရေးစိတ်ဝမ်းကွဲစေမည့် စကားအသုံးအနှုန်းများနှင့် မဖြစ်နိုင်သော ကတိက၀တ်များပေးပြီး မဲဆွယ် စည်းရုံးခြင်းမပြုကြရန် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းနှင့်မြောက်ပိုင်းခရိုင် စာပေယဉ်ကျေးမှုကော်မတီများက သဘောထားထုတ်ပြန် ပြောဆိုလိုက်သည်။
မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလအတွင်း ကရင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ၏၀န်းရံသူအချို့၏ မလိုလားအပ်သော မဲဆွယ်စည်းရုံး ရေးကိစ္စရပ်များကြောင့် ကရင်လူမျိုးများအကြား စည်းလုံးမှုပျက်ပြားလာသည့် အခြေအနေဖြစ် ပေါ်နေသည့်အတွက် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့က သဘောထား ထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု ကရင်စာပေယဉ်ကျေးမှု ကော်မတီ တာဝန် ရှိသူများက ပြောသည်။ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီအတွင်းရေးမှူး စမင်းမင်းက “ အခု လက်ရှိ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းတွေကို ကိုယ်စားပြုပြီးမဲဆွယ်ပေးသူတွေက မလိုလားအပ်တဲ့ အမုန်းစကားတွေ၊ ဥပမာ ကရင် ကိုယ်စားလောင်းတွေကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ တိုက်ခိုက်တာတွေက အောက်ခြေမှာအချင်းချင်း ထိုးနှက်ပြီးမဲဆွယ်နေကြ တယ်။ ဒီလိုမျိုးတွေ လုပ်တော့ ကရင်ပြည်သူတွေက ထင်ယောင်ထင်မှားနဲ့ အခြမ်းခြမ်းအစိတ်စိတ်ကွဲကုန်ပြီ။ အဓိကကတော့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနဲ့ပြိုကွဲအောင်မရှိအောင်၊ ဖိအားတွေကြောင့် မဲပေးရတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲ ဒီမိုကရေစီယဉ်ကျေးမှုအရလွတ် လပ်စွာအောင် မဲပေးနိုင်အောင် ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်” ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
ကရင်ရေးရာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတစ်ဦးဖြစ်သည့် စောထွန်းထွန်းက “ဒီအချိန် နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍမှာပါတီ အသီးသီးက ကျနော်တို့မဲဆွယ်စည်းရုံးတဲ့အခါမှာ ကရင်လူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့စည်းအသီးသီးက ဦးဆောင်တဲ့ နေရာတွေမှာရှိတယ် လေ။ အဲဒီတော့စာယဉ်သည်လည်း ကိုယ့်ကရင်စာပေယဉ်ကျေးမှုကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့ အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ် တဲ့အတွက် ဒီလိုဦးဆောင်လမ်းညွှန်ပြီး လုပ်ဆောင်ပေးတာက ကောင်းတယ်။ နားလည်လက်ခံသလို ကြိုဆိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်။ ထိုနည်းတူစွာပဲ အခြားသော အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း ဒီလိုမျိုးအားပေးတာမျိုး၊ ထုတ်ပြန်တာမျိုးတွေလည်း လုပ်သင့်ပါ တယ်။”ဟု ပြောသည်။ လာမည့် နိုဝင်ဘာလ ၈ ရက်နေ့တွင်ကျင်းပမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင် ၁၀ မြို့နယ်အတွင်း ကရင် ရေးရာမဲဆန္ဒရှင်ဦးရေ ၆၉,၀၂၃ ဦးနှင့် မြောက်ပိုင်းခရိုင် ၉ မြို့နယ်အတွင်း ၁၁၃,၂၀၀ ဦးရှိကြောင်း အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ခွဲစာရင်းများအရ သိရသည်။
ထို့အတူ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ကရင်ရေးရာအတွက် NLD မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း နော်စူစဲန်နာလှလှစိုး၊ ပြည်သူ့ရှေ့ ဆောင်ပါတီ -PPP မှ နော်လင်းသင်္ဂီထွန်း၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ -USDP မှ စောဂျက်ကော့ထူး၊ ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ -KPP မှ မန်းသန်းဝင်းဦး၊ ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီမှ နော်အုန်းလှနှင့် ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ -UBP မှ ဒေါ်သင်းသင်းခိုင် တို့အသီသီး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%a1%e1%8
ပလက်ဝမြို့နယ်သို့ မတူပီဘက်မှပို့သည့် မဲရုံသုံးပစ္စည်း ရောက်ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း စစ်တွေဘက်မှပို့သည့်ပစ္စည်းများ ယနေ့ ချိန်ထိမရောက်ရှိသေးကြောင်း ချင်းပြည်နယ် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးလင်းကျော်ထံမှ သိရသည်။
“မတူပီလင်က လာတဲ့ မဲရုံသုံးပစ္စည်းတွေကတော့ ပလက်ဝရယ်၊ဆမီးရယ်၊ နောက်မတူပီနဲ့ နီးတဲ့နေရာတွေ မတူပီနဲ့နီးတဲ့ အုပ်စုတွေကိုရောက်ပြီ၊နဂိုရွေးကောက်ပွဲတုန်းကတော့ ပလက်ဝမှာ အားလုံးပုံတယ်။ အခုကတော့ အခြေနေတစ်ခုအရ မတူပီနဲ့နီးတဲ့ ပလက်ဝမြို့နယ်ထဲက အုပ်စုတွေအတွက်ဆိုရင် မတူပီမှာထားတယ်၊ဆမီးရဲ့အောက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ ကျေးရွာအုပ်စု တွေ အတွက်ဆိုရင် ဆမီးမှာထားတယ်၊ ပလက်ဝရယ်၊ ပလက်ဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အထက်က အုပ်စုတွေအတွက်ဆိုရင် ပလက်ဝကိုပို့တယ်။ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ စစ်တွေမှာပဲရှိနေတယ်”ဟု ချင်းပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲ အတွင်းရေးမှူး ဦးလင်းကျော်က ပြောသည်။ မတူပီဘက်မှ ပစ္စည်းများသည် စက်တင်ဘာလ(၁၅)ရက် မတိုင်ခင်တွင် ရောက်ရှိပြီဖြစ်ပြီး ကျန်သည့်ပစ္စည်းများကို ယခုလ အောက်တိုဘာလ တတိယအပတ်တွင် ရောက်ရှိနိုင်အောင်ကြိုးစား ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်းလည်းသိရသည်။
“အခု ရောက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေကတော့ မဲပုံးတွေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ အဓိကအရေးကြီးတဲ့ အမှတ်တုံးတံဆိပ်ရယ်၊ စတစ် ကာ တွေရယ်၊ စတစ်ကာတော့ ရပ်ကျေးတို့ မဲရုံကိုယ်စားလှယ်တွေအတွက် စတစ်ကာတွေပေါ့”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ လက်ရှိ ချင်းပြည်နယ်တွင် ပလက်ဝမြို့နယ်သည် မဲဆန္ဒနယ်အများဆုံးမြို့နယ်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအများဆုံးနှင့် ဒေသအကျယ် အဝန်း သည်လည်း ချင်းပြည်နယ်တွင် အကျယ်ပြန့်ဆုံးဖြစ်သည်။ https://www.bnionline. net/mm/news-76448
ကချင်ပြည်နယ် ဆွမ်ပရာဘွမ့်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ဖုန်အင်ယာန်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ တားမြစ်နယ်နမိတ်ဧရိယာအတွင်း ရွှေသတ္ထုတူးဖော်ရန် လုပ်ဆောင်နေသဖြင့် အဆိုပါစီမံကိန်းကို အမြန်ဆုံး ရပ်ဆိုင်းပေးရန် ဒေသခံပြည်သူများက တောင်းဆို နေကြသည်။ ဖုန်အင်ယာန်ကျေးရွာ၏ ကန့်သတ်နယ်မြေအတွင်း မြေဧက ၃၀၀ ကျော်ကို လုပ်ငန်းရှင် ၂ ဦးက ဒေသခံများကို အသိမပေးဘဲ မြေလွတ်မြေလပ် စိုက်ပျိုးမြေအဖြစ် လျှောက်ယူထားပြီး ရွှေသတ္ထုတူးဖော်ရန်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု ဒေသခံ ဦး Lajaw La Htoi က ယခုလို ကန့်ကွက် ပြောဆိုသည်။“ဘယ်သူက လက်မှတ်ထိုး သဘောတူချပေးတယ်ဆိုတာကိုက မသိရတာပါ။ သူတို့ပြောတာက စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့လည်းပြောတယ်။ ရွှေတူးဖော်လို့ရတဲ့ နေရာမှာက ရွှေလုပ် မယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုကျနော်တို့ ဒေသခံတွေက လုံးဝသဘောမတူဘူး။ ကန့်သတ်ဧရိယာဖြစ်တဲ့ အတွက် တခြားသူတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း”ဟု ပြောသည်။
ဖုန်အိန်ယာန်ကျေးရွာ နယ်နမိတ်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားသော ဧက ၁ သောင်းနီးပါးသည် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းအတွက် မြေသြဇာအလွန်ကောင်းမွန်သောကြောင့် အစိုးရနှင့်ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ကလည်း ကျေးရွာနယ်နမိတ်အဖြစ် တရားဝင် သတ်မှတ်ပေးထားသော နေရာဖြစ်သည်ဟု ဒေသခံများ ပြောသည်။ ဖုန်အိန်ယာန်အပါအဝင် ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ် အတွင်းရှိ နေရာအချို့တွင် ပြည်နယ်အစိုးရက အသေးစား သတ္ထုတူးဖော်မှုလုပ်ငန်းများ ချထားပေးပြီဖြစ်သောကြောင့် ကျေးရွာကန့်သတ်ဧရိယာအတွင်း လုံးဝမပြုလုပ်ပေးစေလိုကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်မှူး ဦး Naw Seng က ပြောဆိုသည်။“ကျနော်တို့ဒေသခံတွေက တောင်ယာလုပ်ငန်းကိုပဲ ဦးစားပေးလုပ်ကိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် ကန့်သတ်ထားတဲ့ မြေဧရိယာ အတွင်း စီမံကိန်း လုံးဝ မလုပ်စေချင်ဘူး။ တစ်ချို့ဒေသခံတွေဆိုရင် လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့ လယ်ယာမဲ့ဖြစ်တဲ့ မိသားစုတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်။ ပြီးရင်ကျေးရွာနဲ့လည်းအလွန်နီးတဲ့အတွက် ရွှေတူးဖော်လိုက်မယ်ဆိုရင် စိုက်ပျိုး ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ ထိရောက်လုပ်ကိုင်၍ မရဘဲပျက်စီးသွားမယ်ဖြစ်တယ်။ ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်အတွင်းထဲမှာ မြေနိမ့်ပိုင်းဖြစ်ပြီး မြေဆီလွှာ ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ဖုန်အင်ယာန် ဒေသတစ်သာရှိတော့တာဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် ဘယ်စီမံကိန်းကိုမှ မလိုလားဘူး”ဟု ပြောသည်။
ဖုန်အင်ယာန်ကျေးရွာ ကန့်သတ်နယ်မြေတွင် သတ္ထုတူးဖော်ခွင့် မရှိကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ် ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဦး Dashi La Seng ကလည်း ယခုလိုပြောဆိုသည်။“ဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်အနီးတဝိုက်မှာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရကနေ ပြည်နယ်အစိုးရကို စီမံခန့်ခွဲခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီကန့်သတ်ဧရိယာထဲမှာ ချမှတ်ထားပေးတာတော့မရှိသေးဘူး။ အခုက သူတို့အနေနဲ့ မြေလွတ်မြေလပ်နဲ့လျှောက်ထားတယ်ဆိုရင် ပြန်လည်စစ်ဆေး ရမှာပါ။ လျှောက်ထားတဲ့ပေါ်မှာဘဲ မူတည်ပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရရှိမှာပါ။ စိုက်ပျိုးရေးစီမံကိန်းအတွက် လျှောက်ထားတဲ့နေရာမှာ ရွှေသတ္ထုကတူးလို့မရဘူးလေ။ ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့လည်း မြေလွတ်မြေလပ်ကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် လျှောက်ထားခြင်း ရှိမရှိ။ လျှောက်ထားတဲ့ နေရာက ရွာနယ်နမိတ် ဧရိယာအတွင်းကျရောက်မှုရှိမရှိ ဒါတွေကိုသေချာစစ်ဆေးပြီးမှ တွေ့ရှိချက် တွေကို လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနဲ့အရ ချပေးပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲ မြေလွတ်မြေလပ်ပုံစံလျှောက်ထားတယ်ဆိုပြီး လုပ်ချင်သလို လုပ်ပိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ မြေလွတ်မြေလပ်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ သက်ဆိုင်ရာဌာန ခွင့်ပြုချက်မရရင်လည်း သတ္ထုတူးဖော်ခွင့် လက်မှတ်ထုတ် ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါကိုလည်း အားလုံးကိုသိစေချင်တယ်” ဟု ပြောဆိုသည်။
ပြည်နယ်အစိုးရအနေနှင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကစပြီး ဒုတိယ်အကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ် ၆ ခုတွင်တပြိုင်နက် အသေးစားရွှေသတ္ထုတူးဖော်ခွင့်ပေးခဲ့ပြီးနောက် လက်ရှိဆွမ်ပရာဘွမ်မြို့နယ်အတွင်း ၄ နေရာခန့်တွင် လုပ်ကွက်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ခန့် တရားဝင်ချထားပေးကြောင်းလည်း သိရသည်။ https:// burmese.kachinnews.com/2020/10/22/l1-16/
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကျောက်ဖြူမြို့နယ်၊ စနဲမြို့အနီးတွင် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့ နံနက် ၈ နာရီခန့်က ရေတပ်မှ ကားတစ်စီး မိုင်းခွဲတိုက်ခိုက်ခံရ၍ ၂ ဦးသေဆုံးကာ ၂ ဦးဒဏ်ရာရရှိသဖြင့် စနဲဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေရကြောင်း သတင်းရရှိ သည်။ ၎င်းတို့မှာ စနဲမြို့အပြင်ဖက်ရှိ ရေတပ်သို့သွားလမ်း အဝတောင်ကျေးရွာအုပ်စုရှိ ရေနံသူ တံတားထိပ်တွင် ပေါက်ကွဲ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းနေရာတွင် ပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသူတစ်ဦးရှိခဲ့ပြီး ဆေးရုံရောက်ပြီးမှ နောက်ထပ် တစ်ဦးသေဆုံးကာ နှစ်ဦးမှာ ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း စနဲမြို့အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးနေလင်းကြိုင်က နိရဉ္စရာ သတင်းဌာနသို့ အတည်ပြု ပြောကြားသည်။
“ဖြစ်တဲ့နေရာက စနဲမြို့ကနေ တစ်နာရီလောက်သွားရတယ်။ ရေတပ်သွားလမ်းမှာဖြစ်တာ။ တပ်ကအဖွဲ့တွေ စနဲကို ဈေးလာဝယ်ရင်း အပြန်မှာဖြစ်တာလို့ အကြမ်းဖျင်းသိရတယ်ဗျ။ ဒဏ်ရာရတဲ့လူတွေကို အနီးအနား ဆိုတော့ စနဲဆေးရုံကို ပို့ပါတယ်။ ဒီကိုရောက်တာတော့ ဒဏ်ရာရတဲ့သူသုံးယောက်ပါ။ သေသွားတဲ့လူက တစ်ယောက်ပါလာပါတယ်။ ဘယ်အဆင့် တွေတော့ ကျွန်တော်လည်းမသိဘူး။ မသိဘူးဆိုတာက သူတို့က အရပ်ဝတ်နဲ့ကို” ဟုပြောသည်။ ဆေးရုံတွင် ဆေးကုသမှု ခံယူနေရင်းဖြင့် နောက်ထပ်တစ်ဦးမှာသေဆုံးခဲ့ကြောင်း၊ သေဆုံးသူများမှာ အသက် ၃ဝ ကျော်နှင့် ၄ဝ ကျော်အရွယ် အမျိုးသားများဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ “နှစ်ယောက်သေပြီး ကျန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်မှာ ညာဖက် ခြေထောက် ဒူးခေါင်းနားက ပြတ်သွားတယ်။ ကျန်တစ်ယောက်ကတော့ ပွန်းပဲ့ဒဏ်ရာလောက်ပါပဲ။” ဟုပြောသည်။
၎င်းရေတပ်စခန်း၏ အမည်ကို မသိသော်လည်း အဝတောင်ကျေးရွာအုပ်စုအပိုင်တွင်စခန်းချသည့် ရေတပ်စခန်းဖြစ်ကြောင်း သူကဆက်ပြောသည်။ အရပ်သားထိခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာ မရှိကြောင်း၊ ၎င်းမိုင်းပေါက်ကွဲရာတွင် ကားမှာလုံးဝပျက်စီးသွား ကြောင်း သိရသည်။ ၎င်းပေါက်ကွဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စနဲမြို့ရှိနေရာအချို့တွင် လုံခြုံရေးများချထားကြောင်း ၎င်းမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ပြောပြချက်အရသိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76428
ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ကရင်အမျုိးသားအစည်းအရုံး-KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့တွင် Covid-19 ရောဂါပိုး အတည်ပြု လူနာ များတွေ့ရှိမှုများလာသည့်အတွက် ကိုဗစ်ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေး စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပိုမိုလိုက်နာစေရန်နှင့် လူစု လူဝေး ဖြစ်ပေါ်စေမှုကို မပြုလုပ်စေရန် KNU ခရိုင်အသီးသီးသို့ ဗဟိုမှ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် ညွှန်ကြား လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ KNU ဗဟိုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် Covid-19 အရေးပေါ်တုန့်ပြန်ရေးကော်မတီ၏ အစီရင်ခံချက်ပေါ် အခြေခံပြီး KNU ထိန်းချုပ် နယ်မြေနှင့် ထိစပ်နယ်မြေများတွင် ကိုဗစ်ရောဂါပိုး တွေ့ရှိသူ (၁၀၀)ဦးကျော်ရှိလာသည့်အတွက် ကော်မတီမှ ယခင်ထုတ် ပြန်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ပြည်သူများ ပိုမိုလိုက်နာနိုင်စေရန် နှင့် လူစုလူဝေး ဖြစ်စေ သည့် ဘုရားသွား ကျောင်းတက်၊ ပွဲလမ်းသဘင် ပြုလုပ်ခြင်းများကို ယခုအောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ နိုဝင်ဘာလ ၃၀ ရက်နေ့ အထိ တားမြစ်ကန့်သတ်ထားရန် ခရိုင်အသီးသီးကို ညွှန်ကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဗဟိုအဆင့် ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောဒိုင်းမွန်းခင်က “ ကျနော်တို့ ဒီရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်မှုအတွက် အွန်လိုင်းကနေ ပုံမှန်အစည်းအဝေးထိုင်တဲ့အခါ အခုလတ်တလော ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိသူများလာမှုမှာ နယ်စပ် လည်းပါလာတာ တွေ့ရတယ်။ အဲ့အတွက် ဒီကိုဗစ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကော်မတီရဲ့ အကြံပြုမှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဗဟိုကညွှန်ကြားချက်ထုတ် လိုက်တာပါ။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ကိုဗစ်ရောဂါပိုးကူးစက်ပြန့်ပွားမှုများ အရှိန်မြင့်မားလျက်ရှိပြီး လာ မည့် ဒီဇင်ဘာလအထိ ထိန်းချုပ်နိုင်မှုမရှိပါက ၎င်းတို့အတွက်စိုးရိမ်ရမည့် အခြေအနေရှိလာနိုင်ကြောင်းလည်း ပဒိုစောဒိုင်းမွန်းခင်က ဆက်ပြောသည်။ အဆိုပါ ချမှတ်ထားသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရ ခရိုင်ချင်း၊ မြို့နယ်ချင်း၊ ရွာချင်းကူးလူးသွားလာမှုများကို ပိုမိုတင်းကြပ် စိစစ်ရန်၊ ၁၅ ဦးထက်ပို၍ လူစုလူဝေး မလုပ်ရန် စသည့် စည်းကမ်းချက်များ အပါအဝင် လတ်တလော ထပ်မံညွှန်ကြားလိုက်သည့် ဘုရားသွားကျောင်းတက်၊ ပွဲလမ်းသဘင် ပြုလုပ်ခြင်းများကိုပါ ပိုမို ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်သွားရန်တို့ ပါဝင်သည်။
ထိုသို့ KNU မှ ကိုဗစ် ရောဂါ ထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးအတွက် စီမံလုပ်ဆောင်ရာတွင် မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ဟန့်တားနှောင့် ယှက်မှုများကြောင့် အခက်အခဲများကြုံခဲ့ရကြောင်း KNU ဘက်ကဆိုပြီး ပြီးခဲ့သည့်လများက KNU မှ ဖွင့်လှစ်ထားသော ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးရေး ဂိတ်များကို တပ်မတော်မှ တားမြစ်ဟန့်တားမှုများ၊ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ် များလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့သည်။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%80%e1%80%ad%e1% 80%f%e1%80% 97%e1%80%85%e1%80
COVID 19 ရောဂါပျံ့နှံ့မှုများနေသောကြောင့် မော်လမြိုင်မြို့ပေါ်၌ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီထောက်ခံသူများအနေဖြင့် မဲဆွယ် စည်းရုံးမှု လှည့်လည်အင်အားပြခြင်း မပြုလုပ်ကြပါရန် အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်နေ့က မော်လမြိုင်မြို့ ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေးအဖွဲ့က မေတ္တာရပ်ခံချက်တစ်စောင် ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။
ထောက်ခံသူများ၏ ကျန်းမာရေးနှင့် နောက်ဆက်တွဲစီးပွားရေး၊ လူမှုရေးတို့ကို ထောက်ဆတွေးတော၍လည်းကောင်း၊ ဥပဒေ ကိုလိုက်နာသော နိုင်ငံကြီးသား ရာမညတိုင်းသားပါတီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြလို၍လည်းကောင်း၊ Stay at home ကာလ အတွင်း ပြည်သူများ စိတ်အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန် မော်လမြိုင်မြို့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ၏ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ အောင် နိုင်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက ယမန်နေ့တွင် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။“ရောဂါကလဲ ပိုပြီးတိုးလာတော့ ပြည်သူတွေကလဲ ကြောက်နေကြတယ်၊ ခုချိန်မှာ ကျနော်တို့လူစုအင်အား လှည့်ပြမယ်ဆိုရင် ပြည်သူတွေက ပိုပြီးစိုးရိမ်လာကြမယ်၊ ကျနော်တို့က ပြည်သူတွေ အန္တရာယ်မဖြစ်ဖို့ပါပဲ၊ ပြီးတော့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ထောက်ခံတဲ့သူအားလုံး ဖြစ်နိုင်ရင်လှည့်လည်အင်အားမပြကြပါနဲ့လို့ မေတ္တာရပ်ခံချင်တယ်”ဟု မော်လမြိုင်မြို့ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး ဥက္ကဌ နိုင်အောင်သိန်းက ပြောသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ မွန်ပြည်နယ်ရှိ မော်လမြိုင်မြို့နှင့် ဘီးလင်းမြို့တို့ကို စက်တင်ဘာလ ၂၅ ရက်နေ့ ကစပြီး နေအိမ်တွင်နေထိုင်ရေး Stay at home အစီစဉ်အဖြင့် သတ်မှတ်ထားသည်။ ယင်းရောဂါကြောင့် မော်လမြိုင်မြို့၌ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံနှင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများ ပိတ်ထားရခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်များ ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဝင်ငွေလျော့ပါး ဆုံးရှုံးခြင်း၊ ဆေး ပညာရှင်များ၊ ပရဟိတသမားများ ပင်ပန်းရခြင်းများဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိပြီး ဘာသာရေးဝတ်ပြုဌာနများလည်း ပိတ်ထားရပြီး သံဃာတော်များအနေလည်း ကထိန်ခင်းရန် ခက်ခဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ မော်လမြိုင်မြို့နယ် အမှတ် (၂) မဲဆန္ဒနယ်မြေ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါက်တာဟိန်းပိုင်ထူးချစ်က “ကျနော်တို့ အင်အားပြသည် ဖြစ်စေ၊ မပြသည်ဖြစ်စေပေါ့နော် သူတို့အတွက် ယုံကြည်အားကိုးထိုက်တဲ့ပါတီကိုပဲ မဲပေးကြလိမ့်မယ်လို့လဲ ယုံကြည်တယ်၊ အင်အားမပြရပေမယ့်လဲ စဉ်းစားပြီးတော့ မဲပေးဖို့လဲ ကျနော်တို့ မျှော်လင့်တယ်၊ တချို့ထောက်ခံသူတွေက လျော့ ကောင်း ပေမယ့်လဲ ကျနော်တို့စေတနာကို သိတဲ့သူတွေဆို ကျနော်တို့ကို ပိုပြီးတော့ မဲပေးလာမယ်လို့လည်း မျှော်လင့်တာ ပေါ့နော် ကျနော်တို့အတွက်ကတော့ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးက ပထမပါပဲ၊ ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကတော့ ဒုတိယပေါ့နော်”ဟု ဆိုသည်။ http://burme se.monnews.org/2020/10/22/%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%
ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ် ဘန်းယဉ်ဆေးရုံရှေ့မှာ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် ညနေ ၆ နာရီ ဝန်းကျင်လောက် က ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ မဲဆွယ်စည်းရုံးဝန်းရံတဲ့ ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားပြီး ယာဉ်ပေါ်ပါလာသူ ၃ ဦး အခင်း ဖြစ်နေရာမှာ သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ပါတီမဲဆွယ်စည်းရုံးပြီးအပြန် Fuso Canter ကားရှေ့ဘီးပေါက်ရာမှ အရှိန် မထိန်းနိုင်ဘဲ ကားကျွမ်းပြန်သွားတဲ့အတွက် ကားပေါ်ပါလာသူတွေ လွင့်ထွက်ပြီး ဦးခေါင်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ သေဆုံးသွားတယ် လို့ သိရပါတယ်။
ဆီဆိုင်မြို့ နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှူး သီဟန်က “သူတို့ဆိုက်ခေါင်ကနေ နမ့်ခုတ်ကိုပြန်တာ နမ့်ခုတ်အဖွဲ့တွေပေါ့၊ ဒိုင်နာကားနဲ့ လူ ၁၅ ယောက် လောက်ပါတယ်။ ဘန်းယဉ်အဝင်ဆေးရုံ ထိပ်မှာပဲ ဘယ်ဘက်တာယာပေါက်ပြီး အောက်ဆွဲချပြီး အမျိုးသမီး ၃ ဦး ပွဲချင်းပြီး နောက်တစ်ယောက်က ဒဏ်ရာစိုးရိမ်ရ၊ သူတို့က ပါတီစည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့သူတွေပေါ့”လို့ ပြောပါတယ်။ ဆိုက်ခေါင်နာရေးအသင်းက ကိုမောင်လွန်းက “ကျနော် ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ ၃ ဦးသေသွားပြီ၊ ဒဏ်ရာရ ၁ ဦးက စိုးရိမ်ရ လို့ တောင်ကြီးကို ပို့လိုက်ပြီ။ သေဆုံးသူတွေကို ဘန်းယဉ်ဆေးရုံ ရင်ခွဲရုံထဲပို့ပြီး ကူညီလိုက်တယ်။ သေဆုံးသူပါးပေါ်မှာ နဂါးအလံတွေ ကပ်ထားတုန်း”လို့ ပြောပါတယ်။
ယာဉ်မတော်တဆ ဖြစ်ပွားပြီး လူသေဆုံးခဲ့တဲ့အပေါ် PNO ပါတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့ ပါတီအဖွဲ့အစည်းတွေက ဝမ်းနည်းကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သေဆုံးသူ ၃ ဦးဟာ ဟိုပုံးမြို့နယ် နမ့်ခုတ်ရွာနေ မခမ်းဗွေ၊ မွိုးတီးနဲ့ မရွှေအုပ် တို့ဖြစ်ပြီး မဇင်မာဦးက ဒဏ်ရာအပြင်းအထန်ရရှိပြီး တောင်ကြီးမြို့ စဝ်စံထွန်း ဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/418686
ကချင်ပြည်နယ်မှ မိုးညှင်းမြို့နယ် နှင့် ဖားကန့်မြို့နယ်ကို Stay Home ကြေညာလိုက်သဖြင့် ထိုမြို့နယ်များတွင် နိုင်ငံရေး ပါတီ များ မဲဆွယ်ရန် လုံးဝခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ကြောင်း မိုးညှင်းခရိုင်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ အရာရှိ ဦးမျိုးမင်းဦးထံမှ သိရ သည်။ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဖားကန့်မြို့နယ်နှင့်မိုးညှင်းမြို့နယ်အား Stay at Home မြို့နယ်အဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်သည်။
“ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနေ ကူးစက်ကာကွယ်နှိမ်နှင်းရေး ဥပဒေအရ ဖားကန့်နဲ့မိုးညှင်းမြို့နယ်မှာ နေထိုင်တဲ့ပြည်သူ တွေအနေနဲ့ နေအိမ်မှာနေထိုင်ဖို့ Stay at Home အကျိုးဝင်တယ်ဆိုပြီး အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန် ကြေညာ ခဲ့တဲ့အတွက် Stay at Home သတ်မှတ်ထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာ မဲဆွယ်ခွင့်လုံးဝ ခွင့်မပြုတော့ပါဘူး။ လမ်းမှာထွက်ပြီး မဲဆွယ်တာတွေ နေအိမ်ထိသွားပြီးမဲဆွယ်တာတွေ အဆောက်အဦးထဲမှာ မဲဆွယ်ပွဲလုပ်နေတာတွေကို လုံးဝခွင့်မပြုတော့ ကြောင်း စာထုတ်ပြီးညွှန်ကြားထားပြီး ဖြစ်တယ်။”ဟု အရာရှိဦးမျိုးမင်းအောင်က ပြောသည်။ လက်ရှိ ကချင်ပြည်နယ် တွင် Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစက်သူ ၉၅ ထိရှိလာပြီး ၎င်းတို့ ၉၅ ဦးအနက် ပထမအများဆုံး သည် ဖားကန့်မြို့မှ ၅၇ ဦးဖြစ်ပြီး မိုးညှင်းမြို့နယ်တွင် ၁၇ ဦးဒုတိယအများဆုံးဖြစ်သည်။
မိုးညှင်းတစ်ခရိုင်လုံးတွင် မြို့နယ် ၃ခုရှိပြီး မဲဆန္ဒရှင်စာရင်းအရ ဖားကန့်မြို့နယ်တွင် ၁၆၂၉၄၈ ဦး၊ မိုးကောင်းမြို့နယ် ၁၀၃၂၅၃ ဦး၊ မိုးညှင်းမြို့နယ် ၁၅၈၆၉၄ ဦးရှိပြီး မဲစာရင်းကြေညာပြီးနောက်တွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ ၄၂၄၈၉၅ ရှိကြောင်း သက်ဆိုင်ရာဌာနမှ သိရသည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများအနေဖြင့် Stay at Home သတ်မှတ်ထားသည့် နေရာများတွင် မဲဆွယ်ခွင့် မရှိတော့သည့်အတွက် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့်သာ မဲဆွယ်ရန်ပြင်ဆင်ထားကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ပါတီမှ ဖားကန့်မြို့ နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာတွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ဦးလအောင်က ကချင်သတင်းဌာန KNG ကို ယခုလိုပြောသည်။“Stay at Home ကာလဖြစ်တဲ့ချိန်ကျတော့ ပြည်သူတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီး မဲဆွယ်ဖို့ တစ်ဖက်ကလည်း ကျန်းမာရေးရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ရတဲ့အနေထားဖြစ်နေတဲ့အတွက် သိပ်ပြီးမှတော့ အဆင်မပြေဘူး။ အွန်လိုင်းနဲ့သွား တယ်ဆိုတာကလည်း လက်ရှိကတော့ B Plan ပေါ့။ ကျနော်တို့ပါတီရဲ့အကြောင်းတွေသိချင်တဲ့သူတွေလည်း မေးလာတဲ့ သူတွေရှိနိုင်တဲ့အတွက် Stay at Home ကာလဆိုလည်း အားလုံးက Facebook တော့သုံးကြမယ်။ ဒါကြောင့် အွန်လိုင်းက နေ မဲဆွယ်မယ့် အစီစဉ်တော့ရှိပါတယ်။” ဟု ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးလအောင်က ဆိုသည်။
ကချင်ပြည်နယ်တွင် မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူဦးရေ ၁၁ သိန်းခန့်၊ မဲရုံပေါင်း ၉၁၈ ရုံ နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မည့် ပါတီပေါင်း ၁၉ ပါတီရှိသည်ဟု သက်ဆိုင်ရာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရုံးမှ သိရသည်။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/21/l2-15/
ပေါင်မြို့နယ်တွင် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) ထောက်ခံသူ အင်အား ထောင်နှင့်ချီ၍ ယနေ့ (အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက်) နံနက်ပိုင်းက အင်အားပြ လှည့်လည်မဲဆွယ်စည်းရုံးခြင်း ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။“ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ လှည့်လည်ပွဲကို ပေါင်မြို့နယ် သဗြုချောင်း ကျေးရွာကနေစပြီးတော့ ထွက်လာကြပါတယ်။ အဲ့ဒီကနေ ပေါင်မြို့ကို ဖြတ်ပြီးတော့ ထန်းပင် ချောင်ကြီး ကျေးရွာအထိ သွားပါမယ်။ အဲ့ဒီကနေ အလှပ်ကျေးရွာ၊ ပြီးတော့ မုတ္တမဘက်သွားပါမယ်။ မုတ္တမကနေ လက်ပံတောကျေးရွာအထိ သွားပါမယ်။ အဲ့ဒီ လက်ပံတောကျေးရွာမှာ တစ်ချက်နားပြီးရင် ကရင်တိုင်းရင်းသားတွေ နေထိုင် တဲ့ သဲအိမ်၊ နတ်မှော်စတဲ့ ကျေးရွာတွေဘက်ကို သွားပါမယ်။ ပြီးရင်တော့ ကျုံကကျေးရွာဘက်ကနေ ပြန်ထွက်လာ ပြီးတော့ ပေါင်မြို့ကို ပြန်လာကြမှာပါ။ ပေါင်မြို့နယ်ကို တစ်ပတ်လှည့်တဲ့ သဘောပါဘဲ”ဟု မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) ရွေးကောက်ပွဲ အောင်နိုင်ရေး ထောက်ခံဝန်းရံသူ တစ်ဦးဖြစ်သူ နိုင်သိန်းစောင်က ပြောကြားးသည်။
ယနေ့ လှည့်လည်ပွဲတွင် ပေါင်မြို့နယ်အတွင်းရှိ မွန်တိုင်းရင်းသားများ နေထိုင်ကြသည့် ရပ်ကွက်နှင့် ကျေးရွာများမှ ဒေသခံ မွန်ပြည်သူ အများအပြားလာရောက် ဝန်းရံပေးကြကြောင်းနှင့် ဒီမိုကရေစီ ဖယ်ဒရယ်မူ စစ်စစ်ဖြင့် နိုင်ငံတော်ကို ရှေ့ဆက် သွားစေချင်သည့် အတွက်ကြောင့် တိုင်းရင်းသားပါတီများအား ဝန်းရံပေးကြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း နိုင်သိန်းစောင်က ပြောကြား သည်။“ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဒီနေ့လှည့်လည်ပွဲကို လာရောက် ပူးပေါင်းကြတဲ့သူတွေ အားလုံးကို Mask တပ်လာကြဖို့ မှာ ထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ဝေငှထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ ကလည်း ဒီလောက်လူများမယ်လို့ မထင်ထားဘူး”ဟု နိုင်သိန်းစောင်က ဆက်လက်ပြောကြားသည်။ မိမိဒေသ ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှင့် ကိုယ်ပိုင်အခွင့် အရေး များ ရရှိစေရေး အတွက်ကြောင့် မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) အား လာရောက်ဝန်းရံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပေါင်မြို့ နယ် ထန်းပင်ချောင်ကြီး ကျေးရွာနေ နိုင်ချစ်သန်းက ပြောကြားသည်။
လာမည့် နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက်တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီ (MUP) မှ ပေါင်မြို့နယ်အတွင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် နေရာအတွက် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်နု (ခ) မိကျေဝကျေဝ်ညီ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် နေရာအတွက် ဦးမြင့်ဦး (ခ) နိုင်လင့်လင့်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) နေရာအတွက် ဦးသက်ထွန်း (ခ) အပါးချမ်း၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) နေရာအတွက် ဦးချမ်းမြေ့တို့မှ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် အရွေးချယ်ခံသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ https://news-eleven.com/article/196109
တိုင်းရင်းသားဒေသအချို့ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမှုမရှိခြင်းသည် တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးကို ပိတ်ပင် ခြင်းဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ရှုတ်ချကြောင်း ညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဒီမိုကရေစီပါတီ (UNDP) အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နော်အုန်းလှက ပြောကြားသည်။
တိုင်းရင်းသားပါတီများကို မဲပေးရန် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုများရှိနေချိန်တွင် ရခိုင်နှင့် ရှမ်းအပါအဝင် ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းခြောက်ခု ရှိ မဲဆန္ဒနယ်အချို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်မဟုတ်ကြောင်း ကော်မရှင်၏ကြေညာမှုသည် လုံးဝမလုပ်သင့်သည့် ကိစ္စ လည်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်နော်အုန်းလှက ၎င်း၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် ညပိုင်းက ပြောကြားခဲ့ သည်။“ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ မှာ တချို့ရှုံးခဲ့တာရှိတယ်။ ဥပမာ ရခိုင်နဲ့ ရှမ်းဆို အာဏာရပါတီ (NLD) ရှုံးခဲ့တယ်။ အခု ဒီတစ်ကြိမ် ကတော့ တခြားတိုင်းရင်းသားဒေသတွေပါ ကိုယ့်ရဲ့တိုင်းရင်းသားမဲကို ကိုယ်ပေးဖို့ တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကို အားပေးဖို့ လှုံ့ဆော်နေတဲ့အချိန်မှာ ဒါက လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်ဆိုရင် ဒီနေရာတွေက အာဏာရပါတီ ရှုံး နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ပဲ ကျွန်မတို့မြင်တယ်”ဟု ဒေါ်နော်အုန်းလှက ပြောကြားသည်။ တိုင်းရင်းသားဒေသအချို့ရှိ အဆိုပါ မဲဆန္ဒနယ်များကို ပယ်ဖျက်ခြင်းမပြုလုပ်ဘဲ ရွှေ့ဆိုင်းသင့်သည်ဟု ရှုမြင်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
“ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းအနေနဲ့ကတော့ ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ထပ်ပြီးရှုတ်ချပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကို လုံးဝပိတ်ပင်ပြီးတော့မှ (အာဏာရပါတီ) ရှုံးနိုင်တဲ့နေရာတွေကို ပယ်ဖျက်တဲ့အတွက် ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်လို့ ကျွန်မကတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကို ပြောချင်ပါတယ်”ဟု UNDP ပါတီ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်နော်အုန်းလှက ပြောကြားသည်။ UNDP ပါတီသည် ဒေါ်နော်အုန်းလှ၊ ဦးဒေးဗစ်လှမြင်တို့ကဲ့သို့ NLD အဖွဲ့ဝင်ဟောင်းအချို့အပါအဝင် ၁၉၉၀ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖွဲ့ကို အခြေခံတည်ထောင်ထားသည့် နိုင်ငံ ရေးပါတီဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၃၃ ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။“ လွတ် လပ်ပြီး တရားမျှတတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်အောင်ဆိုရင် ဒီလိုမျိုးလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ ရိုးသားစွာယှဉ်ပြိုင်နေတဲ့ တိုင်းရင်းသား တွေကိုလည်း ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်နော်အုန်းလှက ပြောကြားသည်။
ထို့ပြင် COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှု မြင့်မားနေပြီး Stay at Home ကြေညာထားသည့် ရန်ကုန်တိုင်းနှင့် တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားသည့် ပလက်ဝမြို့နယ်တို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမည်ဖြစ်ရာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေဖြင့် မည်သည့်အချက်အလက်များ အပေါ် အခြေခံ၍ စဉ်းစားထားကြောင်း မေးခွန်းထုတ်မှုများလည်း ရှိသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပသည့် မဲဆန္ဒနယ်မြေ စာရင်းကို ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ ရုံးဝန်ကြီးဌာန၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ သက်ဆိုင်ရာ ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲအဆင့်ဆင့်တို့၏ တင်ပြချက်များကို စုပေါင်းသုံးသပ်ပြီး ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဖြစ်သည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင် ဦးမြင့်နိုင်က အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက် နေပြည်တော် ကော်မရှင်ရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ https://news-eleven.com/article/196082
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း နမ္မတူမြို့နယ် ပန်လုံကျေးရွာတွင် ပုပ်ပွနေသော လူသေ အလောင်း သုံးလောင်းကို အောက်တိုဘာ ၂၀ ရက်နေ့နှင့် ၂၁ ရက်နေ့များတွင် ဆက်တိုက်တွေ့ရှိခဲ့ကြပြီး သေဆုံးသူတစ်ဦးမှာ တပ်မတော်သားတစ်ဦးဟု ဒေသခံများ ပြောပြချက်အရ သိရသည်။ ပန်လုံကျေးရွာ ရပ်ကွက် (၄) တွင် အမျိုးသားတစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းနှင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏ ရုပ်အလောင်းကို ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် တွေ့ရှိခဲ့ပြီး အဆိုပါကျေးရွာအနီးတွင်ပင်ရှိသော ပြောင်းဖူးခြံတစ်ခုတွင်လည်း အမျိုးသား အလောင်း တစ်ခုကို အင်္ဂါနေ့က တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ပန်လုံကျေးရွာမှ ရွာခံတစ်ဦး၏ပြောပြချက်အရ အပုပ်နံ့ရ၍ ပတ်ဝန်းကျင်က ရဲကို အကြောင်းကြားခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ” သူတို့ကနှစ်ယောက်တည်းနေတာ၊ အပုပ်နံ့တွေရလို့ ပတ်ဝန်းကျင်က အကြောင်းကြားလို့သိကျတာပါ၊ မနေ့ကတွေ့တဲ့ အလောင်းကတော့ တပ်မတော်က ရဲဘော်လို့ပြောတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့၏အကြောင်းကြားမှုကြောင့် အလောင်းကို သွားရောက်သယ်ယူခဲ့သော နမ္မတူမြို့ မေတ္တာရှင်နာရေးကူညီမှုအသင်းမှ ကိုချစ်မွေးက “အလောင်းက ညိုမည်းနေတယ်၊ သေတာကလည်းနှစ်ယောက်ဆိုတော့ သွေးရိုးသား ရိုးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့” ဟု ပြောသည်။ ” မနေ့ကအလောင်းကတော့ ပန်လုံနားက မန်ဆာမှာတွေ့တာ၊ပုပ်ပွဒဏ်ရာတွေကိုလည်း မတွေ့ရဘူး၊ အခု တော့ နမ္မတူရင်ခွဲရုံမှာ စစ်ဆေးနေပါတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။ နမ္မတူမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ သော်လည်း ဖြေကြားချက်မရနိုင်သေးပါ။ http://www.mizzimaburmese.com/article/74760
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲမြို့နယ်အတွင်း ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ စုကို ရွေးကောက်ပွဲ မကျင်းပနိုင်ကြောင်း ကြေငြာ ထားခြင်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဆင့်ဆင့်ထံ တင်ပြသွားရန် စီစဉ်နေသည်ဟု ရှမ်းတိုင်းရင်း သားများ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ (SNLD) မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းထံမှ သတင်းရရှိသည်။ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်တွင် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် (UEC) က လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပရန် အခြေအနေ မရှိဟုဆိုကာ ရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပနိုင်သည့် နယ်မြေများကို ကြေငြာခဲ့ရာ ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင်း မဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူ တသောင်းကျော် နေထိုင်သည့် ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ စု ပါဝင် နေသည်။
SNLD ပါတီမှဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် ကျောက်မဲမြို့နယ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် (၁) ၏ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဒေါ်နန်းအိမွန်အောင်က “UEC က ပယ်ဖျက်တဲ့ နေရာတွေကို ကျမတို့က သဘောမတူဘူး။ စာပြန်တင်ဖို့ လုပ်နေပါတယ်။ ပြည်သူတွေကလည်း အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးတာကို ပြန်လုပ်ပေး ဖို့ တောင်းဆိုထားတာလည်းရှိပါတယ်။ ကျမတို့က UEC ကို တိုက်ရိုက်မတင်ဘူး။ ကျောက်မဲမြို့နယ်ကော်မရှင်ကို အရင်တင်ပါမယ်”ဟု ပြောသည်။ ကျောက်မဲမြို့နယ်တွင်း ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပနိုင်ခြင်း မရှိသဖြင့် ပယ်ဖျက်လိုက်သည့် ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ နောင်ရှင်၊ ခေးနင်း၊ ပန်လော့၊ ဟဲကွီ၊ ကွန်ကော်၊ ပဇီ၊ ကော်ပေါင်၊ ညောင်မောင်း၊ တော့ဆန်၊ ပါလှိုင်၊ ကွမ်းစလန်း နှင့် ချုံး ကျေးရွာအုပ်စုတို့ ဖြစ်သည်။ ထို ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ စုအနက် နောင်ရှင်၊ ခေးနင်း၊ ပန်လော့ နှင့် ဟဲကွီတို့မှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ် (၁) နယ်မြေတွင် ပါဝင်ပြီး ကျန်ကျေးရွာအုပ်စုများမှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) နယ်မြေထဲတွင် ပါဝင်သည်။
ဒေါ်နန်းအိမွန်အောင်က UEC ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပေးရန် အတွက် ကျောက်မဲမြို့နယ်မှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ ပူးပေါင်း ၍ စာတင်ရန် ဆွေးနွေးမှုများရှိပြီး အခြားနိုင်ငံရေးပါတီများမှ လုပ်ဆောင်မှု မရှိပါက SNLD ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများက စာတင်မည် ဖြစ်သည်ဟု ပြောသည်။ ဆက်လက်၍ ၎င်းက “သူတို့ပိတ်လိုက်တဲ့ ကျေးရွာတွေမှာက ဘာမှမဖြစ်ဘူး။ ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁ ထဲက ၄ အုပ်စုဆိုရင် နောင်ရှင်ကျေးရွာဆိုရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ စစ်ဘေးရှောင်ရောက်တာရှိတယ်။ အဲ့တာ ကလည်း တပ်မတော်က ရွာထဲ ဝင်လာပြီး အခြေချလို့ ရှောင်နေရတာ။ စစ်ပဋိပက္ခမရှိဘူး။ ကျန်တဲ့ ၃ အုပ်စုကလည်း စစ်ဖြစ်တဲ့ နေရာနဲ့ အလှမ်းဝေးတယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရော မရှိဘူး။ ပယ်ဖျက်လိုက်တာတွေက မဖြစ်သင့်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် UEC ကို တင်ဖို့ လုပ်တာပါ”ဟုလည်း ဆိုသည်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျောက်မဲမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည့် စာရင်းအချက်အလက်များအရ အဆိုပါ ကျေးရွာအုပ်စု ၁၂ စုတွင် နေထိုင်သူများထဲတွင် အသက် ၁၈ နှစ်အထက် ဦးရေမှာ ၁၂၀၀၀ ကျော် ရှိသည်။
ကျောက်မဲမြို့နယ်၏ ပြည်သူ့လွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ်တွင် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည့် SNLD ပါတီမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးစိုင်းအောင်မြင့် ကလည်း “မဲဆန္ဒနယ် ၁ ဆိုရင် ကျနော်တို့ SNLD ကို ၉၅ ရာခိုင်နှုန်းအထိကို ထောက်ခံမှု ရနိုင်တဲ့ နယ်မြေ တွေပါ။ နယ်မြေ ၂ ကတော့ ကျနော်တို့ ပါတီအပြင် တအန်းပါတီတို့ကို ထောက်ခံတဲ့ နယ်မြေတွေ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ပယ်ဖျက်တာကို လက်ခံနိုင်တဲ့ အနေအထားမှာ မရှိပါဘူး။ UEC က လုပ်သလား။ ပါတီကြီးက ချယ်လှယ်သလား ဂဃနဏ မပြောနိုင်ပေမယ့် ရင်ထဲမှာတော့ မကျေနပ်နိုင်ပါဘူး”ဟု ပြောသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၊ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲသည် နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ကျင်းပမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိကာလသည် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး ဆင်းနေသည့် ကာလဖြစ်သည်။ https://burma.irrawaddy.com/e lection-2020/2020/10/21/232093.html
မွန်ပြည်နယ်အခြေစိုက် အရပ်ဖက်လူမူအဖွဲ့ အစည်းများပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့်＂လွတ်လပ်တရားမျှတသည့် ၂၀၂၀ ရွေး ကောက်ပွဲ လူထုလှုပ်ရှားမှု အစီအစဉ် CAFFE Project က ဗဟိုချူပ်ကိုင်မှုစနစ် လျော့ချရန် တောင်းဆိုသည့်＂အစီရင်ခံစာ ကို အောက်တိုဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ မြို့နယ် (၁၄) မြို့နယ်မှ ပြည်သူ လူထုများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး＂၂၀၁၅ အတွေ့အကြုံနှင့် ၂၀၂၀ အတွက်မျှော်လင့်ချက်＂အမည်ရှိ ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် ၂၀၂၀ နောက်ပိုင်း အာဏာရရှိလာမည့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရသည် ဗဟိုချူပ်ကိုင်မှုစနစ်လျော့ချရန်လိုအပ်နေပြီး ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့များ၏ ဝန်ကြီးချုပ်ကိုလည်း သက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်များမှ ရွေးချယ်တင်မြောက်စေလိုကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ CAFFE Project ဦးဆောင်ကော်မီတီ မိမရော်စွန်းက “အမှန်ကတော့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်ရ သေးတော့ သမ္မတက ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်တွေကို ရွေးရမှာပဲ၊ ဒါပေမဲ့အဲဒီလိုတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်မဲ့အစား ပြည်နယ်လွှတ်တော်နဲ့ ညှိနှိုင်း ပြီးတော့ ပြည်နယ်အစိုးရကို ဦးဆောင်နိုင်သူ၊ အရည် အသွေးရှိတဲ့သူကို ၎င်းတို့ အကြားမှာ ရွေးချယ်ပေးဖို့ သင့်တာပေါ့＂ ဟု ဆိုသည်။
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ကတိကဝတ်များအတိုင်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ ချုပ် NLD ပါတီ ဦးဆောင်သည့် အစိုးရလက် ထက် (၅) နှစ်တာကာလအတွင်း လူမူရေးဆိုင်ရာ ပြည်သူ့ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စီးပွားရေးတိုးတက်မှု အနည်းငယ်ရှိသော် လည်း ၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေး အပါအဝင် နိုင်ငံရေးပြုပြုင်ပြောင်းလဲမှုများအား အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပေ။“၂၀၀၈ ဖွဲ့ စည်းပုံထဲက ဇယား (က) ပြည်ထောင်စုမှ ပြဌာန်းရမယ့် ဥပဒေအခန်းကဏ္ဍတချို့တွေကို ပြည်နယ်ကို လွှဲပေးသင့်တယ်။ ဥပမာ ဆိုရင် စီးပွားရေးအပိုင်းမှ မြေယာဥပဒေမျိုးလိုတွေပေါ့။ ဗဟိုက ချထားတဲ့ ဥပဒေအချို့ ဟာ တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံနဲ့ မကိုက်ညီဖူး၊ အဲဒီဥပဒေမျိုးကို ပြည်နယ်တွေမှာ ပြဌာန်းသင့်တာပေါ့။ အခြားကိစ္စ တွေလည်း အများကြီး ရှိတာပေါ့ ＂ CAFFE Project အစီအစဉ် ဦးဆောင်ကော်မီတီ မိမြင့်မွန်က ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတွင် လူငယ်အများစု၏ ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် မိသားစုများ၏ စီးပွားရေးကို တိုက်ရိုက်ထိခိုက်နေ သည့် မူးယစ်ဆေးဝါးပြဿနာကို ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းသင့်ကြောင်း၊ သဘာပဝတ်ဝန်းကျင် နှင့် သစ်တောထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်း ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ အရေးပေးဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ၎င်းအစီရင် ခံစာ ကအကြံပြုထားသည်။ အစီရင်ခံစာကို မွန်ပြည်နယ် (၁၀) မြို့ နယ်၊ ကရင်မြို့ နယ် (၃) မြို့နယ်နှင့် တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး (၁) မြို့ နယ်မှ ပြည်သူလူထုပေါင်း (၅၀၀) ခန့်အား တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအကြောင်း၊ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ အထိ နိုင်ငံရေး၊ လူမူရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးအခြေအနေနှင့် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲအပြီး ပြည်သူလူထုများ၏ မျှော်လင့်ချက်များကို မေးမြန်းခဲ့ပြီး ရရှိလာသည့် အချက်အလက်များအား ရွေးကောက်ပွဲသုတေသနပြုထားသည့် အချက် အလက်နှင့် စုစည်းကာ အစီရင်ခံတင်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။ http://burmes e.monnews.org/2020/10/20/%e1%81 %82%e1%81%80%e1%81%81%e1%81%85-
သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကြိုတင် ကာကွယ်နိုင်ရန် ကရင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အသက်၉နှစ်မှ ၁၀နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး ငယ် အယောက် ၁၅၀၀၀ ကျော်ကို အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်(ယနေ့)မှစတင်၍ ဒေသအသီးသီးတွင် အိတ်ခ်ျပီဗီကာ ကွယ်ဆေး ထိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။ အဆိုပါကာကွယ်ဆေးကို မြန်မာနိုင်ငံ တွင် မိန်းကလေးငယ်များအတွက် ယခုနှစ်မှပထမဦးဆုံး စတင်ထိုးပေးသွားမည် ဖြစ်သောကြောင့်၂၀၁၀ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာ လ မှစ၍ ၂၀၁၁သြဂုတ်လအထိ မွေးဖွားသည့် မိန်းကလေးငယ်တိုင်း သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ ကာကွယ်ထားရန်အတွက် အိတ်ခ်ျပီဗီကာကွယ်ဆေးကို ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာဒေသအသီးသီးရှိ ကျန်းမာရေးဌာနများ၌ လက်ခံထိုးပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
ယင်းကာကွယ်ဆေးထိုးရမည့်အရွယ်မှာ အသက် ၉နှစ်မှ ၁၀နှစ်အရွယ် မိန်းကလေးငယ်များသာဖြစ်ပြီး ကရင်ပြည် နယ်၌ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အိတ်ခ်ျပီဗီ ကာကွယ်ဆေးထိုးသည့်အနေဖြင့် အောက်တိုဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ကရင်ပြည်နယ်၊ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီး ဌာနရုံးအနေဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးဖွင့်ပွဲ ပြုလုပ်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ပြည်နယ်အတွင်းရှိ လူဦးရေ အယောက် ၁၅၀၀၀ ကျော်အတွက် ကာကွယ်ဆေး အခမဲ့ထိုးပေးရန် လုံလောက်သည့် အနေအထားရှိသည့်အတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်အသက်ပြည့်သူတိုင်း မဖြစ်မနေ ထိုးဖို့လိုကြောင်း ကရင်ပြည်နယ် ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန တိုးချဲ့ ကာကွယ်ဆေးနှင့် ကူးစက်ဌာန လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဒေါက်တာကျော် ကျော်နိုင် က ပြောသည်။“ကျနော်တို့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ ဦးရေနဲ့ ကာကွယ်ဆေးနဲ့က လုံလောက်မှုရှိတယ်။ သတ်မှတ်ထားတဲ့ အသက်အရွယ် မဟုတ်ရင် လာထိုး လို့မသင့်ပါဘူး။ လာထိုးတဲ့လူတွေကို အဓိက မွေးဖွားလက်မှတ်နဲ့ တိုက်စစ်တာမျိုးလည်း ညွန်ကြားထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဝေးတဲ့ ဒေသတွေမှာတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ဖို့က ကာကွယ်ဆေးလုပ်ငန်း ထိုးမယ့်အဖွဲ့ရှိတယ်။ သူတို့က တာဝန်ယူ ထိုးပေးသွားမှာဖြစ်တယ်။”ဟု ဒေါက်တာကျော်ကျော်နိုင်က ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။
အဆိုပါအိတ်ခ်ျပီဗီကာကွယ်ဆေးကို အပြည့်အဝရရှိရန် ၂ ကြိမ်ထိုးရမည်ဖြစ်ပြီး ပထမအကြိမ်ထိုးပြီးလျင် ၁၂ လခြား ကာ ဒုတိယအကြိမ် ပြန်ထိုးပေးရမည်ဖြစ်သည့်အပြင် ဆေးတစ်ကြိမ်စာ တန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ငွေ (၄.၅)ဒေါ်လာ တန်ဖိုးရှိသော ကြောင့် အခမဲ့ထိုးနိုင်ရန် နိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေမှ (၁၀)ရာခိုင်နှုန်းနှင့် Gavi အဖွဲ့မှ (၉၀)ရာခိုင်နှုန်း ကုန်ကျ ပေးထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။ http://kicnews.org /2020/10/% e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%94%e1%
မြစ်ကြီးနားမြို့ မြစ်ဖျားဧရာကားကြီးကွင်းကို အောက်တိုဘာလကုန်ထိ ပိတ်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း ကချင်ပြည်နယ် Covid-19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီမှ သိရသည်။
အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှစကာ ပိုးတွေ့လူနာထွက်ပေါ်ခဲ့သော မြစ်ကြီးနား ကားကြီးကွင်းတွင် ပိုးတွေ့လူနာများနှင့် ထိစပ်သူများကို ဆက်လက်စုံစမ်း စီစစ်နေသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ အောက်တိုဘာလကုန်ထိ ပိတ်ထား မည်ဟု ကချင်ပြည်နယ် Covid-19 အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးနှင့်ကော်မတီမှ ဒုညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင့်နိုင်က ပြောသည်။“ဂိတ်အဝင်အထွက်ပေါက်တွေအားလုံး ပိတ်မယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် ပိုးတွေ့လူနာက တစ်ရက်တစ်ရက် ကားကြီးကွင်းမှာ ထပ်တွေ့နေရတယ်။ ဒီနေ့လည်း အဲကားဂိတ်ထဲက ၃၃ ဦးကို စစ်လိုက်တယ်။ အဲထဲမှ ဗန်းမော်မန်းကားဂိတ်က ထပ်တွေ့ တယ်။ အဲကြောင့် ကျန်းမာရေးအခြေနေအရ လကုန်ထိ ပိတ်ထားမှာဖြစ်တယ်။”ဟု ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ တစ်ဆင့်စမ်းကြည့်တာပေါ့ ရန်ကုန်၊မန္တလေးက အဝေးပြေးကားတွေကားဂိတ်ထဲကို လုံးဝအဝင်မခံတော့ပါဘူး။ ကားကြီးကွင်းဘေးမှာရှိတဲ့ကွင်းမှာဘဲ ကုန်ချမယ် ဥပမာ ပါဆယ်ထုပ်လိုမျိုးလိုကျတော့ သက်ဆိုင်ရာကားဂိတ်ထဲက တစ်ယောက်ယောက်က စားပွဲနှင့်အပြင်မှာ တစ်ယောက်လောက်ထွက်ထိုင်ခိုင်းမယ်။ အဲလိုလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်။”ဟု ပုဂ္ဂလိက ယာဉ်များကြီးကြပ်ရေးဥက္ကဌ ဦးအေးဇော်ဇော်ကပြောသည်။ ကားကြီးကွင်းတစ်ခုလုံး အဝင်အထွက်ပိတ်ထား သော်လည်း ကုန်စည်စီးဆင်းရေးအတွက် ပုံမှန်တိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကဆက်ပြောသည်။ https://burmese. kachinnews.com/2020/10/22/l2-16/
မန္တလေး-လားရှိုး ပြည်ထောင်စုကားလမ်းမကြီးပေါ်ရှိ ဂုတ်တွင်းလမ်းတွင် ကုန်တင်ယာဉ် နှစ်စီးတိမ်းမှောက်မှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး လမ်းပိတ်ဆို့မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက် ညနေ ၃ နာရီ ၄၀ မိနစ်အချိန်တွင် မန္တလေး-လားရှိုး ပြည်ထောင်စု ကားလမ်းမကြီးပေါ် ၊ ဂုတ်တွင်းလမ်း မိုင်တိုင်အမှတ် (၈၄) ၂ ဖာလုံ နှင့် ၃ ဖာလုံကြားတွင် ကျောက်မဲ ဘက်မှ နောင်ချိုဘက်သို့ အပ်ချုပ်စက် တင်နာအရည် (၂၉) တန် တင်ဆောင်၍ ဦးတည်မောင်းနှင်လာသည့် 3L/ …. (၁၈) ဘီးတပ် ကုန်တင်ယာဉ်သည် လမ်းကွေ့ကြောအဆင်းတွင် အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ လမ်းယာဘက်သို့ တိမ်းမှောက်သွားခဲ့ ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ခရီးသည်တင်နှင့် ကုန်တင်ယာဉ်များ ဖြတ်သန်းနိုင်ခြင်း မရှိပဲ လမ်းပိတ်ဆို့မှု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ဂုတ်တွင်းလမ်း ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းကာ လမ်းပိတ်ဆို့မှု ရှည်ကြာစွာမဖြစ်စေရန် အမှတ် (၁၂၄) ကျောက်မဲ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စုမှူးရုံး ရဲအုပ်စောဝင်း နှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ဂုတ်တွင်းလမ်း ရဲကင်းရှိ တပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် အော်ရီယမ်တယ်ဟိုင်းဝေးကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူများက တိမ်းမှောက်ယာဉ်ပေါ်ပါ ကုန်ပစ္စည်းများ ဖယ်ရှားကာ ယာဉ်များ ပုံမှန်အတိုင်းသွားလာနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက် ည ၁၁ နာရီခန့်တွင် ယာဉ်များပုံမှန်အတိုင်း ပြန် လည်သွားလာနိုင်ခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။ အလားတူ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီအချိန်ခန့်တွင် ကျောက်မဲ ဘက်မှ နောင်ချိုဘက်သို့ ဦးတည်မောင်းနှင်လာသော အထည်လိပ်များ တင်ဆောင်လာသည့် ၂၂ ဘီး ကုန်တင်ယာဉ်တစ်စီး တိမ်းမှောက်မှု ထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဒီနေ့ မနက်ပိုင်းမှာ ၂၂ ဘီး ကုန်တင်ယာဉ် ထပ်ပြီး မှောက်တာပေါ့။ မနေ့ညက မှောက်တဲ့ နေရာမှာပဲ မှောက်တာပါ။ အထည်လိပ်တွေ တင်လာတဲ့ ကုန်တင်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ အပေါ်ဝိတ်မနိုင်ဘဲ ကွေ့တဲ့အချိန်မှာလဲသွားတာပေါ့။ မိုင်တိုင်မှတ် (၈၃) နားမှာ မှောက်တာပါ။ မနေ့ညက မှောက်တဲ့နေရာနဲ့ အထက်အောက်ပေါ့။ အခုလမ်းရှင်းနေပါပြီ။ သိပ်မကြာလောက် ပါဘူး။ လမ်းပြန်ပွင့်မှာပါ”ဟု အမှတ် (၁၂၄) ကျောက်မဲ ယာဉ်ထိန်းရဲတပ်ဖွဲ့စုမှူးရုံး ရဲအုပ်စောဝင်း ကပြောသည်။ ရှမ်းပြည် နယ် (မြောက်ပိုင်း) ဂုတ်တွင်းလမ်းတွင် ကုန်တင်ဆောင်မှုများသော ကုန်တင်ယာဉ်ကြီးများ မကြာခဏတိမ်းမှောက်မှုဖြစ်ပွား လေ့ ရှိပြီး လမ်းပြန်ပွင့်ချိန်တွင် ကုန်တင်ယာဉ်နှင့် ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ အလုအယက် မောင်းနှင်ကျော်တက်မှု များကြောင့် လမ်းပိတ်ဆို့မှု ရှည်ကြာမှုများလည်း မကြာခဏ ဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိသည်။ https://news-eleven.com/article/196106
နယ်မြေအပေါ် ဝဲပျံသန်းခဲ့သည့် တပ်မတော် ရဟတ်ယာဉ် (Helicopter airbus) တစ်စီးကို လုံခြုံရေးရယူနေ သည့် ၎င်းတို့၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ခြိမ်းခြောက်ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး- KNU က ယမန်နေ့ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက် နေ့ တွင် ၎င်းတို့၏ ဝက်ဘ်ဆိုက်စာမျက်နှာ၌ သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ ပြီးခဲ့သည့် အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က တောင်ပိုင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်(တပခ)မှ ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်စိုးမင်းနှင့် တပ်ဖွဲ့ဝင် ၄ ဦး စီးနင်းလာသည့် အဆိုပါ ရဟတ်ယာဉ်သည် တောင်ငူစခန်းမှ စတင်ထွက်ခွာ ပြီးနောက် ၎င်းတို့ကို အသိပေး အကြောင်းကြားမှုမရှိဘဲ KNU တပ်မဟာ (၅) နယ်မြေ လူသောမြို့နယ်အတွင်း ဝဲပျံလာသည်ကို ဒေသခံများမှတွေ့ရှိခဲ့၍ နယ်မြေလုံခြုံရေးအရ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်း KNU တပ်မဟာ (၅) ဘက်မှ အတည်ပြုပြောဆိုသည်။
မူတြော်ခရိုင် (KNU တပ်မဟာ ၅) အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောရောဘင်မူးက “အခုက ဘာမှ ကျနော်တို့ကို အသိမပေးဘဲ ဟက်လီကော်ပတာနဲ့ ပျံသန်းလာတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့ ဒေသခံ ကျေးရွာတွေ အခြေစိုက် စခန်းတွေအပေါ်မှာ ဝဲပျံတာမျိုး လုပ်တဲ့အတွက် အဲ့နေရာတွေမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့ ကျနော်တို့လူတွေက လုံခြုံရေးအရပစ်ခတ်လိုက်ရတာမျိုး လုပ်လိုက်ရ တယ်။”ဟု ကေအိုင်စီသို့ ပြောသည်။ တပ်မတော်ရဟတ်ယာဉ်အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ တပ်စခန်းတည်ရှိရာ ထီးမူထ သို့ လာရောက်ရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း KNU နယ်မြေပေါ်သို့ စုံစမ်းထောက်လှမ်းသည့် ပုံစံဖြင့် KNU တပ်မဟာ (၅)၏ အထူး တပ်ရင်းဌာနချုပ် နယ်မြေအတွင်း ဆက်လက်ပျံသန်းခဲ့မှုကြောင့် လုံခြုံရေးရယူနေသည့် KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်များမှ ဒုတိယ အကြိမ် ထပ်မံပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းလည်း KNU ဘက်က ဆက်ပြောသည်။ ရဟတ်ယာဉ်မှာ ထွက်ခွာသွားပြီး ၎င်းတို့ မူရင်းဌာန ချုပ်သို့ ပြန်သွားရာတွင် စက်အင် ဂျင်ချို့ယွင်းသွားခြင်းကြောင့် ကျောက်ကြီးမြို့နယ်၊ မူသဲ ဘောလုံးကွင်းတွင် ဆင်းသက် ရပ်နားခဲ့ကြောင်း၊ KNLA တပ်ဖွဲ့ဝင် များ၏ ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ရဟတ်ယာဉ်မှာ ထိခိုက်မှုအနည်း ငယ်ရှိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ အခြေစိုက် စခန်းသို့ ပြန်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိ သည့်အတွက် အဆိုပါ ဘောလုံးကွင်းတွင် အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ဟုလည်း KNU သတင်းက ဆိုသည်။
နိုင်ငံရေး လေ့လာသုံးသပ်သူ ဦးမောင်မောင်စိုးက “ ကျနော်ကြားမိတာကတော့ လမ်းကြောင်းမှားပြီး ဝင်သွားတယ်လို့ ပြော တယ်။ ဒါကို KNU ဘက်က စိုးရိမ်စိတ်နဲ့ ပစ်တယ်လို့ပြောတယ်။ တဖက်ကလည်းပဲ မဲပုံးတွေ လိုက်ချတယ်လို့လည်းဆို တယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီကိစ္စအပေါ် နှစ်ဖက်ခေါင်းဆောင်တွေ သဘောထားကြီးကြီးနဲ့ ညှိနှိုင်း ဖြေရှင်းရင်တော့ ပြဿနာကြီးကြီး မားမားဆက်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်းပဲ ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး သဘောထားတင်းတင်းမာမာနဲ့ ဒါကိုတော့လက်ခံလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ဘက်က စဉ်းစားရင်တော့ ပြဿနာတက်သွားနိုင်ပါတယ်”ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုသည်။ http://kicnews.org/2020/10 /%e1%80% 94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%
သျှမ်းပြည် မြောက်ပိုင်း ကျောက်မဲမြို့နယ် စစ်ဘေးရှောင် ၁၇၀၀ ကျော်ကို သျှမ်းပြည်အစိုးရမှ စားနပ်ရိက္ခာ ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ ကြောင်း သတင်းစာရှင်းလင်းမှုတရပ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်း အောက်တိုဘာ ၂ ရက်နေ့က စပြီး အစိုးရ တပ်မတော်နှင့် သျှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ၊ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA တို့ကြားဖြစ်ပွါးသော တိုက်ပွဲ ကြောင့် နေရပ်မှစွန့်ခွါထွက်ပြေးရသည့်ကျောက်မဲဒေသခံလူထု ၄၀၀၀ ကျော်ရှိကြောင်း သျှမ်းလူ့အခွင့်အရေးမဏ္ဍိုင်မှ ကွင်းဆင်းကောက်ယူသည့်စာရင်းများအရ သိရသည်။
“ကျနော်တို့ သျှမ်းပြည်အစိုးရအနေနဲ့ တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူတွေ အိမ်ထောင်စု (၅၀၀) လူဦးရေ (၁၇၀၀) ကျော်ကို ထောက် ပံ့ပေးခဲ့တယ်”ဟု သျှမ်းပြည် အစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးစိုးညွန့်လွင်က ပြောသည်။ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကို ၇ ရက် တစ်ကြိမ်ထောက်ပံ့မှု ပေးခဲ့ကြောင်း၊ စုစုပေါင်းကျပ်ငွေ ၅၇ သိန်းကျော် တန်ဖိုးရှိ ဆန်၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကြက်သွန်နီ၊ ငါးသေတ္တာ စသည့် စားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများကို ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ကြောင်း ဦးစိုးညွန့်လွင်က ပြောသည်။“ကျနော်တို့က ၁ လစာဆိုပြီး ထောက်ပံ့ကူညီပေးလို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စစ်ရှောင်တစ်ချို့တွေက အိမ်ပြန်သွားတာတွေရှိတယ်။ ကျနော်တို့လည်း စာရင်းကောက်ရတာ ခက်တယ်”ဟု ဦးစိုးညွန့်လွင် ကပြောသည်။ လက်ရှိမှာ တိုက်ပွဲများ ငြိမ်နေသဖြင့် ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်းရှိ စစ်ဘေးရှောင်များမိမိနေရပ်သို့ ပြန်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း စုံစမ်းသိရသည်။
တဖက်တွင်လည်း တိုက်ပွဲကြောင့် စစ်ဘေးရှောင် နေအိမ်များလက်နက်ကြီးထိမှန်ထားခြင်း၊ အစိုးရတပ်မတော်မှ တပ်သား များ နေအိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မွှေနှောက်ထားခြင်း နှင့် အရပ်သားနေအိမ်ခြံဝင်းထဲတွင် လက်နက်ကြီးများ၊ ကျည်ဆံခွံ များစွာ ရှိနေကြောင်းလည်း နမ့်မဟင်ကျေးရွာ မှ ဒေသခံများ ပြောပြချက် အရသိရသည်။ ကျောက်မဲမြို့နယ် အတွင်း တိုက်ပွဲ ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့် အိုးအိမ်များ၊ လက်နက်ထိမှန်ခဲ့သည့် အရပ်သားများ နှင့် ပတ်သက်ပြီး (အောက်တိုဘာ ၁၉ ) ရက် တွင် ပြုလုပ်သည့် သျှမ်းပြည် အစိုးရ အဖွဲ့ ၄ နှစ်ပြည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် သျှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ တစုံတရာ ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ https://burmese.shannews.org/archives/19010
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဒေသများတွင် ကျက်စားနေကြသော မျိုးတုန်းလုဖြစ်နေသည့် ငမန်းနှင့် ငါးလိပ်ကျောက် အကောင်ရေမှာ အလွန်အကျွံဖမ်းဆီးမှုများကြောင့် နှစ်စဉ်လျော့ကျလာလျှက်ရှိနေကြောင်း ပင်လယ်ပြင် မျိုးစိတ်ထိန်းသိမ်းရေး လုပ်ဆောင် သူများနှင့် ဒေသခံများထံမှ သိရသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ကောက်ယူထားသော စစ်တမ်းများအရ ကောင်ရေပမာဏ နှစ်စဉ်လျော့ကျလျက် ရှိကြောင်း သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(WCS)မှ Marine Species Conservation Officer ကိုအံ့မောင်က DMG သို့ ပြောဆိုသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၉ ခုနှစ်အထိ ရှားပါးမျိုးစိတ် ငါးမန်းနှင့် ငါးလိပ်ကျောက်တို့၏မျိုးစိတ်တို့ နေထိုင် ကျက်စားမှု အခြေအနေ၊ ရေလုပ်သားများ၏ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေက ရခိုင်ပြည်နယ်မ၊ ကျိန္တလီ၊ သံတွဲ၊ မန်အောင်၊ ကျောက်ဖြူနှင့် စစ်တွေ စသည့်မြို့နယ် ၆ ခုတွင် သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့(WCS)မှ စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။“အခုလို အကောင်ရေလျော့ကျလာတယ်ဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ စစ်တမ်းတစ်ခုတည်းနဲ့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ နော်ဝေးက ပညာရှင်တွေရဲ့ သုတေသနပြုချက်တွေအရလည်း ပါတာပေါ့နော်။ အဓိကနည်းလာရတာကတော့ အဖမ်းဆီးတွေများလာ ကြောင့်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ အကောင်ရေပမာဏ ဘယ်လောက်ထိပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတာ ကျတော့ ပြောဖို့အခက်အခဲရှိပါ တယ်” ဟု ကိုအံ့မောင်က ဆိုသည်။
ယခုကဲ့သို့ ငမန်းနှင့် ငါးလိပ်ကျောက်အကောင်ရေလျော့ကျလာမှုသည် ရေအောက်ဂေဟစနစ်အပေါ်များစွာ အကျိုးသက်မှုရှိ သဖြင့် ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများအနေဖြင့် ငမန်းနှင့် ငါးလိပ်ကျောက်များကို ဖမ်းဆီးမှု လျှော့ချရန်လိုအပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့် သဘာဝအပင်အဖွဲ့(FFI)မှ ရေချိုနှင့်အဏ္ဏဝါရေပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် မန်နေဂျာ ဦးဇော်လွန်း ကပြောသည်။“ဒီနှစ်မျိုးစလုံးက ပင်လယ်တွေရဲ့ အခြေအနေအညွှန်းကိန်းတွေဖြစ်ကြတယ်။ သူတို့ ရှိ၊မရှိကိုကြည့်ပြီး ပင်လယ်ပြင်ရဲ့ ထူးခြားမှုကိုသိနိုင်တယ်။ ဥပမာ-ဒီနေရာမှာ ဒီသတ္တဝါတွေရှိမနေဘူးဆိုရင် သေချာတယ်။ အဲဒီ ပင်လယ်ပြင်မှာ တစ်ခုခုဖြစ်နေပြီပဲ။ ဒါကြောင့် ဒီသတ္တဝါတွေကို ထိမ်းသိမ်းဖို့အတွက် ရေလုပ်သားတွေ ဘက်ကလည်း ဝိုင်းဝန်းထိမ်းသိမ်းဖို့လိုတယ်။ ဒါမှ ရေရှည်မှာ ရေလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်ပြေမှာ”ဟု သူကဆိုသည်။
“အခုတော့ ငါးလိပ်ကျောက်တွေက သိပ်ပြီးရတယ်လို့တော့ မမြင်မိတော့ဘူး။ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်လောက်က ဆိုရင် အများ ကြီးပဲ တော်တော်ပေါတယ်။ ဒီကြားထဲမှာ ယိုးဒယားဘက်ကလာတဲ့ မျှားတွေနဲ့ အသားကုန် ဖမ်းပစ်လိုက်ကြတော့ အခုဆိုရင် တစ်ရက်နေလို့ တစ်ကောင်တောင် မရကြတော့ဘူး။ ရရင်တောင်နေ့တိုင်း မရကြတော့ဘူး”ဟု ၎င်းကဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ငါးမန်းမျိုးစိတ် ၅၀ ကျော်နှင့် ငါးလိပ်ကျောက်မျိုးစိတ် ၇၀ ကျော်ရှိသည့်အနက် ငါးမန်းမျိုးစိတ် ၁၃ မျိုး၊ ငါးလိပ်ကျောက် မျိုးစိတ် ၁၄ မျိုး၊ စုစုပေါင်း ၂၇ မျိုးကို ဦးစားပေးထိန်းသိမ်းရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် နှင့် သဘာဝအပင်အဖွဲ့(FFI)ထံမှ သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76426
ရခိုင်ပြည်နယ် မာန်အောင်မြို့တွင် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ရခိုင်အမျိုးသား ပါတီ (ANP) ကို ဝန်းရံသူ အင်အား ၂၀၀၀ ကျော် ခန့်မှာ ပါတီအောင်နိုင်ရေး သီချင်းဖွင့်ကာ ဆိုင်းဘုတ်များ၊ အလံများကို ကိုင်ဆောင်ပြီး ကား၊ ဆိုင်ကယ်များဖြင့် မြို့အတွင်း လှည့်လည် အင်အားပြခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
မာန်အောင်မြို့နယ် ANP ပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ဦးကျော်သန်းက “ ကျနော်တို့ အစက လက်ကမ်း စာစောင်တွေ မျှဝေတာ။ အဲဒီမှာ ပါတီကို ထောက်ခံသူတွေက ဝန်းရံ ပါဝင်လာကြတယ်။ ဝန်းရံသူ ဦးရေကို ကျတော့ Mask ပေးတဲ့အခါ ကုန်သွားတာက ၂၀၀၀ လောက်ရှိတဲ့ အတွက်ကြောင့် လူ ၂၀၀၀ ကျော်ပါတယ်လို့ ပြောလို့ ရတယ်”ဟု ပြော သည်။ အဆိုပါ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကို မြို့ဝင်ဆိုင်းဘုတ်က စတင်ပြီး မြို့တွင်း ရပ်ကွက်တိုင်းနှင့် လမ်းများကို နံနက် ၈ နာရီခွဲ အချိန်မှ နေ့လယ် ၁၁ နာရီအထိ လှည့်လည်ခဲ့ကြခြင်းဖြစ်သည်။ မာန်အောင်မြို့နယ်သည် ပြီးခဲ့သည့်၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ၌ NLD ပါတီက အနိုင်ရခဲ့သည့် နေရာတခုဖြစ်သော်လည်း ယခုနှစ်တွင် ရခိုင်ပါတီများကို ဝန်းရံမှုပိုမိုများပြားလာ နေကြောင်း ANP ကပြောဆိုသည်။
ယင်းသို့များလာရခြင်းကို ဦးကျော်သန်းက “ အခုလို ANP ကို မာန်အောင်က ပြည်သူများ ဝန်းရံလာရခြင်းဟာ ရခိုင်မှာ ရွေးကောက်ပွဲနယ်မြေတွေကို ချုံ့လိုက်တဲ့ အတွက် ဒီအစိုးရကို ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် NLD ထက် ရခိုင်ပါတီ တွေကို မာန်အောင်ဒေသခံတွေက အားပေးလာတာဖြစ်တယ်” ဟု ဆိုသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက်ပိုင်းရှိ ANP အမာခံ ဖြစ်သော နယ်မြေတို့တွင် ရွေးကောက်ပွဲ မရှိတော့သည့်အတွက် တောင်ပိုင်း မဲဆန္ဒနယ်များမှာ ပိုအရေးကြီးသော ကြောင့် ယင်းသို့ အင်အားပြရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ထိပ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များက ပြောဆိုနေကြသည်။ ယခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် မာန်အောင်ကျွန်းတွင် ရခိုင်ပါတီများကိုသာ ပြည်သူတို့က ထောက်ခံမှု အားကောင်းနေပြီး ယင်း အထဲမှ ANP နှင့် ALD ပါတီနှစ်ခုသာ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မည်ဟု ဒေသခံများက သုံးသပ်နေကြသည်။ မာန်အောင်ဒေသခံ ကိုသီဟထွန်းက “ မာန်အောင်ကျွန်းမှာ ထိပ်သီး အင်အားကောင်းနေတာကတော့ ANP နဲ့ ALD တို့ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ တယ်။ သူတို့ပဲ ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မယ် ” ဟုပြောသည်။
လာမည့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် မာန်အောင်မြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံရေးပါတီများမှ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများနှင့် တသီးပုဂ္ဂလ ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ၂၉ ဦး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းအထဲတွင် တသီးပုဂ္ဂလ ၆ ဦး ပါဝင်ကြောင်းလည်း သိရ သည်။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/ 232158.html
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့တွေမှာ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေတာ ၅ ရက် ကြာရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မီးပြန် လာအောင် ပြင်ဆင်တပ်ဆင်ဖို့ လုံခြုံရေးအခြေအနေအရ သွားရောက်ခွင့် မရသေးဘူးလို့ မောင်တောခရိုင်လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာ ဦးဟိန်းမိုးထက်က ပြောပါတယ်။ “ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး အခုပြတ် တောက် နေတဲ့နေရာကို သွားခွင့်ရဖို့ တာဝန်ရှိသူတွေကို တင်ပြထားတယ်။ ဒီနေ့အထိ သွားခွင့်မပြုသေးဘူး။ အချိန်တော့ နည်းနည်းကြာနိုင်မယ်ထင်တယ်။ ဘာကြောင့် သွားခွင့်မပြုတာလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီနေရာတဝိုက်မှာ တိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေသေး တာကြောင့် လုံခြုံရေးစိတ်မချရလို့ ပြောတယ်။”မောင်တောခရိုင်ဖြစ်တဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့နဲ့ မောင်တောမြို့တွေမှာ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက် မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီကျော်လောက်ကစပြီး လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်နေရာမှာ အောက်တိုဘာ ၂၂ ရက် အထိ ပြန်လည်ရရှိခြင်းမရှိသေးတာပါ။
အခု လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုင်း ပြတ်တောက်တဲ့နေရာဟာ ရသေ့တောင်မြို့နယ်၊ ထီးစွဲကျေးရွာနဲ့ သောင်းဒရင်းကျေးရွာ အကြား ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ လျှပ်စစ် အင်ဂျင်နီယာက ပြောပါတယ်။ အဆိုပါနေရာဒေသတစ်ဝိုက်မှာ အခုရက်ပိုင်းအတွင်း တပ်မတော်နဲ့ အေအေတို့ တိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီး တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ ပစ်ခတ်ရာကနေ လက်နက်ကြီးကျည်စထိမှန်ကာ ဓာတ်အားလိုင်းကြိုး ပြတ်တောက်သွားတာလို့ ဒေသခံတွေက ပြောပါတယ်။ မောင်တော မြို့နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့တွေမှာ ပြီးခဲတဲ့ သြဂုတ် ၂၄ ရက်ကလည်း လက်နက်ကြီးကျည်ထိမှန်သွားပြီး လျှပ်စစ်ကြိုးပြတ် တောက်သွားလို့ ရက် ၁၀ ကျော်ကြာ လျှပ်စစ်မီးပြတ်သွားခဲ့ဖူးပါတယ်။ http://burmese.dvb.no/archives/418572
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့နယ်မှာ ကိုဗစ်-၁၉ အတည်ပြုလူနာ ၂ ယောက်တွေ့တယ်လို့ နယ်စည်းမခြား ပရဟိတ အဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က တခြားမြို့နယ်ကနေ သီပေါမြို့ကိုလာတဲ့ ကျောင်းဆရာမ ၁ ဦး အထက(၁)ကျောင်းမှာ ကွာရန်တင်းဝင်နေရာက ရောဂါပိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သီပေါဆေးရုံကို ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်နေ့ကလည်း ရန်ကုန်ကနေပြန်လာတဲ့ အမျိုးသမီးကို သူရဲ့ နမ့်လန်မြောက်ပိုင်း ရပ်ကွက်နေအိမ်မှာပဲ ကွာရန်တင်းထားရာကနေ ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး နမ့်လန်ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးကို ပို့ဆောင်ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ပိုးတွေ့ လူနာ ၂ ဦး နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့သူတွေကို လတ်တလောမှာ ကွာရန်တင်းထားထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ http://burmese.dvb. no/archives/418674
လက်ရှိဖြစ်ပွားနေသည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ရေးဆွဲနေသည့် နိုင်ငံအဆင့်ရေနံယိုဖိတ်မှု တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေး စီမံချက်အတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်သို့ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုများ မလုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်း ရေကြောင်းပို့ ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသည်။
အဆိုပါ စီမံချက်ကို အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပင်လယ်ရေကြောင်းအဖွဲ့(IMO)၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလက စတင်ရေးဆွဲနေခြင်းဖြစ်ကာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်တွင် ရေနံ ယိုဖိတ်မှုဖြစ်ပွားပါက အရေးပေါ်တုန့်ပြန်မှု ပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက် ရေးဆွဲရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်(နည်းပညာ) ဦးကိုကိုနိုင်ကဆိုသည်။“ပြောရရင်တော့ ရခိုင်ပြည်နယ်က အရေးကြီးဆုံးလို့ ပြောလို့ရတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရခိုင်ပြည်နယ် မဒေးကျွန်း တစ်ခုတည်းမှာတင် မတော်တစ်ဆမှုဖြစ် ခဲ့ရင် တစ်မိနစ်မှာတင် တန်ရာနဲ့ချီပြီး ယိုဖိတ်တာတွေ ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဦးစားပေးပြီး ရေးဆွဲချင်ပေမယ့် ဒီအချိန် မှာ လမ်းတွေအကုန်ပိတ်ထားတော့ သွားလာဖို့မလွယ်တဲ့အတွက် ရန်ကုန်နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းအတွက်ကိုပဲ အရင်ဆုံးပြီးသ လောက်ဆွဲနေတယ်”ဟု သူကပြောသည်။
ရေနံယိုဖိတ်မှု တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်မှာ နိုင်ငံတိုင်းတွင် မဖြစ်မနေရှိသင့်သည့် စီမံချက်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သဘောင်္ကြီး များ၊ သဘောငယ်များ သွားလာနေသည့်ဒေသများတွင် ရေနံယိုဖိတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါက မည်သို့တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရမည်များကို Plan ရေးဆွဲထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သားငှက်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ (WCS-Myanmar)မှ ဒုတိယဌာနေတာဝန်ခံ ဦးကျော်သင်းလတ် က ဆိုသည်။ လက်ရှိတွင် နိုင်ငံအဆင့်ရေနံယိုဖိတ်မှု တုန့်ပြန်ဆောင်ရွက်ရေးစီမံချက်တွင် အစိတ်အပိုင်း ပါဝင်သည့် Sensitivity Mapping Survey လုပ်ဆောင်ခြင်းကို ကမ်းရိုးတန်းဒေသအချို့တွင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနထံမှ သိရသည်။ https://www.bnionline.net/mm/news-76454
၁။ နမျခမျ၊ အငျဂါးဂါး စဈပွေးဒုက်ခသညျမြားကို တနိုငျးမွို့တှငျ ပွနျလညျနခေထြားပေး
၂။ တောငျကုတျတှငျ ANP ပါတီ အငျအားပွ လှညျ့လညျ
၃။ မွို့နယျ ၆ ခုကို ပွနျသုံးသပျပေးရနျ TNP ပါတီက UEC ထံတငျပွ
၄။ ပလကျဝ ဒသေခံမြားထံမှ ဆနျကို AA အဖှဲ့ ခွိမျးခွောကျပွီး ဈေးနှိမျဝယျ
၅။ မွနျမာပွညျက ခငျြးဒုက်ခသညျတှကေို ကနျကူညီဖို့ ပွညျပရောကျ ခငျြးတိုငျးရငျးသားတှေ တောငျးဆို
၆။ မျောခြီးဒသေအန်တရာယျဇုနျမှာနတေဲ့သူတှေ အပွီးပွောငျးရှဖေို့ မလိုလားကွ
၇။ ကရငျအခငျြးခငျြး စညျးလုံးမှုပကျြပွားစသေညျ့ မဲဆှယျမှုမြားမလုပျရနျ ရနျကုနျကရငျစာယဉျ သဘောထားထုတျပွနျ
၈။ ပလကျဝသို့ စဈတှဘေကျမှပို့သညျ့မဲရုံသုံးပစ်စညျးမြား ယနထေိ့မရောကျသေး
၉။ ဆှမျပရာဘှမျ ကြေးရှာနယျနမိတျအတှငျး ရှသေတ်တုတူးဖျောမှုကို ရပျဆိုငျးပေးရနျတောငျးဆို
၁၀။ ကြောကျဖွူ စနဲမွို့အနီး မိုငျးပေါကျကှဲ၍ ၂ ဦးသေ၊ ၂ ဦးဒဏျရာရရှိ
၁၁။ ကိုဗဈကာကှယျရေး စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြား ပိုမိုလိုကျနာစရေနျ KNU ညှနျကွားခကျြထုတျ
၁၂။ မျောလမွိုငျမွို့အတှငျး မှနျညီညှတျရေးပါတီထောကျခံသူမြား စုရုံးလှညျ့လညျအငျအားမပွကွရနျ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေး အဖှဲ့ မတ်ေတာရပျခံ
၁၃။ ဆီဆိုငျတှငျ ပါတီဝနျးရံသညျ့ယာဉျမတျောတဆဖွဈ၊ ၃ ဦး သဆေုံးပွီး ၁ ဦး ဒဏျရာပွငျးထနျ
၁၄။ Stay Home ကွညောထားသညျ့ ကခငျြမှ မွို့နယျ ၂ ခုတှငျ မဲဆှယျစညျးရုံးခှငျ့မပွု
၁၅။ ပေါငျမွို့နယျတှငျ မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) ဝနျးရံထောကျခံသူ အငျအား ထောငျနှငျ့ခြီ လှညျ့လညျမဲဆှယျ
၁၆။ တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးကို ပိတျပငျပွီး အာဏာရပါတီရှုံးနိုငျသညျ့ မဲဆန်ဒနယျအခြို့ ပယျဖကျြမှုအပျေါ ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအား ရှုတျခကြွောငျး UNDP ပါတီ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး နျောအုနျးလှ ပွောကွား
၁၇။ နမ်မတူမွို့နယျ ပနျလုံကြေးရှာတှငျ ၂ ရကျဆကျတိုကျ လူသအေလောငျးမြားတှေ့
၁၈။ ကြောကျမဲက ကြေးရှာအုပျစု ၁၂ စုကို ရှေးကောကျပှဲကငျြးပပေးရနျ တောငျးဆိုမညျ
၁၉။ ၂၀၁၅ အတှေ့ အကွုံနှငျ့ ၂၀၂၀ အတှကျမြှျောလငျ့ခကျြ အစီရငျခံစာထုတျပွနျ၊ ပွညျထောငျစုအစိုးရအား ဗဟို ခြူပျကိုငျမှုလြော့ခရြနျ တောငျးဆို
၂၀။ ပွညျနယျအတှငျးရှိ မိနျးကလေးဦးရေ ၁၅၀၀၀ ကြျောကို သားအိမျခေါငျးကငျဆာ ကာကှယျဆေးထိုးပေးမညျ
၂၁။ မွဈကွီးနား ကားကွီးကှငျးကို အောကျတိုဘာလကုနျထိ ပိတျထားမညျ
၂၂။ ဂုတျတှငျးလမျးပျေါတှငျ ကုနျတငျယာဉျ နှဈစီးတိမျးမှောကျမှု ဖွဈပျေါခဲ့ပွီး လမျးပိတျဆို့မှု ဖွဈပှားခဲ့
၂၃။ နယျမွအေပျေါ ဝဲပြံသနျးသညျ့ တပျမတျော ရဟတျယာဉျတဈစီးကို ခွိမျးခွောကျပဈခတျခဲ့ဟု KNU ဆို
၂၄။ သြှမျးပွညျအစိုးရ ကြောကျမဲ စဈရှောငျ ၁၇၀၀ ကြျောထောကျပံ့ဟုဆို
၂၅။ ရခိုငျတှငျ မြိုးတုနျးလုဖွဈနသေညျ့ ငမနျးနှငျ့ငါးလိပျကြောကျမြားကို အလှနျအကြှံဖမျးဆီးမှုမြားကွောငျ့ လြှော့နညျးလာ
၂၆။ ANP ပါတီ အောငျနိုငျရေး မာနျအောငျတှငျ အငျအားပွပွနျ
၂၇။ မောငျတောခရိုငျလြှပျစဈမီးပွတျတောကျမှု ၅ ရကျကွာရှိလာ၊ လုံခွုံရေးအရ သှားပွငျခှငျ့မရသေး
၂၈။ သီပေါတှငျ ကြောငျးဆရာမ ၁ ဦးအပါအဝငျ ကိုဗဈ-၁၉ လူနာ ၂ ဦးတှရှေိ့
၂၉။ ကိုဗဈကွောငျ့ ရခိုငျတှငျ ရနေံယိုဖိတျမှုတုနျ့ပွနျရေး စီမံခကျြအတှကျ ကှငျးဆငျးစဈဆေးမှုမြား မလုပျနိုငျ
တနိုငျးမွို့ရှိ စဈရှောငျစခနျးမြားတှငျ ခိုလှုံနကွေသော နနျခမျ၊ အငျဂါးဂါးကြေးရှာမှ စဈရှောငျ အိမျထောငျစု ၂၆ စုကို ပွနျလညျ နရောခထြားရေးအဖွဈ အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျနတှေ့ငျ ဖှငျ့ပှဲ ပွုလုပျခဲ့ကွသညျ။ ရှနှေငျ့ ပယငျး သတ်တုထှကျရှိရာ ၎င်းငျးတို့ ဒသေတှငျ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှစတငျပွီး အစိုးရတပျမတျောက နယျမွရှေငျးလငျးရေးလုပျရာ ကခငျြလှတျလပျရေးတပျမတျော KIA နှငျ့ တိုကျပှဲ ဖွဈပှားခဲ့သောကွောငျ့ တနိုငျးမွို့စဈရှောငျစခနျးတှငျ စဈပွေးဒုက်ခသညျအဖွဈ ၃ နှဈခနျ့ခိုလှုံနခြေိနျ ယခု စဈရှောငျ အိမျထောငျစု အခြို့က ပွနျလညျနရောခထြားရေးကို ရှေးခယျြခဲ့ကွသညျဟု သိရသညျ။
“ကြှနျတျောတို့ရဲ့ အစီအစဉျက နရေပျပွနျဖို့ဖွဈတယျ။ ဒါပမေဲ့ နရေပျပွနျဖို့ အစိုးရနှငျ့ စဈတပျနှငျ့ အုပျခြူပျရေးဆိုကျဘကျ ရော အကွိမျကွိမျ ဆှေးနှေးတိုငျပငျကွညျ့ပမေဲ့ သူတို့ရှာကို ပွနျဖို့က မပွောနဲ့တော့ သှားကွညျ့ဖို့တောငျ အရမျးခကျခဲတယျ။ လုံခွုံမှုမရှိဘူး။ ဘယျခြိနျမှ ပွနျနိုငျမလဲဆိုတာကို ဘယျသူမှ မဖွပေေးနိုငျတာကွောငျ့ စဈရှောငျမှာဘဲ နမေယျဆိုလညျး တဈနရောတညျးမှာဘဲ ကွပျတိတျပွီး လုပျကိုငျစားသောကျဖို့ခကျခဲတယျ။ ဒါကွောငျ့ သူတို့ကိုယျ့ဘဝကိုကို ကိုယျရပျတညျ နိုငျဖို့ရညျရှယျခကျြဖွငျ့ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ဆောငျရှကျပေးခွငျးဖွဈတယျ။” ဟု ပွနျလညျနရောခထြားရေး တာဝနျခံဆရာ အငျဖနျနျောတောငျ က ပွောသညျ။ ၂၀၁၇ ဇှနျလ ၆ ရကျနေ့ နမျခမျကြေးရှာ တိုကျပှဲကွောငျ့ စတငျထှကျပွေးလာသူမြား ဖွဈပွီး ယခု ၃ နှဈအကွာ စဈရှောငျစခနျးတှငျနထေိုငျလာရာမှ ၎င်းငျးတို့ကိုယျတိုငျတောငျးဆိုမှုကွောငျ့ ဆောငျရှကျပေးခွငျးဖွဈ သညျဟု ၎င်းငျးကဆကျလကျပွောဆိုသညျ။
လကျရှိခြိနျမှာ ပွနျလညျနရောခထြားရေး နအေိမျသို့ ပွောငျးရှနေ့ထေိုငျမညျ့ စဈရှောငျပွညျသူမြားအတှကျ ပညာရေး အဆောကျအအုံ၊ ကနျြးမာရေးစောငျ့ရှောကျခှငျ့နှငျ့ ကွာရှညျခံ အသကျမှေးဝမျးကြောငျးထိနျးနိုငျဖို့ လယျယာဖျောထုတျရေး၊ နညျးပညာ၊ လကျမှုပညာအစရှိသညျ့ အခှငျ့အလမျး ကူညီထောကျပံ့မှုမြား လိုအပျနကွေောငျးသိရသညျ။ တနိုငျးမွို့ ကတျသလဈစဈရှောငျစခနျးတှငျ လကျရှိ နမျခမျကြေးရှာ၊ အောငျလောဒျ၊ ဆှတျအိနျယနျ၊ ဆှတျရာ စသညျ့ကြေးရှာမြားမှ စဈ ရှောငျပွညျသူ ၇၂၃ ဦးရှိ ဆကျလကျခိုလှုံနကွေောငျး သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/22/l3-4/
ရခိုငျပွညျနယျ တောငျကုတျမွို့တှငျ အောကျတိုဘာလ၂၁ ရကျ နံနကျပိုငျးက ရခိုငျအမြိုးသား ပါတီ (ANP) ကို ဝနျးရံသူ အငျအား ၂၀၀၀ ကြျောခနျ့မှာ ပါတီအောငျနိုငျရေး ဆိုငျးဘုတျမြား၊ အလံမြား၊ ကား၊ ဆိုငျကယျမြားဖွငျ့ မွို့အတှငျး လှညျ့ လညျ အငျအားပွခဲ့ကွောငျး သတငျးရရှိသညျ။ တောငျကုတျမွို့နယျ ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ဒုဥက်ကဋ်ဌ ဦးဖကွှေယျက “ဒီနေ့ မွို့ ပျေါ ၄ ရပျကှကျမှာ ANP အောငျနိုငျရေးအတှကျလှညျ့လညျ အငျအားပွကွတာ။ ရပျကှကျထဲက ပါတီကိုအားပေး ထောကျခံ တဲ့သူတှကေ ပါဝငျပူးပေါငျးကွတာ လူ ၂၀၀၀ ကြျောလောကျ ရှိတယျ”ဟု ပွောသညျ။ ယငျးသို့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေး အငျအား ပွခွငျးကို ခြောငျးကုနျးရပျကှကျရှိ ANP မွို့နယျရုံးမှ ဦးဥတ်တမလမျး အပါဝငျ မွို့ပျေါ ရပျကှကျမြားသို့ နံနကျ ၈ နာရီ ခှဲအခြိနျမှ နလေ့ယျ ၁၂ နာရီအထိ လှညျ့လညျခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးရှိ ANP အမာခံဖွဈသော နယျမွတေို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲ မရှိတော့သညျ့အတှကျ တောငျပိုငျး မဲဆန်ဒနယျမြားမှာ ပိုအရေးကွီးသောကွောငျ့ ယငျးသို့ အငျအားပွရခွငျး ဖွဈကွောငျး ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ထိပျပိုငျးခေါငျး ဆောငျမြားက ပွောသညျ။ ANP ဗဟိုမူဝါဒရေးရာ ကျောမတီဝငျ ဦးဖသေနျးက “မွောကျပိုငျးက ANP အနိုငျရတဲ့ မဲဆန်ဒနယျ တှဟော အားလုံးအဖကျြခံရတယျ။ ဒီနှဈမှာ ရှေးကောကျပှဲက တောငျပိုငျးမှာပဲ မြားနတော။ ဒါကွောငျ့ လာမယျ့ လှတျတျော ကို ထိနျးခြုပျနိုငျဖို့နဲ့ ပွညျနယျအစိုးရကို ဖှဲ့စညျးနိုငျဖို့အတှကျ ဒီအခွအေနတှေဟော တောငျပိုငျးမှာပဲစုပွုံနတော။ တောငျပိုငျး ဟာ အရငျတုနျးက NLD အနိုငျရတဲ့ နရောဖွဈတဲ့အတှကျကွောငျ့ ANP အနနေဲ့ အမြိုးသားရေးလက်ခဏာ တခုဖျောဆောငျ နိုငျအောငျ ဒီဒသေတှမှော အနိုငျရဖို့ လိုတယျ”ဟု ပွောသညျ။
တောငျကုတျမွို့နယျသညျ ပွီးခဲ့သညျ့၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ၌ အမြိုသား ဒီမိုကရစေီ အဖှဲ့ခြုပျပါတီ (NLD) က အနိုငျရရှိခဲ့ သော နရောဖွဈသျောလညျး ယခုနှဈတှငျ ANP ကို ဒသေခံမြား ဝနျးရံမှု မြားနကွေောငျး မွို့ခံမြားက မှတျခကျြပွုကွသညျ။ တောငျကုတျမွို့ခံ ကိုအောငျနလေငျးက “သူတို့ မဲဆှယျတာကို တှရေ့သလောကျတော့ ပွီးခဲ့တဲ့ ပါတီတှေ အငျအားပွ တုနျးက လူ ၁၀၀ ကြျောလောကျပဲ တှရေ့တယျ။ အခုကတော့ ANP ကိုကတြော့ အလှနျမြားနတေယျ။ နောကျပွီးတော့ ၂၀၁၅ ခုနှဈကထကျ ဒီနှဈတော့ ANP ကို ထောကျခံမှုမြားတာကိုတှရေ့တယျ”ဟု ဆိုသညျ။ တောငျကုတျမွို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပသညျ့ မွို့ပျေါ ရပျကှကျ ၄ ရပျကှကျမှာ ခြောငျးကောကျ၊ သိမျတောငျ၊ ဂူတာ၊ ကံပိုငျ စသညျ့ ရပျကှကျ ၄ ရပျကှကျဖွဈပွီး ဆန်ဒမဲ ပေးခှငျ့ရှိသူ လူဦးရေ ၂၀၀၀၀ ကြျောသာ ကနျြရှိတော့ကွောငျးလညျး သိရသညျ။ https://burma.i rrawaddy.com/news/2 020/10/21/232099.html
ပလောငျ (တအနျး) လူမြိုးအမြားစု နထေိုငျသညျ့ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျးမှ မွို့နယျ ၆ ခုအတှငျး ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျကွောငျး သတျမှတျခကျြကို ပွနျလညျသုံးသပျ ပွငျဆငျပေးရနျ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ (UEC) နှငျ့ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျကျောမရှငျမြား ထံသို့ တအနျးအမြိုးသားပါတီ (TNP) က စာပေးပို့ထားသညျဟု သတငျးရရှိသညျ။ UEC က အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျတှငျ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျသညျ့ နယျမွမြေားကို ကွငွောရာ ရှမျးပွညျနယျ မှ မွို့နယျ ၆ မွို့နယျ၏ နယျမွအေားလုံး၊ အခွားမွို့နယျ ၁၆ ခုမှ ရပျကှကျ ၈ ခုနှငျ့ ကြေးရှာအုပျစု ၁၃၃ စု တို့ ပါဝငျခဲ့သညျ။ ထိုထဲမှ ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ မူဆယျ၊ လားရှိုး၊ ကှတျခိုငျ၊ နမျ့ဆနျ၊ မနျတုံ နှငျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျတို့ အတှငျး ပယျဖကျြခံရသညျ့ ရပျကှကျ ၁ ခုနှငျ့ ကြေးရှာအုပျစု ၃၆ စုတို့မှာ တအနျးလူမြိုး အမြားစု နထေိုငျသညျ့ နရောမြားဖွဈသညျ့ အပွငျ ပဋိပက်ခလညျး မရှိဟု ဆိုကာ ပွနျလညျသုံးသပျပေးရနျ TNP က တောငျးဆိုထားခွငျး ဖွဈသညျ။
TNP ၏ အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဦးတာကြျောအောငျက “ကနြျောတို့ TNP အနနေဲ့ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျ ကျောမရှငျတှေ ကို စာတငျလိုကျပါပွီ။ ကနျ့သတျတဲ့ နယျမွတှေကေို ပွနျစဉျးစားပေးဖို့ပါ။ မွို့နယျအလိုကျခငျြးစီက ရတဲ့သတငျး အခကျြ အလကျ အပျေါမှာမူတညျပွီး ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရော ပွညျနယျ၊ ခရိုငျကိုရော ပွနျလညျသုံးသပျပေးဖို့ စာတှတေငျ ထားပါပွီ”ဟု ပွောသညျ။ သကျဆိုငျရာ မွို့နယျ ကျောမရှငျမြားကို TNP ၏ မွို့နယျအလိုကျ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ ပါတီရုံးမြားမှ အောကျတိုဘာ ၂၀ ရကျက စာတငျလိုကျခွငျး ဖွဈပွီး UEC ကို TNP ဗဟိုက ယနေ့ စာပေးပို့လိုကျသညျဟု သိရ သညျ။ ကျောမရှငျအဆငျ့ဆငျ့သို့ပေးပို့သညျ့ စာထဲတှငျ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျကွောငျး သတျမှတျခံရသညျ့ နယျမွမြေား မှာ နိုငျငံရေးပါတီအားလုံး ဝငျထှကျကာ မဲဆှယျစညျးရုံးနိုငျသညျ့ ကြေးရှာမြားဖွဈကွောငျး၊ တိုကျပှဲမရှိသညျ့ နယျမွမြေား ဖွဈကွောငျးနှငျ့ လူထုကိုယျတိုငျကလညျး မဲပေးလိုသဖွငျ့ မဲပေးခှငျ့ မဆုံးရှုံးစရေနျ လိုအပျကွောငျးတို့ကို အဓိကထား တငျပွ ထားသညျဟု သိရသညျ။
ထို့ပွငျ နမျ့ဆနျမွို့နယျအတှငျးမှ ပယျဖကျြခံရသညျ့ ပနျနငျး၊ မွို့သဈ နှငျ့ ကြောကျဖွူလေး ကြေးရှာအုပျစုတို့သညျ တိုကျပှဲ မရှိသညျ့ အပွငျ မွို့နယျသဈကြေးရှာအုပျစု တစုတညျးတှငျ လာရောကျတာဝနျထမျးဆောငျနကွေသညျ့ အစိုးရ ဝနျထမျး၊ ပညာရေး၊ ကနျြးမာရေး ဝနျထမျးမြားမှာ ဦးရေ ၁၀၀ ဝနျးကငျြ အထိ ရှိပါသညျဟု ဦးတာကြျောအောငျက ပွောသညျ။ ကြောကျဖွူလေးကြေးရှာအုပျစုမှ ဥက်ကဋ်ဌ ဦးစောလှိုငျကလညျး ၎င်းငျးတို့ ကြေးရှာအုပျစုတှငျ တိုကျပှဲလညျး မရှိဘဲ အခွအေနေ တညျငွိမျနသေညျ့ နယျမွေ ဖွဈသဖွငျ့ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပကွောငျး ကွငွောလိုကျသညျ့ အပျေါ ဒသေခံမြားက လကျခံနိုငျခွငျး မရှိပါဟု ပွောသညျ။ TNLA ၏ သတငျးနှငျ့ ပွနျကွားရေးတာဝနျခံ ဗိုလျမှူး မိုငျးအိုကျကြျောက ၂၀၂၀ ခုနှဈ၊ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲကို ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံအခွခေံ ဥပဒအေောကျတှငျ ကငျြးပခွငျးကွောငျ့ ထောကျခံခွငျး မရှိသျောလညျး လူထုက ဒီမိုကရစေီကငျြ့စဉျအရ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မဲလှတျလှတျလပျလပျ ပေးနိုငျရနျ ၎င်းငျးတို့ တပျဖှဲ့ဝငျမြားက နှောငျ့ယှကျ ခွငျးပွုမညျမဟုတျဟု ပွောသညျ။ ၎င်းငျးတို့ လှုပျရှားသညျ့ နယျမွမြေားတှငျ နိုငျငံရေးပါတီမြား ဝငျထှကျသှားလာပွီး မဲဆှယျ စညျးရုံးသညျကိုလညျး နှောငျ့ယှကျခွငျး၊ ဟနျ့တားခွငျးမြား လုပျမညျ မဟုတျကွောငျး ဗိုလျမှူး မိုငျးအိုကျကြျောက ပွောဆို ထားသညျ။ https://burma.irrawad dy.com/news/2020/10/21/232100.html
ခငျြးပွညျနယျ တောငျပိုငျး ပလကျဝမွို့နယျတှငျ တိုကျပှဲမြားကွောငျ့ ဆနျ ခကျခကျခဲခဲ ဝယျယူနရေသညျ့ ဒသေခံမြားထံမှ ရက်ခိုငျ စဈတပျ (AA) က ဈေးနှိမျပွီး ဆနျဝယျယူခွငျး၊ အဓမ်မ ဆနျတောငျးခံခွငျးမြား ပွုလုပျနသေညျဟု ခငျြးလူ့အခှငျ့အရေး အဖှဲ့ (CHRO) က ကွညောခကျြ တစောငျ ထုတျပွနျကာ ပွောဆိုလိုကျသညျ။ CHRO မှ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဆလိုငျးလနျြက “ဆနျက အကနျ့အသတျနဲ့ ဝယျယူနရေတဲ့ အခြိနျမှာသူတို့က တဖကျက ပွနျ ဝယျယူနတေော့ အခွအေနကေ ဆိုးနတေဲ့ အခွအေနမှော ရှိနပေါတယျ။ ကနြျောတို့ မှတျတမျးအရဆို ဆနျတှေ၊ ပိုကျဆံ တှေ သူတို့ ကောကျနတော ၂ နှဈ ရှိပါပွီ။ အခု လကျရှိဖွဈနတောဆိုရငျ ငရှား အုပျစုပါ။ တဖကျမှာ မပေးနိုငျသူတှကေို ဒဏျငှေ ရိုကျတာတှလေညျး လုပျတယျလို့ ကနြျောတို့ သတငျး ရထားပါတယျ” ဟု ပွောသညျ။
AA က ဆနျ အဓမ်မတောငျးယူသညျ ဟုဆိုကာ CHRO ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ့ နရောမြားမှာ ငရှားကြေးရှာ အုပျစုအတှငျးရှိ ငရှား၊ ကွောငျခြောငျး၊ ဘောငျဝ၊ နှုံးဘူးကွီးနှငျ့ နှုံးဘူးငယျ ရှာတို့ ဖွဈပွီး လကျရှိပေါကျဈေး ဆနျတအိတျ လြှငျ ၇၅၀၀၀ ကပျြ ဝယျယူနရေသညျကို ၄၀၀၀၀ ကပျြဖွငျ့သာ ပေးခသြေညျ ဟု ဆလိုငျးလနျြက ဆိုသညျ။ CHRO ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ AA က ရှာသားမြားထံမှ ဈေးနှိမျပွီး ဆနျဝယျသညျ့အပွငျ ဆနျ ၁ တငျးအိတျလြှငျ ကပျြ ၂၀၀၀ ဖွငျ့ ထမျးပွီး AA တပျဖှဲ့ဝငျမြား စခနျးခသြညျ့ နရောသို့ ပိုိ့ခိုငျးသညျ ဟုလညျး ရေးသားထားသညျ။ CHRO ၏ ထုတျပွနျခကျြတှငျ ဖျောပွထားသညျ့ ဖွဈစဉျသညျ လှနျခဲ့သညျ့ စကျတငျဘာ ၁၄ ရကျတှငျ ဖွဈပှားခဲ့ခွငျး ဖွဈ သညျ ဟု သိရသညျ။ ဖွဈစဉျမှာ တလကြျောကွာပွီ ဖွဈသျောလညျး အောကျတိုဘာ ၂၀ ရကျမှ ထုတျပွနျရခွငျးမှာ ပလကျဝမွို့နယျသညျ အငျ တာနကျ ဖွတျတောကျ ခံထားရပွီး လမျးပနျးဆကျသှယျရေးလညျး ခကျခဲသဖွငျ့ မွပွေငျမှ သတငျးအခကျြအလကျမြား ရရှိ သညျမှာ နောကျကပြွီး ဖွဈစဉျ မှနျမမှနျကို ပွနျ အတညျပွုနရေခွငျးကွောငျ့ ကွနျ့ကွာသှားခွငျး ဖွဈသညျဟုလညျး ဆလိုငျး လနျြက ပွောသညျ။ CHRO သညျ ကုလသမဂ်ဂ လူမှုစီးပှားရေး ကောငျစီ (ECOSOC) က အထူးအကွံပေး အဆငျ့အဖွဈ၂၀၁၈ ခုနှဈမှ စတငျ သတျမှတျခံထားရပွီး မွနျမာနိုငျငံတှငျး ခငျြးလူမြိုးမြား၏ လူ့အခှငျ့အရေး အခွအေနမြေားကို စောငျ့ကွညျ့ လလေ့ာကာ မှတျတမျး ပွုစုနသေညျ့ အဖှဲ့ ဖွဈသညျ။
CHRO က လှတျလပျပွီး တရားမြှတသညျ့ အဖှဲ့အစညျးမဟုတျဘဲ ပလကျဝဒသေတှငျ AA ရှိနသေညျကို မလိုလားသဖွငျ့ အဖှဲ့အစညျး ဂုဏျသိက်ခာကအြောငျ လုပျကွံတိုကျခိုကျနသေညျဟုလညျး ဦးခိုငျသုခက စှပျစှဲသညျ။ ထို့ပွငျ ဦးခိုငျသုခက “ပလကျဝ မှာ တပျမ ၇၇ က စကျလှတေစီးကို ငါးသောငျးကနေ နှဈသိနျးအထိ ကောကျနတောရှိတယျ။ ပလကျဝ အထကျ ဘကျ ရှငျးလကျဝမှာ လိုငျလငျးပီဘကျကလာတဲ့ ဆနျကို တသောငျးကနေ နှဈသောငျးအထိ ကောကျတာ ရှိတယျ။ အဲဒီ လူ့ အခှငျ့အရေး အဖှဲ့တှကေ ဘာမှပွောတာ မတှရေ့ဘူး။ ဆနျဈေး တကျတာကလညျး ဗမာ စဈတပျက ပိတျဆို့ထားလို့ ဒါတှေ ကို သူတို့ မပွောဘူး။ ဒီ ရီပို့ ထုတျတဲ့ လူတှရေဲ့ သမာသမတျရှိမှုကို ကနြျောတို့က မေး ခှနျး ထုတျစရာ ရှိပါတယျ” ဟုလညျး ပွောဆိုသညျ။ မတျ ၂၉ ရကျကလညျး မွို့မိမွို့ဖမြားဖွငျ့ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ ပလကျဝမွို့နယျ စားနပျရိက်ခာသယျယူရေး ကျောမတီက ဆမီးမွို့မှ ပလကျဝမွို့သို့ ဆနျအိတျ ၁၀၀ ကြျော သယျလာရာ လမျးခုလတျတှငျ AA တပျဖှဲ့က ဖမျးဆီး စဈဆေးခဲ့ပွီး စားသောကျရေး အခကျအခဲရှိသညျဟုဆိုကာ ကာလပေါကျဈေး အတိုငျး ဆနျအိတျ၂၀ ရောငျးခပြေးရနျ ပွောဆို ညှိနှိုငျးပွီး မှ ပွနျလှတျပေးခဲ့သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/232119.html
အမရေိကနျအရှဘေ့ကျခွမျး မရေီလနျးပွညျနယျ ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြားအဖှဲ့ ( CAM – Chin Association Maryland ) က ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျပိုငျးအတှငျး အစီရငျခံစာ နှဈစောငျ ထုတျပွနျခဲ့ပွီး တခုကတော့ ခငျြးပွညျနယျနဲ့ ရခိုငျပွညျနယျတှမှော ဖွဈပှားနေ တဲ့ စဈရေးပဋိပက်ခကွောငျ့ အိုးအိမျစှနျ့ခှာ ထှကျပွေးနရေတဲ့ IDP ပွညျတှငျးဒုက်ခသညျ အကွောငျးနဲ့ နောကျတခုက အိမျနီး ခငျြး အိန်ဒိယနဲ့ မလေးရှားမှာ ရောကျနတေဲ့ ခငျြးဒုက်ခသညျတှအေကွောငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပွညျတှငျးဒုက်ခသညျ IDP ဖွဈနရေ တဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသား အနညျးဆုံး (၁၈,၀၀၀) လောကျရှိတယျလို့ CAM ရဲ့အစီရငျခံစာမှာ ဖျေါပွပါတယျ။ အိမျနီးခငျြး အိန်ဒိယ နဲ့ မလေးရှားနိုငျငံတှကေို ထှကျခှာသှားကွတဲ့ ခငျြးဒုက်ခသညျ အရအေတှကျကတော့ အိန်ဒိယမှာ (၁)သိနျးကြျောနဲ့ မလေးရှား မှာ ( ၅၆,၀၀၀) ကြျောရှိတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီလို ပွညျတှငျး/ပွညျပ ခငျြးဒုက်ခသညျတှကေို အမရေိကနျအစိုးရ အနနေဲ့ ထိရောကျတဲ့ အရေးပျေါ အကူအညီပေးရေးနဲ့ အမရေိကနျပွညျထောငျစုထဲမှာ ဒုက်ခသညျအဖွဈ အခွခြေ နထေိုငျခှငျ့ပေးဖို့ အောကျတိုဘာ (၂၁) ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ ပွုလုပျတဲ့ အှနျလိုငျး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲမှာ ရှငျးပွခဲ့ကွောငျး မရေီလနျးပွညျနယျ ခငျြး တိုငျးရငျးသားမြားအဖှဲ့ရဲ့ အမှုဆောငျ ဒါရိုကျတာ ဦးဇိုသှနျးမှုနျက VOA ကိုပွောပါတယျ။
“ ခငျြးပွညျနယျ၊ ပလကျဝ၊ ဆာမီးမှာရှိတဲ့ အဲဒီ IDP နဲ့ Refugee အကွောငျးကို ကနြျော Report ရေးပွီးတော့ ဒီနေ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲလုပျပါတယျ။ လုပျရတဲ့ရညျရှယျခကျြကတခုကတော့ ဒီ Refugee အကွောငျး မလေးရှားမှာ ၅ သောငျး နီးပါး ခငျြးတှရှေိတယျ။ ကနြျောတို့ တခွား မွနျမာပွညျက တိုငျးရငျးသားတှလေညျး ရှိတယျ။ အဲဒါကို သမ်မတ Trump ကနေ မြားမြားယူဖို့ ကနြျောတို့ တိုကျတှနျးတယျ။ ပွီးတော့ IDP ကတြော့ အခု မကွာခငျမှာ သမ်မတ Trump ကနေ နိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးဌာနကပဲ ဖွဈဖွဈ USAID ကပဲ ဖွဈဖွဈ လူသားခငျြးစာနာထောကျထားမှု အထောကျအပံ့ အထောကျ အကူကို အခုက လကျမှတျထိုးတော့မယျ။ ဒါကွောငျ့မို့ ခငျြးပဲဖွဈဖွဈ တခွား IDP တှကေို မြားမြားကူညီပါဆိုပွီးတော့ ကနြျောတို့ တိုကျတှနျး တာဖွဈပါတယျ။”VOA က တကျရောကျခဲ့တဲ့ အဲဒီ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲမှာ ဝါရှငျတနျဒီစီ အခွစေိုကျ ရှပွေ့ောငျးအခွခြေ သူမြားနဲ့ ဒုက်ခသညျမြား အကူအညီပေးရေး ကကျသလဈဘာသာဝငျမြားအဖှဲ့ ( Migration and Refugee Services) အမှု ဆောငျဒါရိုကျတာ Bill Canny ကလညျး ခငျြးဒုက်ခသညျတှအေပါအဝငျ မွနျမာနိုငျငံက အခွားတိုငျးရငျးသား ဒုက်ခသညျတှေ ကိုပါ လကျရှိထကျ အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုမှာ ပိုလကျခံဖို့ သမ်မတထရမျ့ အစိုးရကို တိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
မရေီလနျး ခငျြးတိုငျးရငျးသားမြားအဖှဲ့ရဲ့ အမှုဆောငျ ဒါရိုကျတာ ဦးဇိုသှနျးမှုနျက တော့ ပွညျတှငျး IDP တှအေတှကျ အခုလို နိုငျငံတကာကို အကူအညီတောငျးခံနပေမေယျ့ လကျရှိမှာတော့ စဈရှောငျဒုက်ခသညျစခနျးတှဆေီ အကူအညီ တိုကျရိုကျပေး ပို့နိုငျမယျ့ လမျးကွောငျးတှေ ပိတျပငျတားဆီးခံရတဲ့ အခွအေနမြေိုးရှိကွောငျး ရှငျးပွပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ ဆယျစုနှဈအတှငျး အမရေိကနျ ပွညျထောငျစုမှာ လာရောကျ အခွခေခြှငျ့ ရှိတဲ့ ခငျြးတိုငျးရငျးသား ဒုက်ခသညျ ပေါငျး အနညျးဆုံး ( ၆ သောငျး ၃ ထောငျ)လောကျ ရှိတယျလို့ အကူအညီပေးရေး အဖှဲ့တှကေ ပွောပါတယျ။ https://burmese.voanews.com/a/myan mar-chin-idp-report-usa-chin-association-of-maryand-/5631090.html
မျောခြီးဒသေ အန်တရာယျဇုနျထဲမှာရှိနတေဲ့ ၁၃ကုနျးချေါ ယူကျောခိုကြေးရှာရှိ နအေိမျတခြို့ကို အပွီးရှပွေ့ောငျးကွဖို့ အာဏာ ပိုငျတှကေ ထုတျပွနျထားပမေယျ့လညျး မွပွေငျမှာနထေိုငျသူတှကေ ခတ်ေတသာရှောငျရှားနတောဖွဈပွီး အပွီးပွောငျးရှဖေို့ မဖွဈနိုငျဘူး ဆန်ဒမရှိကွပါဘူး။ လကျရှိအခွအေနရေမှာတော့ အန်တရာယျဇုနျဖွဈနတေဲ့အတှကျ ဒသေခံတှကေ မိုးတှငျးကာလမှာ ဆိုရငျမနကွေပဲ တခွားဆှေးမြိုးအိမျတှမှော သှားရောကျနထေိုငျကွပွီး ပှငျ့လငျးရာသီရောကျရငျ အဲဒီမှာပွနျလာနပွေီး ခဲလုပျငနျးတှကေို လုပျကိုငျကွပါတယျ။
ဒျေါဖွူဖွူဝငျး က “သူတို့ကရှခေို့ငျးတာတော့မဟုတျဘူး။ အိမျကိုတော့မရှခေို့ငျးဘူး။ လူကိုပဲ ရှောငျခိုငျးတာပေါ့။ တကယျလို့ ဂဲလုံးတှကေလြာရငျ အန်တရာယျရှိတယျဆိုတော့သူတို့မှာ တာဝနျရှိတာပေါ့နျော။ အိမျရှလေို့တော့ တရားဝငျမကွငွောသေး ဘူး။ အခုထိလညျးမရှခေို့ငျးသေးဘူး။ တကယျလို့နမေယျဆိုရငျ ညတော့မအိပျနဲ့ပေါ့။ ညကွရငျတော့ရှောငျပေးပေါ့။ မိုးမြား ရငျ အန်တရာယျဖွဈမှာစိုးလို့ပေါ့။”လို့ ပွောပါတယျ။ အာဏာပိုငျတှကေ ရှပွေ့ောငျးခိုငျးတာမဟုတျပဲ အန်တရာယျကရြောကျမှာ စိုးလို့ ရှောငျခိုငျးတာပဲဖွဈတယျလို့ သူက ယူဆထားပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ လပိုငျးက ပွညျနယျလုံခွုံရေးနှငျ့နယျစပျရေးရာဝနျကွီး ၊ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီးနှငျ့ တခွားသကျဆိုငျရာ ဌာနဆိုငျရာတှကေနပွေီး ကှငျးဆငျး စဈဆေးရာမှာ အဲဒီအန်တရာယျဇုနျထဲမှာ မနကွေဖို့ အပွီးပွောငျးရှကွေ့ဖို့ ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးကို ညှနျကွားထားပါတယျ။ ၁၃ ကုနျးချေါ ယူကျောခိုကြေးရှာ အုပျခြုပျရေးမှူးဦးဆနျးဝငျးက “ သူတို့နဲ့လညျး လူစုံမတှရေ့ဘူး။ ဟိုဘကျဒီဘကျ ပွောငျး ရှနေ့တေော့ လူစုံမတှရေ့ဘူး။ ခုနက ပွောသလို သူတို့ကတော့အဲ့လိုမြိုး ဒီ ၂၅ လုံးကိုတော့ ရှပွေ့ောငျးဖို့ကိစ်စကိုတော့ ပွောသှားတယျ။ ခုနကပွောသလိုမြိုးဟိုနားကနရောလေးကိုတော့ အဲ့ဒီလကျပှတျပငျ KB-0 တို့ဆငျးတဲ့လမျးအဲ့နား တဈနေ ရာတော့ ကုမ်ပဏီတှေ ဘာတှနေဲ့ ညိုနိုငျးပွီးတော့မှဆောငျရှကျပေးမယျလို့တော့ရှိတယျ။ သဘာဝပတျဝနျးကငျြ ထိနျးသိမျး ရေးအဖှဲ့က ဒါ ၅ သောငျးကနေ ၁ သိနျးပေါ့။ သူတို့ကို ထှအေုပျကိုမေးလိုကျတော့ ထောကျပံ့ကွေးက ဘယျလောကျ လောကျရှိလဲတော့ ၅ သောငျးကနေ ၁ သိနျးလောကျပဲရှိတယျအဲလောကျပဲ။” လို့ ပွောပါတယျ။
ဌာနပေါငျးစုံကနေ တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ သကျဆိုငျရာကုမ်ပဏီတှကေ နှဈရကျဆကျတိုကျလာရောကျ စဈဆေးမှုတှပွေုလုပျပွီး တော့ ရှပွေ့ောငျးဖို့အတှကျ ရာအိမျမှူးတှကေို မှာကွားသှားကွတာဖွဈပါတယျ။ အိမျတနျဖိုးနဲ့ ရှပွေ့ောငျးသယျယူရေး စရိတျက ခနျ့မှနျး ငါးသောငျးနဲ့ တဈသိနျးကွားမှာသာ ရတဲ့အတှကျ မရှပွေ့ောငျးနိုငျဘူးလို့ နအေိမျပွောငျးရှမေ့ညျ့စရငျထဲမှာ ပါဝငျနတေဲ့ ဒျေါတငျမာစိုး ကပွောပါတယျ။ အိမျရှပွေ့ောငျးဖို့အတှကျ တိကတြဲ့နရောအသဈကို အစိုးရက သတျမှတျထား ခွငျးမရှိသေးပမေယျ့ ဒသေခံတှအေနနေဲ့ ခဲလုပျကှကျနှငျ့ဝေးကှာသှားမှာကိုစိုးရိမျနကွေတာပါ။ ဒါ့အပွငျ အခုလိုရှပွေ့ောငျး ဖွဈခဲ့မယျဆိုရငျ နောကျပိုငျးမှာ ကုမ်ပဏီတှအေနနေဲ့ အဲဒီနရောကို ခဲသတ်တလုပျငနျးတှေ လုပျကိုငျသှားမှာကိုလညျး ဒသေခံ မြား ထငျမွငျစိုးရိမျနကွေတာဖွဈပါတယျ။ မျောခြီးဒသေမှာ လကျရှိအခြိနျထိ ကွီးမားတဲ့ မွပွေိုမှု ၃ ကွိမျဖွဈပှားခဲ့ပွီး ၁၉၈၅ ခုနှဈ မှာ ပထမအကွိမျ၊ ၁၉၈၈ခုနှဈ မှာ ဒုတိယအကွိမျ နဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှဈမှာ တတိယအကွိမျ မွပွေိုမှုဖွဈပှားခဲ့ပွီး လူသဆေုံးမှုနဲ့ လူနအေိမျမြား ပကျြဆီး ခဲ့ရတယျလို့ သိရပါတယျ။ မျောခြီးခဲသတ်တုလုပျငနျးက နှဈပေါငျးတဈရာကြျောကွားရှိခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ မျောခြီးဒသေမှာတော့ တရားဝငျ လုပျကှကျ စုစုပေါငျး ၁၂၆ ကဉျြး ရှိပွီး လုပျသားဦးရေ ၁၃၀၇ ဦးရှိပါတယျ။ https://ww w.bnionline.net/mm/news-76411
ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကရငျရေးရာကိုယျစားလှယျလောငျးမြားအနဖွေငျ့ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကာလအတှငျး ကရငျလူမြိုး အခငျြးခငျြး အမြိုးသားရေးစိတျဝမျးကှဲစမေညျ့ စကားအသုံးအနှုနျးမြားနှငျ့ မဖွဈနိုငျသော ကတိကဝတျမြားပေးပွီး မဲဆှယျ စညျးရုံးခွငျးမပွုကွရနျ ရနျကုနျတောငျပိုငျးနှငျ့မွောကျပိုငျးခရိုငျ စာပယေဉျကြေးမှုကျောမတီမြားက သဘောထားထုတျပွနျ ပွောဆိုလိုကျသညျ။
မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကာလအတှငျး ကရငျကိုယျစားလှယျလောငျးမြား၏ဝနျးရံသူအခြို့၏ မလိုလားအပျသော မဲဆှယျစညျးရုံး ရေးကိစ်စရပျမြားကွောငျ့ ကရငျလူမြိုးမြားအကွား စညျးလုံးမှုပကျြပွားလာသညျ့ အခွအေနဖွေဈ ပျေါနသေညျ့အတှကျ အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျနကေ့ သဘောထား ထုတျပွနျလိုကျခွငျးဖွဈသညျဟု ကရငျစာပယေဉျကြေးမှု ကျောမတီ တာဝနျ ရှိသူမြားက ပွောသညျ။ ရနျကုနျတောငျပိုငျးခရိုငျ ကရငျစာပနှေငျ့ယဉျကြေးမှုကျောမတီအတှငျးရေးမှူး စမငျးမငျးက “ အခု လကျရှိ ကိုယျစားလှယျ လောငျးတှကေို ကိုယျစားပွုပွီးမဲဆှယျပေးသူတှကေ မလိုလားအပျတဲ့ အမုနျးစကားတှေ၊ ဥပမာ ကရငျ ကိုယျစားလောငျးတှကေို ပုဂ်ဂိုလျရေးအရ တိုကျခိုကျတာတှကေ အောကျခွမှောအခငျြးခငျြး ထိုးနှကျပွီးမဲဆှယျနကွေ တယျ။ ဒီလိုမြိုးတှေ လုပျတော့ ကရငျပွညျသူတှကေ ထငျယောငျထငျမှားနဲ့ အခွမျးခွမျးအစိတျစိတျကှဲကုနျပွီ။ အဓိကကတော့ စညျးလုံးညီညှတျမှုနဲ့ပွိုကှဲအောငျမရှိအောငျ၊ ဖိအားတှကွေောငျ့ မဲပေးရတဲ့ပုံစံမဟုတျဘဲ ဒီမိုကရစေီယဉျကြေးမှုအရလှတျ လပျစှာအောငျ မဲပေးနိုငျအောငျ ရညျရှယျတာဖွဈတယျ” ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
ကရငျရေးရာတကျကွှလှုပျရှားသူတဈဦးဖွဈသညျ့ စောထှနျးထှနျးက “ဒီအခြိနျ နိုငျငံရေးအခနျးကဏ်ဍမှာပါတီ အသီးသီးက ကနြျောတို့မဲဆှယျစညျးရုံးတဲ့အခါမှာ ကရငျလူမြိုးနဲ့ပတျသကျတဲ့အဖှဲ့စညျးအသီးသီးက ဦးဆောငျတဲ့ နရောတှမှောရှိတယျ လေ။ အဲဒီတော့စာယဉျသညျလညျး ကိုယျ့ကရငျစာပယေဉျကြေးမှုကို ဦးဆောငျနိုငျတဲ့ အဖှဲ့ အစညျးတဈရပျဖွဈ တဲ့အတှကျ ဒီလိုဦးဆောငျလမျးညှနျပွီး လုပျဆောငျပေးတာက ကောငျးတယျ။ နားလညျလကျခံသလို ကွိုဆိုလညျး ကွိုဆိုပါတယျ။ ထိုနညျးတူစှာပဲ အခွားသော အဖှဲ့အစညျးတှကေလညျး ဒီလိုမြိုးအားပေးတာမြိုး၊ ထုတျပွနျတာမြိုးတှလေညျး လုပျသငျ့ပါ တယျ။”ဟု ပွောသညျ။ လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ ၈ ရကျနတှေ့ငျကငျြးပမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ ရနျကုနျတောငျပိုငျးခရိုငျ ၁၀ မွို့နယျအတှငျး ကရငျ ရေးရာမဲဆန်ဒရှငျဦးရေ ၆၉,၀၂၃ ဦးနှငျ့ မွောကျပိုငျးခရိုငျ ၉ မွို့နယျအတှငျး ၁၁၃,၂၀၀ ဦးရှိကွောငျး အောကျတိုဘာလ ၁ ရကျနေ့ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီးရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ အဖှဲ့ခှဲစာရငျးမြားအရ သိရသညျ။
ထို့အတူ ရနျကုနျတိုငျးဒသေကွီး ကရငျရေးရာအတှကျ NLD မှ ကိုယျစားလှယျလောငျး နျောစူစဲနျနာလှလှစိုး၊ ပွညျသူ့ရှေ့ ဆောငျပါတီ -PPP မှ နျောလငျးသင်ျဂီထှနျး၊ ပွညျထောငျစုကွံ့ခိုငျရေးနှငျ့ဖှံ့ဖွိုးရေးပါတီ -USDP မှ စောဂကျြကော့ထူး၊ ကရငျပွညျသူ့ပါတီ -KPP မှ မနျးသနျးဝငျးဦး၊ ညီညှတျသောတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီမှ နျောအုနျးလှနှငျ့ ပွညျထောငျစုကောငျးကြိုးဆောငျပါတီ -UBP မှ ဒျေါသငျးသငျးခိုငျ တို့အသီသီး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျကွမညျဖွဈသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%80%e1%80%9b%e1%8 0%84%e1 %80%b9%e1%80%a1%e1%8
ပလကျဝမွို့နယျသို့ မတူပီဘကျမှပို့သညျ့ မဲရုံသုံးပစ်စညျး ရောကျရှိပွီဖွဈသျောလညျး စဈတှဘေကျမှပို့သညျ့ပစ်စညျးမြား ယနေ့ ခြိနျထိမရောကျရှိသေးကွောငျး ခငျြးပွညျနယျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးလငျးကြျောထံမှ သိရသညျ။
“မတူပီလငျက လာတဲ့ မဲရုံသုံးပစ်စညျးတှကေတော့ ပလကျဝရယျ၊ဆမီးရယျ၊ နောကျမတူပီနဲ့ နီးတဲ့နရောတှေ မတူပီနဲ့နီးတဲ့ အုပျစုတှကေိုရောကျပွီ၊နဂိုရှေးကောကျပှဲတုနျးကတော့ ပလကျဝမှာ အားလုံးပုံတယျ။ အခုကတော့ အခွနေတေဈခုအရ မတူပီနဲ့နီးတဲ့ ပလကျဝမွို့နယျထဲက အုပျစုတှအေတှကျဆိုရငျ မတူပီမှာထားတယျ၊ဆမီးရဲ့အောကျခွမျးမှာရှိတဲ့ ကြေးရှာအုပျစု တှေ အတှကျဆိုရငျ ဆမီးမှာထားတယျ၊ ပလကျဝရယျ၊ ပလကျဝပတျဝနျးကငျြနဲ့အထကျက အုပျစုတှအေတှကျဆိုရငျ ပလကျဝကိုပို့တယျ။ ကနျြတဲ့ပစ်စညျးတှကေတော့ စဈတှမှောပဲရှိနတေယျ”ဟု ခငျြးပွညျနယျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲ အတှငျးရေးမှူး ဦးလငျးကြျောက ပွောသညျ။ မတူပီဘကျမှ ပစ်စညျးမြားသညျ စကျတငျဘာလ(၁၅)ရကျ မတိုငျခငျတှငျ ရောကျရှိပွီဖွဈပွီး ကနျြသညျ့ပစ်စညျးမြားကို ယခုလ အောကျတိုဘာလ တတိယအပတျတှငျ ရောကျရှိနိုငျအောငျကွိုးစား ဆောငျရှကျလကျြရှိကွောငျးလညျးသိရသညျ။
“အခု ရောကျတဲ့ ပစ်စညျးတှကေတော့ မဲပုံးတှပေါတယျ။နောကျပွီးတော့ အဓိကအရေးကွီးတဲ့ အမှတျတုံးတံဆိပျရယျ၊ စတဈ ကာ တှရေယျ၊ စတဈကာတော့ ရပျကြေးတို့ မဲရုံကိုယျစားလှယျတှအေတှကျ စတဈကာတှပေေါ့”ဟု ၎င်းငျးက ပွောသညျ။ လကျရှိ ခငျြးပွညျနယျတှငျ ပလကျဝမွို့နယျသညျ မဲဆန်ဒနယျအမြားဆုံးမွို့နယျဖွဈပွီး လူဦးရအေမြားဆုံးနှငျ့ ဒသေအကယျြ အဝနျး သညျလညျး ခငျြးပွညျနယျတှငျ အကယျြပွနျ့ဆုံးဖွဈသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76448
ကခငျြပွညျနယျ ဆှမျပရာဘှမျ့မွို့နယျအတှငျးရှိ ဖုနျအငျယာနျကြေးရှာတှငျ ကြေးရှာ တားမွဈနယျနမိတျဧရိယာအတှငျး ရှသေတ်ထုတူးဖျောရနျ လုပျဆောငျနသေဖွငျ့ အဆိုပါစီမံကိနျးကို အမွနျဆုံး ရပျဆိုငျးပေးရနျ ဒသေခံပွညျသူမြားက တောငျးဆို နကွေသညျ။ ဖုနျအငျယာနျကြေးရှာ၏ ကနျ့သတျနယျမွအေတှငျး မွဧေက ၃၀၀ ကြျောကို လုပျငနျးရှငျ ၂ ဦးက ဒသေခံမြားကို အသိမပေးဘဲ မွလှေတျမွလေပျ စိုကျပြိုးမွအေဖွဈ လြှောကျယူထားပွီး ရှသေတ်ထုတူးဖျောရနျလုပျဆောငျနသေညျဟု ဒသေခံ ဦး Lajaw La Htoi က ယခုလို ကနျ့ကှကျ ပွောဆိုသညျ။“ဘယျသူက လကျမှတျထိုး သဘောတူခပြေးတယျဆိုတာကိုက မသိရတာပါ။ သူတို့ပွောတာက စိုကျပြိုးရေး လုပျငနျးတှလေုပျဖို့လညျးပွောတယျ။ ရှတေူးဖျောလို့ရတဲ့ နရောမှာက ရှလေုပျ မယျလို့လညျး ပွောပါတယျ။ အဲ့ဒါကိုကနြျောတို့ ဒသေခံတှကေ လုံးဝသဘောမတူဘူး။ ကနျ့သတျဧရိယာဖွဈတဲ့ အတှကျ တခွားသူတှလေုပျမယျဆိုရငျလညျး”ဟု ပွောသညျ။
ဖုနျအိနျယာနျကြေးရှာ နယျနမိတျအဖွဈ သတျမှတျထားသော ဧက ၁ သောငျးနီးပါးသညျ စိုကျပြိုးရေးလုပျငနျးအတှကျ မွသွေဇာအလှနျကောငျးမှနျ သောကွောငျ့ အစိုးရနှငျ့ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO ကလညျး ကြေးရှာနယျနမိတျအဖွဈ တရားဝငျ သတျမှတျပေးထားသော နရောဖွဈသညျဟု ဒသေခံမြား ပွောသညျ။ ဖုနျအိနျယာနျအပါအဝငျ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျ အတှငျးရှိ နရောအခြို့တှငျ ပွညျနယျအစိုးရက အသေးစား သတ်ထုတူးဖျောမှုလုပျငနျးမြား ခထြားပေးပွီဖွဈသောကွောငျ့ ကြေးရှာကနျ့သတျဧရိယာအတှငျး လုံးဝမပွုလုပျပေးစလေိုကွောငျး ကြေးရှာအုပျခြုပျမှူး ဦး Naw Seng က ပွောဆိုသညျ။“ကနြျောတို့ဒသေခံတှကေ တောငျယာလုပျငနျးကိုပဲ ဦးစားပေးလုပျကိုငျတာဖွဈတဲ့အတှကျ ကနျ့သတျထားတဲ့ မွဧေရိယာ အတှငျး စီမံကိနျး လုံးဝ မလုပျစခေငျြဘူး။ တဈခြို့ဒသေခံတှဆေိုရငျ လုပျကိုငျစားသောကျဖို့ လယျယာမဲ့ဖွဈတဲ့ မိသားစုတှေ အမြားကွီးရှိသေးတယျ။ ပွီးရငျကြေးရှာနဲ့လညျးအလှနျနီးတဲ့အတှကျ ရှတေူးဖျောလိုကျမယျဆိုရငျ စိုကျပြိုး ရေးလုပျငနျးတှမှော ထိရောကျလုပျကိုငျ၍ မရဘဲပကျြစီးသှားမယျဖွဈတယျ။ ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျအတှငျးထဲမှာ မွနေိမျ့ပိုငျးဖွဈပွီး မွဆေီလှာ ကောငျးတယျဆိုလို့ ဖုနျအငျယာနျ ဒသေတဈသာရှိတော့တာဖွဈတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဘယျစီမံကိနျးကိုမှ မလိုလားဘူး”ဟု ပွောသညျ။
ဖုနျအငျယာနျကြေးရှာ ကနျ့သတျနယျမွတှေငျ သတ်ထုတူးဖျောခှငျ့ မရှိကွောငျး ကခငျြပွညျနယျ သယံဇာတနှငျ့ သဘာဝပတျ ဝနျးကငျြထိနျးသိမျးရေးဝနျကွီး ဦး Dashi La Seng ကလညျး ယခုလိုပွောဆိုသညျ။“ဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျအနီးတဝိုကျမှာ ပွညျထောငျစုအစိုးရကနေ ပွညျနယျအစိုးရကို စီမံခနျ့ခှဲခှငျ့ပေးထားတာဖွဈတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီကနျ့သတျဧရိယာထဲမှာ ခမြှတျထားပေးတာတော့မရှိသေးဘူး။ အခုက သူတို့အနနေဲ့ မွလှေတျမွလေပျနဲ့လြှောကျထားတယျဆိုရငျ ပွနျလညျစဈဆေး ရမှာပါ။ လြှောကျထားတဲ့ပျေါမှာဘဲ မူတညျပွီး လုပျပိုငျခှငျ့ရရှိမှာပါ။ စိုကျပြိုးရေးစီမံကိနျးအတှကျ လြှောကျထားတဲ့နရောမှာ ရှသေတ်ထုကတူးလို့မရဘူးလေ။ ပွညျနယျအစိုးရအနနေဲ့လညျး မွလှေတျမွလေပျကို စိုကျပြိုးရေးအတှကျ လြှောကျထားခွငျး ရှိမရှိ။ လြှောကျထားတဲ့ နရောက ရှာနယျနမိတျ ဧရိယာအတှငျးကရြောကျမှုရှိမရှိ ဒါတှကေိုသခြောစဈဆေးပွီးမှ တှရှေိ့ခကျြ တှကေို လုပျထုံးလုပျနညျးနဲ့အရ ခပြေးပိုငျခှငျ့ရှိပါတယျ။ အဲ့လိုမဟုတျဘဲ မွလှေတျမွလေပျပုံစံလြှောကျထားတယျဆိုပွီး လုပျခငျြသလို လုပျပိုငျခှငျ့ မရှိဘူး။ မွလှေတျမွလေပျစီမံခနျ့ခှဲတဲ့ သကျဆိုငျရာဌာန ခှငျ့ပွုခကျြမရရငျလညျး သတ်ထုတူးဖျောခှငျ့ လကျမှတျထုတျ ပေးမှာမဟုတျဘူး။ ဒါကိုလညျး အားလုံးကိုသိစခေငျြတယျ” ဟု ပွောဆိုသညျ။
ပွညျနယျအစိုးရအနနှေငျ့ ၂၀၁၉ ခုနှဈကစပွီး ဒုတိယျအကွိမျ ကခငျြပွညျနယျအတှငျးရှိ မွို့နယျ ၆ ခုတှငျတပွိုငျနကျ အသေးစားရှသေတ်ထုတူးဖျောခှငျ့ပေးခဲ့ပွီးနောကျ လကျရှိဆှမျပရာဘှမျမွို့နယျအတှငျး ၄ နရောခနျ့တှငျ လုပျကှကျပေါငျး ၂၀ ကြျောခနျ့ တရားဝငျခထြားပေးကွောငျးလညျး သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/22/l1-16/
ရခိုငျပွညျနယျ၊ ကြောကျဖွူမွို့နယျ၊ စနဲမွို့အနီးတှငျ အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျနေ့ နံနကျ ၈ နာရီခနျ့က ရတေပျမှ ကားတဈစီး မိုငျးခှဲတိုကျခိုကျခံရ၍ ၂ ဦးသဆေုံးကာ ၂ ဦးဒဏျရာရရှိသဖွငျ့ စနဲဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသမှုခံယူနရေကွောငျး သတငျးရရှိ သညျ။ ၎င်းငျးတို့မှာ စနဲမွို့အပွငျဖကျရှိ ရတေပျသို့သှားလမျး အဝတောငျကြေးရှာအုပျစုရှိ ရနေံသူ တံတားထိပျတှငျ ပေါကျကှဲ ခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျးနရောတှငျ ပှဲခငျြးပွီးသဆေုံးသူတဈဦးရှိခဲ့ပွီး ဆေးရုံရောကျပွီးမှ နောကျထပျ တဈဦးသဆေုံးကာ နှဈဦးမှာ ဒဏျရာရရှိခဲ့ကွောငျး စနဲမွို့အုပျခြုပျရေးမှူး ဦးနလေငျးကွိုငျက နိရဉ်စရာ သတငျးဌာနသို့ အတညျပွု ပွောကွားသညျ။
“ဖွဈတဲ့နရောက စနဲမွို့ကနေ တဈနာရီလောကျသှားရတယျ။ ရတေပျသှားလမျးမှာဖွဈတာ။ တပျကအဖှဲ့တှေ စနဲကို ဈေးလာဝယျရငျး အပွနျမှာဖွဈတာလို့ အကွမျးဖငျြးသိရတယျဗြ။ ဒဏျရာရတဲ့လူတှကေို အနီးအနား ဆိုတော့ စနဲဆေးရုံကို ပို့ပါတယျ။ ဒီကိုရောကျတာတော့ ဒဏျရာရတဲ့သူသုံးယောကျပါ။ သသှေားတဲ့လူက တဈယောကျပါလာပါတယျ။ ဘယျအဆငျ့ တှတေော့ ကြှနျတျောလညျးမသိဘူး။ မသိဘူးဆိုတာက သူတို့က အရပျဝတျနဲ့ကို” ဟုပွောသညျ။ ဆေးရုံတှငျ ဆေးကုသမှု ခံယူနရေငျးဖွငျ့ နောကျထပျတဈဦးမှာသဆေုံးခဲ့ကွောငျး၊ သဆေုံးသူမြားမှာ အသကျ ၃ဝ ကြျောနှငျ့ ၄ဝ ကြျောအရှယျ အမြိုးသားမြားဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ “နှဈယောကျသပွေီး ကနျြခဲ့တဲ့ နှဈယောကျကတဈယောကျမှာ ညာဖကျ ခွထေောကျ ဒူးခေါငျးနားက ပွတျသှားတယျ။ ကနျြတဈယောကျကတော့ ပှနျးပဲ့ဒဏျရာလောကျပါပဲ။” ဟုပွောသညျ။
၎င်းငျးရတေပျစခနျး၏ အမညျကို မသိသျောလညျး အဝတောငျကြေးရှာအုပျစုအပိုငျတှငျစခနျးခသြညျ့ ရတေပျစခနျးဖွဈကွောငျး သူကဆကျပွောသညျ။ အရပျသားထိခိုကျမှုတဈစုံတဈရာ မရှိကွောငျး၊ ၎င်းငျးမိုငျးပေါကျကှဲရာတှငျ ကားမှာလုံးဝပကျြစီးသှား ကွောငျး သိရသညျ။ ၎င်းငျးပေါကျကှဲမှုနှငျ့ပတျသကျ၍ စနဲမွို့ရှိနရောအခြို့တှငျ လုံခွုံရေးမြားခထြားကွောငျး ၎င်းငျးမွို့နယျ အုပျခြုပျရေးမှူး ပွောပွခကျြအရသိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76428
ကရငျပွညျနယျနှငျ့ ကရငျအမြုိးသားအစညျးအရုံး-KNU ထိနျးခြုပျနယျမွတေခြို့တှငျ Covid-19 ရောဂါပိုး အတညျပွု လူနာ မြားတှရှေိ့မှုမြားလာသညျ့အတှကျ ကိုဗဈထိနျးခြုပျကာကှယျရေး စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားကို ပိုမိုလိုကျနာစရေနျနှငျ့ လူစု လူဝေး ဖွဈပျေါစမှေုကို မပွုလုပျစရေနျ KNU ခရိုငျအသီးသီးသို့ ဗဟိုမှ အောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျနေ့ ရကျစှဲဖွငျ့ ညှနျကွား လိုကျကွောငျးသိရသညျ။ KNU ဗဟိုမှ ဖှဲ့စညျးထားသညျ့ Covid-19 အရေးပျေါတုနျ့ပွနျရေးကျောမတီ၏ အစီရငျခံခကျြပျေါ အခွခေံပွီး KNU ထိနျးခြုပျ နယျမွနှေငျ့ ထိစပျနယျမွမြေားတှငျ ကိုဗဈရောဂါပိုး တှရှေိ့သူ (၁၀၀)ဦးကြျောရှိလာသညျ့အတှကျ ကျောမတီမှ ယခငျထုတျ ပွနျထားသညျ့ စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားကို ပွညျသူမြား ပိုမိုလိုကျနာနိုငျစရေနျ နှငျ့ လူစုလူဝေး ဖွဈစေ သညျ့ ဘုရားသှား ကြောငျးတကျ၊ ပှဲလမျးသဘငျ ပွုလုပျခွငျးမြားကို ယခုအောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျနမှေ့ နိုဝငျဘာလ ၃၀ ရကျနေ့ အထိ တားမွဈကနျ့သတျထားရနျ ခရိုငျအသီးသီးကို ညှနျကွားခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
ဗဟိုအဆငျ့ ကျောမတီ ဥက်ကဋ်ဌ ပဒိုစောဒိုငျးမှနျးခငျက “ ကနြျောတို့ ဒီရောဂါ ထိနျးခြုပျကာကှယျမှုအတှကျ အှနျလိုငျးကနေ ပုံမှနျအစညျးအဝေးထိုငျတဲ့အခါ အခုလတျတလော ကိုဗဈပိုးတှရှေိ့သူမြားလာမှုမှာ နယျစပျ လညျးပါလာတာ တှရေ့တယျ။ အဲ့အတှကျ ဒီကိုဗဈထိနျးခြုပျမှုနဲ့ပတျသကျပွီးတော့ ကျောမတီရဲ့ အကွံပွုမှုအပျေါမူတညျပွီး ဗဟိုကညှနျကွားခကျြထုတျ လိုကျတာပါ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ လကျရှိတှငျ ကိုဗဈရောဂါပိုးကူးစကျပွနျ့ပှားမှုမြား အရှိနျမွငျ့မားလကျြရှိပွီး လာ မညျ့ ဒီဇငျဘာလအထိ ထိနျးခြုပျနိုငျမှုမရှိပါက ၎င်းငျးတို့အတှကျစိုးရိမျရမညျ့ အခွအေနရှေိလာနိုငျကွောငျးလညျး ပဒိုစောဒိုငျးမှနျးခငျက ဆကျပွောသညျ။ အဆိုပါ ခမြှတျထားသညျ့စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြားအရ ခရိုငျခငျြး၊ မွို့နယျခငျြး၊ ရှာခငျြးကူးလူးသှားလာမှုမြားကို ပိုမိုတငျးကွပျ စိစဈရနျ၊ ၁၅ ဦးထကျပို၍ လူစုလူဝေး မလုပျရနျ စသညျ့ စညျးကမျးခကျြမြား အပါအဝငျ လတျတလော ထပျမံညှနျကွားလိုကျသညျ့ ဘုရားသှားကြောငျးတကျ၊ ပှဲလမျးသဘငျ ပွုလုပျခွငျးမြားကိုပါ ပိုမို ကွီးကွပျ ဆောငျရှကျသှားရနျတို့ ပါဝငျသညျ။
ထိုသို့ KNU မှ ကိုဗဈ ရောဂါ ထိနျးခြုပျကာကှယျရေးအတှကျ စီမံလုပျဆောငျရာတှငျ မွနျမာ့တပျမတျော၏ ဟနျ့တားနှောငျ့ ယှကျမှုမြားကွောငျ့ အခကျအခဲမြားကွုံခဲ့ရကွောငျး KNU ဘကျကဆိုပွီး ပွီးခဲ့သညျ့လမြားက KNU မှ ဖှငျ့လှဈထားသော ကနျြးမာရေး စဈဆေးရေး ဂိတျမြားကို တပျမတျောမှ တားမွဈဟနျ့တားမှုမြား၊ မီးရှို့ဖကျြဆီးမှုမြား လုပျဆောငျခဲ့သညျ့ ဖွဈစဉျ မြားလညျးပျေါပေါကျခဲ့သညျ။ http://kicnews.org/2020/10/%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%f%e1%80% 97%e1%80%85%e1%80
COVID 19 ရောဂါပြံ့နှံ့မှုမြားနသေောကွောငျ့ မျောလမွိုငျမွို့ပျေါ၌ မှနျညီညှတျရေးပါတီထောကျခံသူမြားအနဖွေငျ့ မဲဆှယျ စညျးရုံးမှု လှညျ့လညျအငျအားပွခွငျး မပွုလုပျကွပါရနျ အောကျတိုဘာလ ၂၁ ရကျနကေ့ မျောလမွိုငျမွို့ ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေးအဖှဲ့က မတ်ေတာရပျခံခကျြတဈစောငျ ထုတျပွနျလိုကျသညျ။
ထောကျခံသူမြား၏ ကနျြးမာရေးနှငျ့ နောကျဆကျတှဲစီးပှားရေး၊ လူမှုရေးတို့ကို ထောကျဆတှေးတော၍လညျးကောငျး၊ ဥပဒေ ကိုလိုကျနာသော နိုငျငံကွီးသား ရာမညတိုငျးသားပါတီဖွဈကွောငျး ဖျောပွလို၍လညျးကောငျး၊ Stay at home ကာလ အတှငျး ပွညျသူမြား စိတျအနှောငျ့အယှကျမဖွဈစရေနျ မျောလမွိုငျမွို့ မှနျညီညှတျရေးပါတီ၏ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲ အောငျ နိုငျရေးအဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားက ယမနျနတှေ့ငျ အစညျးအဝေးပွုလုပျခဲ့ကွပွီး ဆုံးဖွတျခဲ့ခွငျးဖွဈကွောငျး သိရသညျ။“ရောဂါကလဲ ပိုပွီးတိုးလာတော့ ပွညျသူတှကေလဲ ကွောကျနကွေတယျ၊ ခုခြိနျမှာ ကနြျောတို့လူစုအငျအား လှညျ့ပွမယျဆိုရငျ ပွညျသူတှကေ ပိုပွီးစိုးရိမျလာကွမယျ၊ ကနြျောတို့က ပွညျသူတှေ အန်တရာယျမဖွဈဖို့ပါပဲ၊ ပွီးတော့ မှနျညီညှတျရေးပါတီ ထောကျခံတဲ့သူအားလုံး ဖွဈနိုငျရငျလှညျ့လညျအငျအားမပွကွပါနဲ့လို့ မတ်ေတာရပျခံခငျြတယျ”ဟု မျောလမွိုငျမွို့ မှနျညီညှတျရေးပါတီ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေး ဥက်ကဌ နိုငျအောငျသိနျးက ပွောသညျ။
ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနမှ မှနျပွညျနယျရှိ မျောလမွိုငျမွို့နှငျ့ ဘီးလငျးမွို့တို့ကို စကျတငျဘာလ ၂၅ ရကျနေ့ ကစပွီး နအေိမျတှငျနထေိုငျရေး Stay at home အစီစဉျအဖွငျ့ သတျမှတျထားသညျ။ ယငျးရောဂါကွောငျ့ မျောလမွိုငျမွို့၌ စကျရုံ၊ အလုပျရုံနှငျ့ စကျမှုလုပျငနျးမြား ပိတျထားရခွငျး၊ အလုပျအကိုငျမြား ဆုံးရှုံးခွငျး၊ ဝငျငှလြေော့ပါး ဆုံးရှုံးခွငျး၊ ဆေး ပညာရှငျမြား၊ ပရဟိတသမားမြား ပငျပနျးရခွငျးမြားဖွဈပျေါလြှကျရှိပွီး ဘာသာရေးဝတျပွုဌာနမြားလညျး ပိတျထားရပွီး သံဃာတျောမြားအနလေညျး ကထိနျခငျးရနျ ခကျခဲမှုမြား ဖွဈပျေါလြှကျရှိကွောငျး သိရသညျ။ မျောလမွိုငျမွို့နယျ အမှတျ (၂) မဲဆန်ဒနယျမွေ ပွညျနယျလှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ဒေါကျတာဟိနျးပိုငျထူးခဈြက “ကနြျောတို့ အငျအားပွသညျ ဖွဈစေ၊ မပွသညျဖွဈစပေေါ့နျော သူတို့အတှကျ ယုံကွညျအားကိုးထိုကျတဲ့ပါတီကိုပဲ မဲပေးကွလိမျ့မယျလို့လဲ ယုံကွညျတယျ၊
အငျအားမပွရပမေယျ့လဲ စဉျးစားပွီးတော့ မဲပေးဖို့လဲ ကနြျောတို့ မြှျောလငျ့တယျ၊ တခြို့ထောကျခံသူတှကေ လြော့ ကောငျး ပမေယျ့လဲ ကနြျောတို့စတေနာကို သိတဲ့သူတှဆေို ကနြျောတို့ကို ပိုပွီးတော့ မဲပေးလာမယျလို့လညျး မြှျောလငျ့တာ ပေါ့နျော ကနြျောတို့အတှကျကတော့ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးက ပထမပါပဲ၊ ရှေးကောကျပှဲအောငျနိုငျရေးကတော့ ဒုတိယပေါ့နျော”ဟု ဆိုသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/10/22/ %e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%ac%e1%80%
ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျး၊ ဆီဆိုငျမွို့နယျ ဘနျးယဉျဆေးရုံရှမှေ့ာ အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျ ညနေ ၆ နာရီ ဝနျးကငျြလောကျ က ပအိုဝျးအမြိုးသားအဖှဲ့ခြုပျပါတီ မဲဆှယျစညျးရုံးဝနျးရံတဲ့ ယာဉျမတျောတဆ ဖွဈပှားပွီး ယာဉျပျေါပါလာသူ ၃ ဦး အခငျး ဖွဈနရောမှာ သဆေုံးခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ ပါတီမဲဆှယျစညျးရုံးပွီးအပွနျ Fuso Canter ကားရှဘေီ့းပေါကျရာမှ အရှိနျ မထိနျးနိုငျဘဲ ကားကြှမျးပွနျသှားတဲ့အတှကျ ကားပျေါပါလာသူတှေ လှငျ့ထှကျပွီး ဦးခေါငျးဒဏျရာတှနေဲ့ သဆေုံးသှားတယျ လို့ သိရပါတယျ။
ဆီဆိုငျမွို့ နယျရဲတပျဖှဲ့ရဲမှူး သီဟနျက “သူတို့ဆိုကျခေါငျကနေ နမျ့ခုတျကိုပွနျတာ နမျ့ခုတျအဖှဲ့တှပေေါ့၊ ဒိုငျနာကားနဲ့ လူ ၁၅ ယောကျ လောကျပါတယျ။ ဘနျးယဉျအဝငျဆေးရုံ ထိပျမှာပဲ ဘယျဘကျတာယာပေါကျပွီး အောကျဆှဲခပြွီး အမြိုးသမီး ၃ ဦး ပှဲခငျြးပွီး နောကျတဈယောကျက ဒဏျရာစိုးရိမျရ၊ သူတို့က ပါတီစညျးရုံးရေးဆငျးတဲ့သူတှပေေါ့”လို့ ပွောပါတယျ။ ဆိုကျခေါငျနာရေးအသငျးက ကိုမောငျလှနျးက “ကနြျော ရောကျသှားတဲ့အခြိနျမှာ ၃ ဦးသသှေားပွီ၊ ဒဏျရာရ ၁ ဦးက စိုးရိမျရ လို့ တောငျကွီးကို ပို့လိုကျပွီ။ သဆေုံးသူတှကေို ဘနျးယဉျဆေးရုံ ရငျခှဲရုံထဲပို့ပွီး ကူညီလိုကျတယျ။ သဆေုံးသူပါးပျေါမှာ နဂါးအလံတှေ ကပျထားတုနျး”လို့ ပွောပါတယျ။
ယာဉျမတျောတဆ ဖွဈပှားပွီး လူသဆေုံးခဲ့တဲ့အပျေါ PNO ပါတီဥက်ကဋ်ဌနဲ့ ပါတီအဖှဲ့အစညျးတှကေ ဝမျးနညျးကွောငျး ထုတျပွနျကွညောထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ သဆေုံးသူ ၃ ဦးဟာ ဟိုပုံးမွို့နယျ နမျ့ခုတျရှာနေ မခမျးဗှေ၊ မှိုးတီးနဲ့ မရှအေုပျ တို့ဖွဈပွီး မဇငျမာဦးက ဒဏျရာအပွငျးအထနျရရှိပွီး တောငျကွီးမွို့ စဝျစံထှနျး ဆေးရုံကို ပို့ဆောငျခဲ့တယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/418686
ကခငျြပွညျနယျမှ မိုးညှငျးမွို့နယျ နှငျ့ ဖားကနျ့မွို့နယျကို Stay Home ကွညောလိုကျသဖွငျ့ ထိုမွို့နယျမြားတှငျ နိုငျငံရေး ပါတီ မြား မဲဆှယျရနျ လုံးဝခှငျ့ပွုမညျမဟုတျကွောငျး မိုးညှငျးခရိုငျရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးမှ အရာရှိ ဦးမြိုးမငျးဦးထံမှ သိရ သညျ။ အောကျတိုဘာလ ၁၉ ရကျနတှေ့ငျ ပွညျထောငျစုကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနမှ ဖားကနျ့မွို့နယျနှငျ့မိုးညှငျးမွို့နယျအား Stay at Home မွို့နယျအဖွဈ သတျမှတျလိုကျသညျ။
“ကနျြးမာရေးဝနျကွီးဌာနကနေ ကူးစကျကာကှယျနှိမျနှငျးရေး ဥပဒအေရ ဖားကနျ့နဲ့မိုးညှငျးမွို့နယျမှာ နထေိုငျတဲ့ပွညျသူ တှအေနနေဲ့ နအေိမျမှာနထေိုငျဖို့ Stay at Home အကြိုးဝငျတယျဆိုပွီး အောကျတိုဘာလ ၁၉ ရကျနမှေ့ာထုတျပွနျ ကွညော ခဲ့တဲ့အတှကျ Stay at Home သတျမှတျထားတဲ့မွို့နယျတှမှော မဲဆှယျခှငျ့လုံးဝ ခှငျ့မပွုတော့ပါဘူး။ လမျးမှာထှကျပွီး မဲဆှယျတာတှေ နအေိမျထိသှားပွီးမဲဆှယျတာတှေ အဆောကျအဦးထဲမှာ မဲဆှယျပှဲလုပျနတောတှကေို လုံးဝခှငျ့မပွုတော့ ကွောငျး စာထုတျပွီးညှနျကွားထားပွီး ဖွဈတယျ။”ဟု အရာရှိဦးမြိုးမငျးအောငျက ပွောသညျ။ လကျရှိ ကခငျြပွညျနယျ တှငျ Covid-19 ရောဂါပိုးကူးစကျသူ ၉၅ ထိရှိလာပွီး ၎င်းငျးတို့ ၉၅ ဦးအနကျ ပထမအမြားဆုံး သညျ ဖားကနျ့မွို့မှ ၅၇ ဦးဖွဈပွီး မိုးညှငျးမွို့နယျတှငျ ၁၇ ဦးဒုတိယအမြားဆုံးဖွဈသညျ။
မိုးညှငျးတဈခရိုငျလုံးတှငျ မွို့နယျ ၃ခုရှိပွီး မဲဆန်ဒရှငျစာရငျးအရ ဖားကနျ့မွို့နယျတှငျ ၁၆၂၉၄၈ ဦး၊ မိုးကောငျးမွို့နယျ ၁၀၃၂၅၃ ဦး၊ မိုးညှငျးမွို့နယျ ၁၅၈၆၉၄ ဦးရှိပွီး မဲစာရငျးကွညောပွီးနောကျတှငျ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ ၄၂၄၈၉၅ ရှိကွောငျး သကျဆိုငျရာဌာနမှ သိရသညျ။ နိုငျငံရေးပါတီမြားအနဖွေငျ့ Stay at Home သတျမှတျထားသညျ့ နရောမြားတှငျ မဲဆှယျခှငျ့ မရှိတော့သညျ့အတှကျ အှနျလိုငျးမှတဈဆငျ့သာ မဲဆှယျရနျပွငျဆငျထားကွောငျး ကခငျြပွညျနယျပွညျသူ့ပါတီမှ ဖားကနျ့မွို့ နယျ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျနရောတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ဦးလအောငျက ကခငျြသတငျးဌာန KNG ကို ယခုလိုပွောသညျ။“Stay at Home ကာလဖွဈတဲ့ခြိနျကတြော့ ပွညျသူတှနေဲ့ထိတှပွေီ့း မဲဆှယျဖို့ တဈဖကျကလညျး ကနျြးမာရေးရှုထောငျ့ကနေ ကွညျ့ရတဲ့အနထေားဖွဈနတေဲ့အတှကျ သိပျပွီးမှတော့ အဆငျမပွဘေူး။ အှနျလိုငျးနဲ့သှား တယျဆိုတာကလညျး လကျရှိကတော့ B Plan ပေါ့။ ကနြျောတို့ပါတီရဲ့အကွောငျးတှသေိခငျြတဲ့သူတှလေညျး မေးလာတဲ့ သူတှရှေိနိုငျတဲ့အတှကျ Stay at Home ကာလဆိုလညျး အားလုံးက Facebook တော့သုံးကွမယျ။ ဒါကွောငျ့ အှနျလိုငျးက နေ မဲဆှယျမယျ့ အစီစဉျတော့ရှိပါတယျ။” ဟု ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးလအောငျက ဆိုသညျ။
ကခငျြပွညျနယျတှငျ မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူဦးရေ ၁၁ သိနျးခနျ့၊ မဲရုံပေါငျး ၉၁၈ ရုံ နှငျ့ ယှဉျပွိုငျမညျ့ ပါတီပေါငျး ၁၉ ပါတီရှိသညျဟု သကျဆိုငျရာရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျရုံးမှ သိရသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/21/l2-15/
ပေါငျမွို့နယျတှငျ မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) ထောကျခံသူ အငျအား ထောငျနှငျ့ခြီ၍ ယနေ့ (အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျ) နံနကျပိုငျးက အငျအားပွ လှညျ့လညျမဲဆှယျစညျးရုံးခွငျး ပွုလုပျခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။“ကြှနျတျောတို့ဒီနလှေ့ညျ့လညျပှဲကို ပေါငျမွို့နယျ သဗွုခြောငျး ကြေးရှာကနစေပွီးတော့ ထှကျလာကွပါတယျ။ အဲ့ဒီကနေ ပေါငျမွို့ကို ဖွတျပွီးတော့ ထနျးပငျ ခြောငျကွီး ကြေးရှာအထိ သှားပါမယျ။ အဲ့ဒီကနေ အလှပျကြေးရှာ၊ ပွီးတော့ မုတ်တမဘကျသှားပါမယျ။ မုတ်တမကနေ လကျပံတောကြေးရှာအထိ သှားပါမယျ။ အဲ့ဒီ လကျပံတောကြေးရှာမှာ တဈခကျြနားပွီးရငျ ကရငျတိုငျးရငျးသားတှေ နထေိုငျ တဲ့ သဲအိမျ၊ နတျမှျောစတဲ့ ကြေးရှာတှဘေကျကို သှားပါမယျ။ ပွီးရငျတော့ ကြုံကကြေးရှာဘကျကနေ ပွနျထှကျလာ ပွီးတော့ ပေါငျမွို့ကို ပွနျလာကွမှာပါ။ ပေါငျမွို့နယျကို တဈပတျလှညျ့တဲ့ သဘောပါဘဲ”ဟု မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) ရှေးကောကျပှဲ အောငျနိုငျရေး ထောကျခံဝနျးရံသူ တဈဦးဖွဈသူ နိုငျသိနျးစောငျက ပွောကွားးသညျ။
ယနလှေ့ညျ့လညျပှဲတှငျ ပေါငျမွို့နယျအတှငျးရှိ မှနျတိုငျးရငျးသားမြား နထေိုငျကွသညျ့ ရပျကှကျနှငျ့ ကြေးရှာမြားမှ ဒသေခံ မှနျပွညျသူ အမြားအပွားလာရောကျ ဝနျးရံပေးကွကွောငျးနှငျ့ ဒီမိုကရစေီ ဖယျဒရယျမူ စဈစဈဖွငျ့ နိုငျငံတျောကို ရှဆေ့ကျ သှားစခေငျြသညျ့ အတှကျကွောငျ့ တိုငျးရငျးသားပါတီမြားအား ဝနျးရံပေးကွခွငျး ဖွဈကွောငျး နိုငျသိနျးစောငျက ပွောကွား သညျ။“ကြှနျတျောတို့ကတော့ ဒီနလှေ့ညျ့လညျပှဲကို လာရောကျ ပူးပေါငျးကွတဲ့သူတှေ အားလုံးကို Mask တပျလာကွဖို့ မှာ ထားပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ကလညျး ဝငှေထားတာတှေ ရှိပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့ အနနေဲ ကလညျး ဒီလောကျလူမြားမယျလို့ မထငျထားဘူး”ဟု နိုငျသိနျးစောငျက ဆကျလကျပွောကွားသညျ။ မိမိဒသေ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျရေးအတှကျနှငျ့ ကိုယျပိုငျအခှငျ့ အရေး မြား ရရှိစရေေး အတှကျကွောငျ့ မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) အား လာရောကျဝနျးရံရခွငျး ဖွဈကွောငျး ပေါငျမွို့နယျ ထနျးပငျခြောငျကွီး ကြေးရှာနေ နိုငျခဈြသနျးက ပွောကွားသညျ။
လာမညျ့ နိုဝငျဘာလ (၈) ရကျတှငျ ကငျြးပပွုလုပျမညျ့ ၂၀၂၀ ပွညျ့နှဈ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲ၌ မှနျညီညှတျရေးပါတီ (MUP) မှ ပေါငျမွို့နယျအတှငျး ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ နရောအတှကျ ဒျေါယဉျယဉျနု (ခ) မိကဝြေကဝျြေညီ၊ အမြိုးသားလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ နရောအတှကျ ဦးမွငျ့ဦး (ခ) နိုငျလငျ့လငျ့၊ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၁) နရောအတှကျ ဦးသကျထှနျး (ခ) အပါးခမျြး၊ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျအမှတျ (၂) နရောအတှကျ ဦးခမျြးမွတေို့မှ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျ အရှေးခယျြခံသှားမညျ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ https://news-eleven.com/article/196109
တိုငျးရငျးသားဒသေအခြို့ရှိ မဲဆန်ဒနယျအခြို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမှုမရှိခွငျးသညျ တိုငျးရငျးသားအခှငျ့အရေးကို ပိတျပငျ ခွငျးဖွဈ၍ ပွညျထောငျစုရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို ရှုတျခကြွောငျး ညီညှတျသောတိုငျးရငျးသားလူမြိုးမြား ဒီမိုကရစေီပါတီ (UNDP) အထှထှေအေတှငျးရေးမှူး ဒျေါနျောအုနျးလှက ပွောကွားသညျ။
တိုငျးရငျးသားပါတီမြားကို မဲပေးရနျ စညျးရုံးလှုံ့ဆျောမှုမြားရှိနခြေိနျတှငျ ရခိုငျနှငျ့ ရှမျးအပါအဝငျ ပွညျနယျနှငျ့ တိုငျးခွောကျခု ရှိ မဲဆန်ဒနယျအခြို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမညျမဟုတျကွောငျး ကျောမရှငျ၏ကွညောမှုသညျ လုံးဝမလုပျသငျ့သညျ့ ကိစ်စ လညျးဖွဈကွောငျး ဒျေါနျောအုနျးလှက ၎င်းငျး၏ Facebook စာမကျြနှာတှငျ အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျ ညပိုငျးက ပွောကွားခဲ့ သညျ။“ ပွီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ မှာ တခြို့ရှုံးခဲ့တာရှိတယျ။ ဥပမာ ရခိုငျနဲ့ ရှမျးဆို အာဏာရပါတီ (NLD) ရှုံးခဲ့တယျ။ အခု ဒီတဈကွိမျ ကတော့ တခွားတိုငျးရငျးသားဒသေတှပေါ ကိုယျ့ရဲ့တိုငျးရငျးသားမဲကို ကိုယျပေးဖို့ တိုငျးရငျးသားပါတီတှကေို အားပေးဖို့ လှုံ့ဆျောနတေဲ့အခြိနျမှာ ဒါက လုံးဝမလုပျသငျ့တဲ့ကိစ်စဖွဈပါတယျ။ အမှနျတကယျဆိုရငျ ဒီနရောတှကေ အာဏာရပါတီ ရှုံး နိုငျတဲ့နရောဖွဈတယျလို့ပဲ ကြှနျမတို့မွငျတယျ”ဟု ဒျေါနျောအုနျးလှက ပွောကွားသညျ။ တိုငျးရငျးသားဒသေအခြို့ရှိ အဆိုပါ မဲဆန်ဒနယျမြားကို ပယျဖကျြခွငျးမပွုလုပျဘဲ ရှဆေို့ငျးသငျ့သညျဟု ရှုမွငျကွောငျး ၎င်းငျးက ဆိုသညျ။
“ကြှနျမတဈယောကျတညျးအနနေဲ့ကတော့ ဒီလိုမြိုးဆောငျရှကျတဲ့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို ထပျပွီးရှုတျခပြါတယျ။ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့အခှငျ့အရေးကို လုံးဝပိတျပငျပွီးတော့မှ (အာဏာရပါတီ) ရှုံးနိုငျတဲ့နရောတှကေို ပယျဖကျြတဲ့အတှကျ ဂုဏျသိက်ခာမဲ့တဲ့လုပျရပျလို့ ကြှနျမကတော့ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျကို ပွောခငျြပါတယျ”ဟု UNDP ပါတီ အထှထှေေ အတှငျးရေးမှူး ဒျေါနျောအုနျးလှက ပွောကွားသညျ။ UNDP ပါတီသညျ ဒျေါနျောအုနျးလှ၊ ဦးဒေးဗဈလှမွငျတို့ကဲ့သို့ NLD အဖှဲ့ဝငျဟောငျးအခြို့အပါအဝငျ ၁၉၉၀ ပွညျသူ့လှတျတျောကိုယျစားလှယျမြားအဖှဲ့ကို အခွခေံတညျထောငျထားသညျ့ နိုငျငံ ရေးပါတီဖွဈပွီး ၂၀၂၀ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲတှငျ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၃၃ ဦး ပါဝငျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈသညျ။“ လှတျ လပျပွီး တရားမြှတတဲ့ ရှေးကောကျပှဲဖွဈအောငျဆိုရငျ ဒီလိုမြိုးလုပျစရာမလိုပါဘူး။ ရိုးသားစှာယှဉျပွိုငျနတေဲ့ တိုငျးရငျးသား တှကေိုလညျး ယှဉျပွိုငျခှငျ့ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ”ဟု ဒျေါနျောအုနျးလှက ပွောကွားသညျ။
ထို့ပွငျ COVID-19 ရောဂါကူးစကျမှု မွငျ့မားနပွေီး Stay at Home ကွညောထားသညျ့ ရနျကုနျတိုငျးနှငျ့ တိုကျပှဲဖွဈပှားသညျ့ ပလကျဝမွို့နယျတို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲကငျြးပမညျဖွဈရာ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျအနဖွေငျ့ မညျသညျ့အခကျြအလကျမြား အပျေါ အခွခေံ၍ စဉျးစားထားကွောငျး မေးခှနျးထုတျမှုမြားလညျး ရှိသညျ။ ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပသညျ့ မဲဆန်ဒနယျမွေ စာရငျးကို ပွညျထောငျစုအစိုးရအဖှဲ့ ရုံးဝနျကွီးဌာန၊ ကာကှယျရေးဝနျကွီးဌာန၊ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာန၊ သကျဆိုငျရာ ကျောမရှငျအဖှဲ့ခှဲအဆငျ့ဆငျ့တို့၏ တငျပွခကျြမြားကို စုပေါငျးသုံးသပျပွီး ထုတျပွနျကွညောခွငျးဖွဈသညျဟု ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျအဖှဲ့ဝငျ ဦးမွငျ့နိုငျက အောကျတိုဘာ ၂၀ ရကျ နပွေညျတျော ကျောမရှငျရုံးတှငျ ပွုလုပျသညျ့ သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲတှငျ ပွောကွားခဲ့သညျ။ https://news-eleven.com/article/196082
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး နမ်မတူမွို့နယျ ပနျလုံကြေးရှာတှငျ ပုပျပှနသေော လူသေ အလောငျး သုံးလောငျးကို အောကျတိုဘာ ၂၀ ရကျနနှေ့ငျ့ ၂၁ ရကျနမြေ့ားတှငျ ဆကျတိုကျတှရှေိ့ခဲ့ကွပွီး သဆေုံးသူတဈဦးမှာ တပျမတျောသားတဈဦးဟု ဒသေခံမြား ပွောပွခကျြအရ သိရသညျ။ ပနျလုံကြေးရှာ ရပျကှကျ (၄) တှငျ အမြိုးသားတဈဦး၏ ရုပျအလောငျးနှငျ့ အမြိုးသမီးတဈဦး၏ ရုပျအလောငျးကို ဗုဒ်ဓဟူးနတှေ့ငျ တှရှေိ့ခဲ့ပွီး အဆိုပါကြေးရှာအနီးတှငျပငျရှိသော ပွောငျးဖူးခွံတဈခုတှငျလညျး အမြိုးသား အလောငျး တဈခုကို အင်ျဂါနကေ့ တှရှေိ့ခဲ့သညျ။
ပနျလုံကြေးရှာမှ ရှာခံတဈဦး၏ပွောပွခကျြအရ အပုပျနံ့ရ၍ ပတျဝနျးကငျြက ရဲကို အကွောငျးကွားခဲ့သညျဟု ဆိုသညျ။ ” သူတို့ကနှဈယောကျတညျးနတော၊ အပုပျနံ့တှရေလို့ ပတျဝနျးကငျြက အကွောငျးကွားလို့သိကတြာပါ၊ မနကေ့တှတေဲ့ အလောငျးကတော့ တပျမတျောက ရဲဘျောလို့ပွောတယျ” ဟု ဆိုသညျ။
ရဲတပျဖှဲ့၏အကွောငျးကွားမှုကွောငျ့ အလောငျးကို သှားရောကျသယျယူခဲ့သော နမ်မတူမွို့ မတ်ေတာရှငျနာရေးကူညီမှုအသငျးမှ ကိုခဈြမှေးက “အလောငျးက ညိုမညျးနတေယျ၊ သတောကလညျးနှဈယောကျဆိုတော့ သှေးရိုးသား ရိုးတော့မဖွဈနိုငျဘူးပေါ့” ဟု ပွောသညျ။ ” မနကေ့အလောငျးကတော့ ပနျလုံနားက မနျဆာမှာတှတေ့ာ၊ပုပျပှဒဏျရာတှကေိုလညျး မတှရေ့ဘူး၊ အခု တော့ နမ်မတူရငျခှဲရုံမှာ စဈဆေးနပေါတယျ” ဟု သူက ဆကျပွောသညျ။ နမ်မတူမွို့နယျရဲတပျဖှဲ့ကို ဆကျသှယျမေးမွနျးခဲ့ သျောလညျး ဖွကွေားခကျြမရနိုငျသေးပါ။ http://www.mizzimaburmese .com/article/74760
ရှမျးပွညျနယျမွောကျပိုငျး၊ ကြောကျမဲမွို့နယျအတှငျး ကြေးရှာအုပျစု ၁၂ စုကို ရှေးကောကျပှဲ မကငျြးပနိုငျကွောငျး ကွငွော ထားခွငျးကို ပွနျလညျသုံးသပျပေးရနျ ရှေးကောကျပှဲကျောမရှငျ အဆငျ့ဆငျ့ထံ တငျပွသှားရနျ စီစဉျနသေညျဟု ရှမျးတိုငျးရငျး သားမြား ဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ခြုပျပါတီ (SNLD) မှ ကိုယျစားလှယျလောငျးထံမှ သတငျးရရှိသညျ။ အောကျတိုဘာ ၁၆ ရကျတှငျ ပွညျထောငျစု ရှေးကောကျပှဲ ကျောမရှငျ (UEC) က လှတျလပျပွီး တရားမြှတသော ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပရနျ အခွအေနေ မရှိဟုဆိုကာ ရှေးကောကျပှဲမကငျြးပနိုငျသညျ့ နယျမွမြေားကို ကွငွောခဲ့ရာ ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျး မဲပေးပိုငျခှငျ့ရှိသူ တသောငျးကြျော နထေိုငျသညျ့ ကြေးရှာအုပျစု ၁၂ စု ပါဝငျ နသေညျ။
SNLD ပါတီမှဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျ၊ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ (၁) ၏ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဒျေါနနျးအိမှနျအောငျက “UEC က ပယျဖကျြတဲ့ နရောတှကေို ကမြတို့က သဘောမတူဘူး။ စာပွနျတငျဖို့ လုပျနပေါတယျ။ ပွညျသူတှကေလညျး အခှငျ့အရေးဆုံးရှုံးတာကို ပွနျလုပျပေး ဖို့ တောငျးဆိုထားတာလညျးရှိပါတယျ။ ကမြတို့က UEC ကို တိုကျရိုကျမတငျဘူး။ ကြောကျမဲမွို့နယျကျောမရှငျကို အရငျတငျပါမယျ”ဟု ပွောသညျ။ ကြောကျမဲမွို့နယျတှငျး ရှေးကောကျပှဲ ကငျြးပနိုငျခွငျး မရှိသဖွငျ့ ပယျဖကျြလိုကျသညျ့ ကြေးရှာအုပျစုမြားမှာ နောငျရှငျ၊ ခေးနငျး၊ ပနျလော့၊ ဟဲကှီ၊ ကှနျကျော၊ ပဇီ၊ ကျောပေါငျ၊ ညောငျမောငျး၊ တော့ဆနျ၊ ပါလှိုငျ၊ ကှမျးစလနျး နှငျ့ ခြုံး ကြေးရှာအုပျစုတို့ ဖွဈသညျ။ ထို ကြေးရှာအုပျစု ၁၂ စုအနကျ နောငျရှငျ၊ ခေးနငျး၊ ပနျလော့ နှငျ့ ဟဲကှီတို့မှာ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ (၁) နယျမွတှေငျ ပါဝငျပွီး ကနျြကြေးရှာအုပျစုမြားမှာ ပွညျနယျလှတျတျော မဲဆန်ဒနယျ အမှတျ(၂) နယျမွထေဲတှငျ ပါဝငျသညျ။
ဒျေါနနျးအိမှနျအောငျက UEC ကို ပွနျလညျသုံးသပျပေးရနျ အတှကျ ကြောကျမဲမွို့နယျမှ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား ပူးပေါငျး ၍ စာတငျရနျ ဆှေးနှေးမှုမြားရှိပွီး အခွားနိုငျငံရေးပါတီမြားမှ လုပျဆောငျမှု မရှိပါက SNLD ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားက စာတငျမညျ ဖွဈသညျဟု ပွောသညျ။ ဆကျလကျ၍ ၎င်းငျးက “သူတို့ပိတျလိုကျတဲ့ ကြေးရှာတှမှောက ဘာမှမဖွဈဘူး။ ပွညျနယျ မဲဆန်ဒနယျ ၁ ထဲက ၄ အုပျစုဆိုရငျ နောငျရှငျကြေးရှာဆိုရငျ ဘုနျးကွီးကြောငျးမှာ စဈဘေးရှောငျရောကျတာရှိတယျ။ အဲ့တာ ကလညျး တပျမတျောက ရှာထဲ ဝငျလာပွီး အခွခေလြို့ ရှောငျနရေတာ။ စဈပဋိပက်ခမရှိဘူး။ ကနျြတဲ့ ၃ အုပျစုကလညျး စဈဖွဈတဲ့ နရောနဲ့ အလှမျးဝေးတယျ။ သဘာဝဘေးအန်တရာယျရော မရှိဘူး။ ပယျဖကျြလိုကျတာတှကေ မဖွဈသငျ့ဘူး။ ဒါ့ကွောငျ့ UEC ကို တငျဖို့ လုပျတာပါ”ဟုလညျး ဆိုသညျ။ ၂၀၁၉ ခုနှဈတှငျ ကြောကျမဲမွို့နယျအထှထှေအေုပျခြုပျရေး ဦးစီးဌာနမှ ထုတျပွနျထားသညျ့ စာရငျးအခကျြအလကျမြားအရ အဆိုပါ ကြေးရှာအုပျစု ၁၂ စုတှငျ နထေိုငျသူမြားထဲတှငျ အသကျ ၁၈ နှဈအထကျ ဦးရမှော ၁၂၀၀၀ ကြျော ရှိသညျ။
ကြောကျမဲမွို့နယျ၏ ပွညျသူ့လှတျတျော မဲဆန်ဒနယျတှငျ ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျ့ SNLD ပါတီမှ ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးစိုငျးအောငျမွငျ့ ကလညျး “မဲဆန်ဒနယျ ၁ ဆိုရငျ ကနြျောတို့ SNLD ကို ၉၅ ရာခိုငျနှုနျးအထိကို ထောကျခံမှု ရနိုငျတဲ့ နယျမွေ တှပေါ။ နယျမွေ ၂ ကတော့ ကနြျောတို့ ပါတီအပွငျ တအနျးပါတီတို့ကို ထောကျခံတဲ့ နယျမွတှေေ ဖွဈတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ ပယျဖကျြတာကို လကျခံနိုငျတဲ့ အနအေထားမှာ မရှိပါဘူး။ UEC က လုပျသလား။ ပါတီကွီးက ခယျြလှယျသလား ဂဃနဏ မပွောနိုငျပမေယျ့ ရငျထဲမှာတော့ မကနြေပျနိုငျပါဘူး”ဟု ပွောသညျ။ ၂၀၂၀ ခုနှဈ ၊ အထှထှေရှေေးကောကျပှဲသညျ နိုဝငျဘာ ၈ ရကျတှငျ ကငျြးပမညျဖွဈပွီး လကျရှိကာလသညျ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြား မဲဆှယျစညျးရုံးရေး ဆငျးနသေညျ့ ကာလဖွဈသညျ။ https://burma.irrawaddy.com/election-2020/2020/10/21/232093.html
မှနျပွညျနယျအခွစေိုကျ အရပျဖကျလူမူအဖှဲ့ အစညျးမြားပူးပေါငျးဆောငျရှကျသညျ့＂လှတျလပျတရားမြှတသညျ့ ၂၀၂၀ ရှေး ကောကျပှဲ လူထုလှုပျရှားမှု အစီအစဉျ CAFFE Project က ဗဟိုခြူပျကိုငျမှုစနဈ လြော့ခရြနျ တောငျးဆိုသညျ့＂အစီရငျခံစာ ကို အောကျတိုဘာလ (၁၉) ရကျနေ့ တှငျ ထုတျပွနျခဲ့သညျ။ မွနျမာနိုငျငံတောငျပိုငျးရှိ မွို့နယျ (၁၄) မွို့နယျမှ ပွညျသူ လူထုမြားနှငျ့ တှဆေုံ့ဆှေးနှေးပွီး＂၂၀၁၅ အတှအေ့ကွုံနှငျ့ ၂၀၂၀ အတှကျမြှျောလငျ့ခကျြ＂အမညျရှိ ၎င်းငျးအစီရငျခံစာတှငျ ၂၀၂၀ နောကျပိုငျး အာဏာရရှိလာမညျ့ ပွညျထောငျစု အစိုးရသညျ ဗဟိုခြူပျကိုငျမှုစနဈလြော့ခရြနျလိုအပျနပွေီး ပွညျနယျ/ တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရအဖှဲ့မြား၏ ဝနျကွီးခြုပျကိုလညျး သကျဆိုငျရာလှတျတျောမြားမှ ရှေးခယျြတငျမွောကျစလေိုကွောငျး ဖျောပွထားသညျ။ CAFFE Project ဦးဆောငျကျောမီတီ မိမရျောစှနျးက “အမှနျကတော့ ၂၀၀၈ ဖှဲ့စညျးပုံမပွငျရ သေးတော့ သမ်မတက ပွညျနယျဝနျကွီးခြုပျတှကေို ရှေးရမှာပဲ၊ ဒါပမေဲ့အဲဒီလိုတိုကျရိုကျရှေးခယျြမဲ့အစား ပွညျနယျလှတျတျောနဲ့ ညှိနှိုငျး ပွီးတော့ ပွညျနယျအစိုးရကို ဦးဆောငျနိုငျသူ၊ အရညျ အသှေးရှိတဲ့သူကို ၎င်းငျးတို့ အကွားမှာ ရှေးခယျြပေးဖို့ သငျ့တာပေါ့＂ ဟု ဆိုသညျ။
၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ ကတိကဝတျမြားအတိုငျး အမြိုးသားဒီမိုကရစေီအဖှဲ့ ခြုပျ NLD ပါတီ ဦးဆောငျသညျ့ အစိုးရလကျ ထကျ (၅) နှဈတာကာလအတှငျး လူမူရေးဆိုငျရာ ပွညျသူ့ ဝနျဆောငျမှုမြားနှငျ့ စီးပှားရေးတိုးတကျမှု အနညျးငယျရှိသျော လညျး ၂၀၀၈ ဖှဲ့ စညျးပုံ အခွခေံဥပဒပွေငျဆငျရေး အပါအဝငျ နိုငျငံရေးပွုပွုငျပွောငျးလဲမှုမြားအား အကောငျအထညျဖျော ဆောငျနိုငျခွငျးမရှိပေ။“၂၀၀၈ ဖှဲ့ စညျးပုံထဲက ဇယား (က) ပွညျထောငျစုမှ ပွဌာနျးရမယျ့ ဥပဒအေခနျးကဏ်ဍတခြို့တှကေို ပွညျနယျကို လှဲပေးသငျ့တယျ။ ဥပမာ ဆိုရငျ စီးပှားရေးအပိုငျးမှ မွယောဥပဒမြေိုးလိုတှပေေါ့။ ဗဟိုက ခထြားတဲ့ ဥပဒအေခြို့ ဟာ တိုငျးရငျးသားတှရေဲ့ ဓလထေုံ့းစံနဲ့ မကိုကျညီဖူး၊ အဲဒီဥပဒမြေိုးကို ပွညျနယျတှမှော ပွဌာနျးသငျ့တာပေါ့။ အခွားကိစ်စ တှလေညျး အမြားကွီး ရှိတာပေါ့ ＂ CAFFE Project အစီအစဉျ ဦးဆောငျကျောမီတီ မိမွငျ့မှနျက ဆိုသညျ။
မွနျမာနိုငျငံတောငျပိုငျးတှငျ လူငယျအမြားစု၏ ပညာရေး၊ ဖှံ့ဖွိုးရေးနှငျ့ မိသားစုမြား၏ စီးပှားရေးကို တိုကျရိုကျထိခိုကျနေ သညျ့ မူးယဈဆေးဝါးပွဿနာကို ပွညျနယျ/ တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရမှ အမွနျဆုံးဖွရှေငျးသငျ့ကွောငျး၊ သဘာပဝတျဝနျးကငျြ နှငျ့ သဈတောထိနျးသိမျးရေးကိုလညျး ပွညျနယျ/ တိုငျးဒသေကွီးအစိုးရမှ အရေးပေးဆောငျရှကျသငျ့ကွောငျး ၎င်းငျးအစီရငျ ခံစာ ကအကွံပွုထားသညျ။ အစီရငျခံစာကို မှနျပွညျနယျ (၁၀) မွို့ နယျ၊ ကရငျမွို့ နယျ (၃) မွို့နယျနှငျ့ တနင်ျသာရီတိုငျး ဒသေကွီး (၁) မွို့ နယျမှ ပွညျသူလူထုပေါငျး (၅၀၀) ခနျ့အား တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး ၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲအကွောငျး၊ ၂၀၁၅-၂၀၂၀ အထိ နိုငျငံရေး၊ လူမူရေး၊ စီးပှားရေးနှငျ့ ငွိမျးခမျြးရေးအခွအေနနှေငျ့ ၂၀၂၀ ရှေးကောကျပှဲအပွီး ပွညျသူလူထုမြား၏ မြှျောလငျ့ခကျြမြားကို မေးမွနျးခဲ့ပွီး ရရှိလာသညျ့ အခကျြအလကျမြားအား ရှေးကောကျပှဲသုတသေနပွုထားသညျ့ အခကျြ အလကျနှငျ့ စုစညျးကာ အစီရငျခံတငျပွထားခွငျး ဖွဈသညျ။ http://burmese.monnews.org/2020/10/20/%e1%81 %82%e1%81%80%e1%81%8 1%e1%8
သားအိမျခေါငျးကငျဆာ ကွိုတငျ ကာကှယျနိုငျရနျ ကရငျပွညျနယျအတှငျးရှိ အသကျ၉နှဈမှ ၁၀နှဈအရှယျ မိနျးကလေး ငယျ အယောကျ ၁၅၀၀၀ ကြျောကို အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျ(ယနေ့)မှစတငျ၍ ဒသေအသီးသီးတှငျ အိတျချြပီဗီကာ ကှယျဆေး ထိုးပေးသှားမညျဖွဈကွောငျး ကရငျပွညျနယျ ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာနထံမှ သိရသညျ။ အဆိုပါကာကှယျဆေးကို မွနျမာနိုငျငံ တှငျ မိနျးကလေးငယျမြားအတှကျ ယခုနှဈမှပထမဦးဆုံး စတငျထိုးပေးသှားမညျ ဖွဈသောကွောငျ့၂၀၁၀ခုနှဈ၊ စကျတငျဘာ လ မှစ၍ ၂၀၁၁သွဂုတျလအထိ မှေးဖှားသညျ့ မိနျးကလေးငယျတိုငျး သားအိမျခေါငျးကငျဆာ ကာကှယျထားရနျအတှကျ အိတျချြပီဗီကာကှယျဆေးကို ရပျကှကျ၊ ကြေးရှာဒသေအသီးသီးရှိ ကနျြးမာရေးဌာနမြား၌ လကျခံထိုးပေးသှားမညျဖွဈသညျ။
ယငျးကာကှယျဆေးထိုးရမညျ့အရှယျမှာ အသကျ ၉နှဈမှ ၁၀နှဈအရှယျ မိနျးကလေးငယျမြားသာဖွဈပွီး ကရငျပွညျ နယျ၌ ပထမဦးဆုံးအကွိမျ အိတျချြပီဗီ ကာကှယျဆေးထိုးသညျ့အနဖွေငျ့ အောကျတိုဘာလ ၂၀ ရကျနတှေ့ငျ ကရငျပွညျနယျ၊ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီး ဌာနရုံးအနဖွေငျ့ ကာကှယျဆေးထိုးဖှငျ့ပှဲ ပွုလုပျသှားခွငျးဖွဈသညျ။ ပွညျနယျအတှငျးရှိ လူဦးရေ အယောကျ ၁၅၀၀၀ ကြျောအတှကျ ကာကှယျဆေး အခမဲ့ထိုးပေးရနျ လုံလောကျသညျ့ အနအေထားရှိသညျ့အတှကျ သတျမှတျထားသညျ့အသကျပွညျ့သူတိုငျး မဖွဈမနေ ထိုးဖို့လိုကွောငျး ကရငျပွညျနယျ ပွညျသူ့ကနျြးမာရေးဦးစီးဌာန တိုးခြဲ့ ကာကှယျဆေးနှငျ့ ကူးစကျဌာန လကျထောကျညှနျကွားရေးမှူး ဒေါကျတာကြျော ကြျောနိုငျ က ပွောသညျ။“ကနြျောတို့ ခနျ့မှနျးထားတဲ့ ဦးရနေဲ့ ကာကှယျဆေးနဲ့က လုံလောကျမှုရှိတယျ။ သတျမှတျထားတဲ့ အသကျအရှယျ မဟုတျရငျ လာထိုး လို့မသငျ့ပါဘူး။ လာထိုးတဲ့လူတှကေို အဓိက မှေးဖှားလကျမှတျနဲ့ တိုကျစဈတာမြိုးလညျး ညှနျကွားထားပါတယျ။ ပွီးတော့ ဝေးတဲ့ ဒသေတှမှောတော့ ကာကှယျဆေးထိုးနိုငျဖို့က ကာကှယျဆေးလုပျငနျး ထိုးမယျ့အဖှဲ့ရှိတယျ။ သူတို့က တာဝနျယူ ထိုးပေးသှားမှာဖွဈတယျ။”ဟု ဒေါကျတာကြျောကြျောနိုငျက ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။
အဆိုပါအိတျချြပီဗီကာကှယျဆေးကို အပွညျ့အဝရရှိရနျ ၂ ကွိမျထိုးရမညျဖွဈပွီး ပထမအကွိမျထိုးပွီးလငျြ ၁၂ လခွား ကာ ဒုတိယအကွိမျ ပွနျထိုးပေးရမညျဖွဈသညျ့အပွငျ ဆေးတဈကွိမျစာ တနျဖိုးမှာ အမရေိကနျငှေ (၄.၅)ဒျေါလာ တနျဖိုးရှိသော ကွောငျ့ အခမဲ့ထိုးနိုငျရနျ နိုငျငံတျောဘဏ်ဍာငှမှေ (၁၀)ရာခိုငျနှုနျးနှငျ့ Gavi အဖှဲ့မှ (၉၀)ရာခိုငျနှုနျး ကုနျကြ ပေးထားခွငျး ဖွဈကွောငျးလညျး ကနျြးမာရေးနှငျ့ အားကစားဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျထားသညျ။ http://kicnews.org/2020/10/% e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%94%e1%
အောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျနမှေ့စကာ ပိုးတှလေူ့နာထှကျပျေါခဲ့သော မွဈကွီးနား ကားကွီးကှငျးတှငျ ပိုးတှလေူ့နာမြားနှငျ့ ထိစပျသူမြားကို ဆကျလကျစုံစမျး စီစဈနသေောကွောငျ့ ကနျြးမာရေးအခွအေနအေရ အောကျတိုဘာလကုနျထိ ပိတျထား မညျဟု ကခငျြပွညျနယျ Covid-19 အရေးပျေါတုံ့ပွနျရေးနှငျ့ကျောမတီမှ ဒုညှနျကွားရေးမှူး ဦးတငျ့နိုငျက ပွောသညျ။“ဂိတျအဝငျအထှကျပေါကျတှအေားလုံး ပိတျမယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ ပိုးတှလေူ့နာက တဈရကျတဈရကျ ကားကွီးကှငျးမှာ ထပျတှနေ့ရေတယျ။ ဒီနလေ့ညျး အဲကားဂိတျထဲက ၃၃ ဦးကို စဈလိုကျတယျ။ အဲထဲမှ ဗနျးမျောမနျးကားဂိတျက ထပျတှေ့ တယျ။ အဲကွောငျ့ ကနျြးမာရေးအခွနေအေရ လကုနျထိ ပိတျထားမှာဖွဈတယျ။”ဟု ပွောသညျ။
“ကနြျောတို့ တဈဆငျ့စမျးကွညျ့တာပေါ့ ရနျကုနျ၊မန်တလေးက အဝေးပွေးကားတှကေားဂိတျထဲကို လုံးဝအဝငျမခံတော့ပါဘူး။ ကားကွီးကှငျးဘေးမှာရှိတဲ့ကှငျးမှာဘဲ ကုနျခမြယျ ဥပမာ ပါဆယျထုပျလိုမြိုးလိုကတြော့ သကျဆိုငျရာကားဂိတျထဲက တဈယောကျယောကျက စားပှဲနှငျ့အပွငျမှာ တဈယောကျလောကျထှကျထိုငျခိုငျးမယျ။ အဲလိုလုပျဖို့ စီစဉျထားပါတယျ။”ဟု ပုဂ်ဂလိက ယာဉျမြားကွီးကွပျရေးဥက်ကဌ ဦးအေးဇျောဇျောကပွောသညျ။ ကားကွီးကှငျးတဈခုလုံး အဝငျအထှကျပိတျထား သျောလညျး ကုနျစညျစီးဆငျးရေးအတှကျ ပုံမှနျတိုငျးဆကျလကျလုပျဆောငျသှားမညျဖွဈကွောငျး ၎င်းငျးကဆကျပွောသညျ။ https://burmese.kachinnews.com/2020/10/22/l2-16/
မန်တလေး-လားရှိုး ပွညျထောငျစုကားလမျးမကွီးပျေါရှိ ဂုတျတှငျးလမျးတှငျ ကုနျတငျယာဉျ နှဈစီးတိမျးမှောကျမှု ဖွဈပျေါခဲ့ပွီး လမျးပိတျဆို့မှုမြား ဖွဈပျေါခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ အောကျတိုဘာလ ၂၁ ရကျ ညနေ ၃ နာရီ ၄၀ မိနဈအခြိနျတှငျ မန်တလေး-လားရှိုး ပွညျထောငျစု ကားလမျးမကွီးပျေါ ၊ ဂုတျတှငျးလမျး မိုငျတိုငျအမှတျ (၈၄) ၂ ဖာလုံ နှငျ့ ၃ ဖာလုံကွားတှငျ ကြောကျမဲ ဘကျမှ နောငျခြိုဘကျသို့ အပျခြုပျစကျ တငျနာအရညျ (၂၉) တနျ တငျဆောငျ၍ ဦးတညျမောငျးနှငျလာသညျ့ 3L/ …. (၁၈) ဘီးတပျ ကုနျတငျယာဉျသညျ လမျးကှကွေ့ောအဆငျးတှငျ အရှိနျမထိနျးနိုငျဘဲ လမျးယာဘကျသို့ တိမျးမှောကျသှားခဲ့ ကွောငျး သိရသညျ။ အဆိုပါ ယာဉျတိမျးမှောကျမှုကွောငျ့ ခရီးသညျတငျနှငျ့ ကုနျတငျယာဉျမြား ဖွတျသနျးနိုငျခွငျး မရှိပဲ လမျးပိတျဆို့မှု ဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ယာဉျတိမျးမှောကျမှုကွောငျ့ ဂုတျတှငျးလမျး ယာဉျကွောကွပျတညျးကာ လမျးပိတျဆို့မှု ရှညျကွာစှာမဖွဈစရေနျ အမှတျ (၁၂၄) ကြောကျမဲ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့စုမှူးရုံး ရဲအုပျစောဝငျး နှငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျမြား ၊ဂုတျတှငျးလမျး ရဲကငျးရှိ တပျဖှဲ့ဝငျမြားနှငျ့ အျောရီယမျတယျဟိုငျးဝေးကုမ်ပဏီမှ တာဝနျရှိသူမြားက တိမျးမှောကျယာဉျပျေါပါ ကုနျပစ်စညျးမြား ဖယျရှားကာ ယာဉျမြား ပုံမှနျအတိုငျးသှားလာနိုငျရေး ဆောငျရှကျခဲ့ရာ အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျ ည ၁၁ နာရီခနျ့တှငျ ယာဉျမြားပုံမှနျအတိုငျး ပွနျ လညျသှားလာနိုငျခဲ့ကွကွောငျး သိရသညျ။ အလားတူ အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျ နံနကျ ၁၀ နာရီအခြိနျခနျ့တှငျ ကြောကျမဲ ဘကျမှ နောငျခြိုဘကျသို့ ဦးတညျမောငျးနှငျလာသော အထညျလိပျမြား တငျဆောငျလာသညျ့ ၂၂ ဘီး ကုနျတငျယာဉျတဈစီး တိမျးမှောကျမှု ထပျမံဖွဈပှားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
“ဒီနေ့ မနကျပိုငျးမှာ ၂၂ ဘီး ကုနျတငျယာဉျ ထပျပွီး မှောကျတာပေါ့။ မနညေ့က မှောကျတဲ့ နရောမှာပဲ မှောကျတာပါ။ အထညျလိပျတှေ တငျလာတဲ့ကုနျတငျကား ဖွဈပါတယျ။ အပျေါဝိတျမနိုငျဘဲ ကှတေဲ့အခြိနျမှာလဲသှားတာပေါ့။ မိုငျတိုငျမှတျ (၈၃) နားမှာ မှောကျတာပါ။ မနညေ့က မှောကျတဲ့နရောနဲ့ အထကျအောကျပေါ့။ အခုလမျးရှငျးနပေါပွီ။ သိပျမကွာလောကျ ပါဘူး။ လမျးပွနျပှငျ့မှာပါ”ဟု အမှတျ (၁၂၄) ကြောကျမဲ ယာဉျထိနျးရဲတပျဖှဲ့စုမှူးရုံး ရဲအုပျစောဝငျး ကပွောသညျ။ ရှမျးပွညျ နယျ (မွောကျပိုငျး) ဂုတျတှငျးလမျးတှငျ ကုနျတငျဆောငျမှုမြားသော ကုနျတငျယာဉျကွီးမြား မကွာခဏတိမျးမှောကျမှုဖွဈပှား လေ့ ရှိပွီး လမျးပွနျပှငျ့ခြိနျတှငျ ကုနျတငျယာဉျနှငျ့ ခရီးသညျတငျယာဉျမြား အလုအယကျ မောငျးနှငျကြျောတကျမှု မြားကွောငျ့ လမျးပိတျဆို့မှု ရှညျကွာမှုမြားလညျး မကွာခဏ ဖွဈပျေါလရှေိ့သညျ။ https://news-eleven.com/article/196106
နယျမွအေပျေါ ဝဲပြံသနျးခဲ့သညျ့ တပျမတျော ရဟတျယာဉျ (Helicopter airbus) တဈစီးကို လုံခွုံရေးရယူနေ သညျ့ ၎င်းငျးတို့၏ တပျဖှဲ့ဝငျမြားမှ ခွိမျးခွောကျပဈခတျခဲ့ကွောငျး ကရငျအမြိုးသားအစညျးအရုံး- KNU က ယမနျနေ့ အောကျတိုဘာလ ၁၉ ရကျ နေ့ တှငျ ၎င်းငျးတို့၏ ဝကျဘျဆိုကျစာမကျြနှာ၌ သတငျးထုတျပွနျသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ အောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျနကေ့ တောငျပိုငျတိုငျးစဈဌာနခြုပျ(တပခ)မှ ဗြူဟာမှူး ဗိုလျမှူးကွီး အောငျစိုးမငျးနှငျ့ တပျဖှဲ့ဝငျ ၄ ဦး စီးနငျးလာသညျ့ အဆိုပါ ရဟတျယာဉျသညျ တောငျငူစခနျးမှ စတငျထှကျခှာ ပွီးနောကျ ၎င်းငျးတို့ကို အသိပေး အကွောငျးကွားမှုမရှိဘဲ KNU တပျမဟာ (၅) နယျမွေ လူသောမွို့နယျအတှငျး ဝဲပြံလာသညျကို ဒသေခံမြားမှတှရှေိ့ခဲ့၍ နယျမွလေုံခွုံရေးအရ KNLA တပျဖှဲ့ဝငျမြားမှ ပဈခတျခဲ့ကွောငျး KNU တပျမဟာ (၅) ဘကျမှ အတညျပွုပွောဆိုသညျ။
မူတွျောခရိုငျ (KNU တပျမဟာ ၅) အတှငျးရေးမှူး ပဒိုစောရောဘငျမူးက “အခုက ဘာမှ ကနြျောတို့ကို အသိမပေးဘဲ ဟကျလီကျောပတာနဲ့ ပြံသနျးလာတယျ။ ကနြျောတို့ရဲ့ ဒသေခံ ကြေးရှာတှေ အခွစေိုကျ စခနျးတှအေပျေါမှာ ဝဲပြံတာမြိုး လုပျတဲ့အတှကျ အဲ့နရောတှမှော တာဝနျကနြတေဲ့ ကနြျောတို့လူတှကေ လုံခွုံရေးအရပဈခတျလိုကျရတာမြိုး လုပျလိုကျရ တယျ။”ဟု ကအေိုငျစီသို့ ပွောသညျ။ တပျမတျောရဟတျယာဉျအနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ တပျစခနျးတညျရှိရာ ထီးမူထ သို့ လာရောကျရနျ စီစဉျထားသျောလညျး KNU နယျမွပေျေါသို့ စုံစမျးထောကျလှမျးသညျ့ ပုံစံဖွငျ့ KNU တပျမဟာ (၅)၏ အထူး တပျရငျးဌာနခြုပျ နယျမွအေတှငျး ဆကျလကျပြံသနျးခဲ့မှုကွောငျ့ လုံခွုံရေးရယူနသေညျ့ KNLA တပျဖှဲ့ဝငျမြားမှ ဒုတိယ အကွိမျ ထပျမံပဈခတျခဲ့ကွောငျးလညျး KNU ဘကျက ဆကျပွောသညျ။ ရဟတျယာဉျမှာ ထှကျခှာသှားပွီး ၎င်းငျးတို့ မူရငျးဌာန ခြုပျသို့ ပွနျသှားရာတှငျ စကျအငျ ဂငျြခြို့ယှငျးသှားခွငျးကွောငျ့ ကြောကျကွီးမွို့နယျ၊ မူသဲ ဘောလုံးကှငျးတှငျ ဆငျးသကျ ရပျနားခဲ့ကွောငျး၊ KNLA တပျဖှဲ့ဝငျ မြား၏ ပဈခတျမှုကွောငျ့ ရဟတျယာဉျမှာ ထိခိုကျမှုအနညျး ငယျရှိခဲ့ပွီး ၎င်းငျးတို့ အခွစေိုကျ စခနျးသို့ ပွနျရောကျနိုငျခွငျးမရှိ သညျ့အတှကျ အဆိုပါ ဘောလုံးကှငျးတှငျ အရေးပျေါဆငျးသကျခဲ့ရခွငျးဖွဈသညျဟုလညျး KNU သတငျးက ဆိုသညျ။
နိုငျငံရေး လလေ့ာသုံးသပျသူ ဦးမောငျမောငျစိုးက “ ကနြျောကွားမိတာကတော့ လမျးကွောငျးမှားပွီး ဝငျသှားတယျလို့ ပွော တယျ။ ဒါကို KNU ဘကျက စိုးရိမျစိတျနဲ့ ပဈတယျလို့ပွောတယျ။ တဖကျကလညျးပဲ မဲပုံးတှေ လိုကျခတြယျလို့လညျးဆို တယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီကိစ်စအပျေါ နှဈဖကျခေါငျးဆောငျတှေ သဘောထားကွီးကွီးနဲ့ ညှိနှိုငျး ဖွရှေငျးရငျတော့ ပွဿနာကွီးကွီး မားမားဆကျမဖွဈနိုငျပါဘူး။ သို့သျောလညျးပဲ ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး သဘောထားတငျးတငျးမာမာနဲ့ ဒါကိုတော့လကျခံလို့ မရဘူး ဆိုတဲ့ဘကျက စဉျးစားရငျတော့ ပွဿနာတကျသှားနိုငျပါတယျ”ဟု သုံးသပျပွောဆိုသညျ။ http://kicnews.org/2020/10 /%e1%80%94%e1%80%9a%e1%80%b9%e1%80%b1%e1%80%bb%e1%
သြှမျးပွညျ မွောကျပိုငျး ကြောကျမဲမွို့နယျ စဈဘေးရှောငျ ၁၇၀၀ ကြျောကို သြှမျးပွညျအစိုးရမှ စားနပျရိက်ခာ ထောကျပံ့ပေးခဲ့ ကွောငျး သတငျးစာရှငျးလငျးမှုတရပျပွုလုပျခဲ့သညျ။ ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျး အောကျတိုဘာ ၂ ရကျနကေ့ စပွီး အစိုးရ တပျမတျောနှငျ့ သြှမျးပွညျပွနျလညျထူထောငျရေးကောငျစီ၊ သြှမျးပွညျတပျမတျော RCSS/SSA တို့ကွားဖွဈပှါးသော တိုကျပှဲ ကွောငျ့ နရေပျမှစှနျ့ခှါထှကျပွေးရသညျ့ကြောကျမဲဒသေခံလူထု ၄၀၀၀ ကြျောရှိကွောငျး သြှမျးလူ့အခှငျ့အရေးမဏ်ဍိုငျမှ ကှငျးဆငျးကောကျယူသညျ့စာရငျးမြားအရ သိရသညျ။
“ကနြျောတို့ သြှမျးပွညျအစိုးရအနနေဲ့ တိုကျပှဲရှောငျပွညျသူတှေ အိမျထောငျစု (၅၀၀) လူဦးရေ (၁၇၀၀) ကြျောကို ထောကျ ပံ့ပေးခဲ့တယျ”ဟု သြှမျးပွညျ အစိုးရ ပွောရေးဆိုခှငျ့ရှိသူ ဦးစိုးညှနျ့လှငျက ပွောသညျ။ စဈဘေးရှောငျပွညျသူမြားကို ၇ ရကျ တဈကွိမျထောကျပံ့မှု ပေးခဲ့ကွောငျး၊ စုစုပေါငျးကပျြငှေ ၅၇ သိနျးကြျော တနျဖိုးရှိ ဆနျ၊ ဆီ၊ ဆား၊ ကုလားပဲ၊ ကွကျသှနျနီ၊ ငါးသတ်ေတာ စသညျ့ စားသောကျကုနျပစ်စညျးမြားကို ထောကျပံ့ပေးခဲ့ကွောငျး ဦးစိုးညှနျ့လှငျက ပွောသညျ။“ကနြျောတို့က ၁ လစာဆိုပွီး ထောကျပံ့ကူညီပေးလို့မရဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စဈရှောငျတဈခြို့တှကေ အိမျပွနျသှားတာတှရှေိတယျ။ ကနြျောတို့လညျး စာရငျးကောကျရတာ ခကျတယျ”ဟု ဦးစိုးညှနျ့လှငျ ကပွောသညျ။ လကျရှိမှာ တိုကျပှဲမြား ငွိမျနသေဖွငျ့ ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျးရှိ စဈဘေးရှောငျမြားမိမိနရေပျသို့ ပွနျသှားပွီဖွဈကွောငျး စုံစမျးသိရသညျ။
တဖကျတှငျလညျး တိုကျပှဲကွောငျ့ စဈဘေးရှောငျ နအေိမျမြားလကျနကျကွီးထိမှနျထားခွငျး၊ အစိုးရတပျမတျောမှ တပျသား မြား နအေိမျအတှငျးသို့ ဝငျရောကျမှနှေောကျထားခွငျး နှငျ့ အရပျသားနအေိမျခွံဝငျးထဲတှငျ လကျနကျကွီးမြား၊ ကညျြဆံခှံ မြားစှာ ရှိနကွေောငျးလညျး နမျ့မဟငျကြေးရှာ မှ ဒသေခံမြား ပွောပွခကျြ အရသိရသညျ။ ကြောကျမဲမွို့နယျ အတှငျး တိုကျပှဲ ကွောငျ့ ပကျြစီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသညျ့ အိုးအိမျမြား၊ လကျနကျထိမှနျခဲ့သညျ့ အရပျသားမြား နှငျ့ ပတျသကျပွီး (အောကျတိုဘာ ၁၉ ) ရကျ တှငျ ပွုလုပျသညျ့ သြှမျးပွညျ အစိုးရ အဖှဲ့ ၄ နှဈပွညျ့ သတငျးစာ ရှငျးလငျးပှဲတှငျ သြှမျးပွညျနယျအစိုးရ အဖှဲ့မှ တစုံတရာ ထညျ့သှငျးပွောဆိုသှားခွငျးမရှိခဲ့ပေ။ https://burmese.shannews.org/archives/19010
ရခိုငျကမျးရိုးတနျးဒသေမြားတှငျ ကကျြစားနကွေသော မြိုးတုနျးလုဖွဈနသေညျ့ ငမနျးနှငျ့ ငါးလိပျကြောကျ အကောငျရမှော အလှနျအကြှံဖမျးဆီးမှုမြားကွောငျ့ နှဈစဉျလြော့ကလြာလြှကျရှိနကွေောငျး ပငျလယျပွငျ မြိုးစိတျထိနျးသိမျးရေး လုပျဆောငျ သူမြားနှငျ့ ဒသေခံမြားထံမှ သိရသညျ။
ရခိုငျပွညျနယျအတှငျး ကောကျယူထားသော စဈတမျးမြားအရ ကောငျရပေမာဏ နှဈစဉျလြော့ကလြကျြ ရှိကွောငျး သားငှကျထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့(WCS)မှ Marine Species Conservation Officer ကိုအံ့မောငျက DMG သို့ ပွောဆိုသညျ။ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၇ ခုနှဈမှ ၂၀၁၉ ခုနှဈအထိ ရှားပါးမြိုးစိတျ ငါးမနျးနှငျ့ ငါးလိပျကြောကျတို့၏မြိုးစိတျတို့ နထေိုငျ ကကျြစားမှု အခွအေနေ၊ ရလေုပျသားမြား၏ လူမှုစီးပှားရေးအခွအေနကေ ရခိုငျပွညျနယျမ၊ ကြိန်တလီ၊ သံတှဲ၊ မနျအောငျ၊ ကြောကျဖွူနှငျ့ စဈတှေ စသညျ့မွို့နယျ ၆ ခုတှငျ သားငှကျထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့(WCS)မှ စဈတမျး ကောကျယူခဲ့ကွောငျး ၎င်းငျးကဆိုသညျ။“အခုလို အကောငျရလြေော့ကလြာတယျဆိုတာကို ကြှနျတျောတို့ စဈတမျးတဈခုတညျးနဲ့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ နျောဝေးက ပညာရှငျတှရေဲ့ သုတသေနပွုခကျြတှအေရလညျး ပါတာပေါ့နျော။ အဓိကနညျးလာရတာကတော့ အဖမျးဆီးတှမြေားလာ ကွောငျ့လို့ ပွောရမှာပေါ့။ အကောငျရပေမာဏ ဘယျလောကျထိပဲကနျြတော့တယျဆိုတာ ကတြော့ ပွောဖို့အခကျအခဲရှိပါ တယျ” ဟု ကိုအံ့မောငျက ဆိုသညျ။
ယခုကဲ့သို့ ငမနျးနှငျ့ ငါးလိပျကြောကျအကောငျရလြေော့ကလြာမှုသညျ ရအေောကျဂဟေစနဈအပျေါမြားစှာ အကြိုးသကျမှုရှိ သဖွငျ့ ရလေုပျငနျးလုပျကိုငျသူမြားအနဖွေငျ့ ငမနျးနှငျ့ ငါးလိပျကြောကျမြားကို ဖမျးဆီးမှု လြှော့ခရြနျလိုအပျနပွေီဖွဈကွောငျး အပွညျပွညျဆိုငျရာ တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျနှငျ့ သဘာဝအပငျအဖှဲ့(FFI)မှ ရခြေိုနှငျ့အဏ်ဏဝါရပွေငျထိနျးသိမျးရေးအစီအစဉျ မနျနဂြော ဦးဇျောလှနျး ကပွောသညျ။“ဒီနှဈမြိုးစလုံးက ပငျလယျတှရေဲ့ အခွအေနအေညှနျးကိနျးတှဖွေဈကွတယျ။ သူတို့ ရှိ၊မရှိကိုကွညျ့ပွီး ပငျလယျပွငျရဲ့ ထူးခွားမှုကိုသိနိုငျတယျ။ ဥပမာ-ဒီနရောမှာ ဒီသတ်တဝါတှရှေိမနဘေူးဆိုရငျ သခြောတယျ။ အဲဒီ ပငျလယျပွငျမှာ တဈခုခုဖွဈနပွေီပဲ။ ဒါကွောငျ့ ဒီသတ်တဝါတှကေို ထိမျးသိမျးဖို့အတှကျ ရလေုပျသားတှေ ဘကျကလညျး ဝိုငျးဝနျးထိမျးသိမျးဖို့လိုတယျ။ ဒါမှ ရရှေညျမှာ ရလေုပျငနျးဆကျလုပျကိုငျဖို့အဆငျပွမှော”ဟု သူကဆိုသညျ။
“အခုတော့ ငါးလိပျကြောကျတှကေ သိပျပွီးရတယျလို့တော့ မမွငျမိတော့ဘူး။ လှနျခဲ့တဲ့ဆယျနှဈလောကျက ဆိုရငျ အမြား ကွီးပဲ တျောတျောပေါတယျ။ ဒီကွားထဲမှာ ယိုးဒယားဘကျကလာတဲ့ မြှားတှနေဲ့ အသားကုနျ ဖမျးပဈလိုကျကွတော့ အခုဆိုရငျ တဈရကျနလေို့ တဈကောငျတောငျ မရကွတော့ဘူး။ ရရငျတောငျနတေို့ငျး မရကွတော့ဘူး”ဟု ၎င်းငျးကဆိုသညျ။ မွနျမာနိုငျငံ တှငျ ငါးမနျးမြိုးစိတျ ၅၀ ကြျောနှငျ့ ငါးလိပျကြောကျမြိုးစိတျ ၇၀ ကြျောရှိသညျ့အနကျ ငါးမနျးမြိုးစိတျ ၁၃ မြိုး၊ ငါးလိပျကြောကျ မြိုးစိတျ ၁၄ မြိုး၊ စုစုပေါငျး ၂၇ မြိုးကို ဦးစားပေးထိနျးသိမျးရနျ ရညျရှယျထားကွောငျး အပွညျပွညျဆိုငျရာ တောရိုငျးတိရစ်ဆာနျ နှငျ့ သဘာဝအပငျအဖှဲ့(FFI)ထံမှ သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76426
မာနျအောငျမွို့နယျ ANP ပါတီ ပွညျသူ့လှတျတျော ကိုယျစားလှယျလောငျး ဦးကြျောသနျးက “ ကနြျောတို့ အစက လကျကမျး စာစောငျတှေ မြှဝတော။ အဲဒီမှာ ပါတီကို ထောကျခံသူတှကေ ဝနျးရံ ပါဝငျလာကွတယျ။ ဝနျးရံသူ ဦးရကေို ကတြော့ Mask ပေးတဲ့အခါ ကုနျသှားတာက ၂၀၀၀ လောကျရှိတဲ့ အတှကျကွောငျ့ လူ ၂၀၀၀ ကြျောပါတယျလို့ ပွောလို့ ရတယျ”ဟု ပွော သညျ။ အဆိုပါ မဲဆှယျစညျးရုံးရေးကို မွို့ဝငျဆိုငျးဘုတျက စတငျပွီး မွို့တှငျး ရပျကှကျတိုငျးနှငျ့ လမျးမြားကို နံနကျ ၈ နာရီခှဲ အခြိနျမှ နလေ့ယျ ၁၁ နာရီအထိ လှညျ့လညျခဲ့ကွခွငျးဖွဈသညျ။ မာနျအောငျမွို့နယျသညျ ပွီးခဲ့သညျ့၂၀၁၅ ရှေးကောကျပှဲ၌ NLD ပါတီက အနိုငျရခဲ့သညျ့ နရောတခုဖွဈသျောလညျး ယခုနှဈတှငျ ရခိုငျပါတီမြားကို ဝနျးရံမှုပိုမိုမြားပွားလာ နကွေောငျး ANP ကပွောဆိုသညျ။
ယငျးသို့မြားလာရခွငျးကို ဦးကြျောသနျးက “ အခုလို ANP ကို မာနျအောငျက ပွညျသူမြား ဝနျးရံလာရခွငျးဟာ ရခိုငျမှာ ရှေးကောကျပှဲနယျမွတှေကေို ခြုံ့လိုကျတဲ့ အတှကျ ဒီအစိုးရကို ဝဖေနျမှုတှရှေိခဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့ NLD ထကျ ရခိုငျပါတီ တှကေို မာနျအောငျဒသေခံတှကေ အားပေးလာတာဖွဈတယျ” ဟု ဆိုသညျ။ ရခိုငျပွညျနယျ မွောကျပိုငျးရှိ ANP အမာခံ ဖွဈသော နယျမွတေို့တှငျ ရှေးကောကျပှဲ မရှိတော့သညျ့အတှကျ တောငျပိုငျး မဲဆန်ဒနယျမြားမှာ ပိုအရေးကွီးသော ကွောငျ့ ယငျးသို့ အငျအားပွရခွငျးဖွဈကွောငျး ရခိုငျအမြိုးသားပါတီ ထိပျပိုငျး ခေါငျးဆောငျမြားက ပွောဆိုနကွေသညျ။ ယခုနှဈ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ မာနျအောငျကြှနျးတှငျ ရခိုငျပါတီမြားကိုသာ ပွညျသူတို့က ထောကျခံမှု အားကောငျးနပွေီး ယငျး အထဲမှ ANP နှငျ့ ALD ပါတီနှဈခုသာ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျမညျဟု ဒသေခံမြားက သုံးသပျနကွေသညျ။ မာနျအောငျဒသေခံ ကိုသီဟထှနျးက “ မာနျအောငျကြှနျးမှာ ထိပျသီး အငျအားကောငျးနတောကတော့ ANP နဲ့ ALD တို့ ဖွဈနတောကိုတှေ့ တယျ။ သူတို့ပဲ ပွိုငျဆိုငျမှုပွငျးထနျမယျ ” ဟုပွောသညျ။
လာမညျ့ ရှေးကောကျပှဲတှငျ မာနျအောငျမွို့နယျအတှငျး နိုငျငံရေးပါတီမြားမှ ကိုယျစားလှယျလောငျးမြားနှငျ့ တသီးပုဂ်ဂလ ကိုယျစားလှယျလောငျး ၂၉ ဦး ဝငျရောကျယှဉျပွိုငျမညျဖွဈပွီး ယငျးအထဲတှငျ တသီးပုဂ်ဂလ ၆ ဦး ပါဝငျကွောငျးလညျး သိရ သညျ။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/10/22/232158.html
ရခိုငျပွညျနယျ၊ မောငျတောမွို့နဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့တှမှော လြှပျစဈမီးပွတျတောကျနတော ၅ ရကျ ကွာရှိနပွေီဖွဈပွီး မီးပွနျ လာအောငျ ပွငျဆငျတပျဆငျဖို့ လုံခွုံရေးအခွအေနအေရ သှားရောကျခှငျ့ မရသေးဘူးလို့ မောငျတောခရိုငျလြှပျစဈ အငျဂငျြနီယာ ဦးဟိနျးမိုးထကျက ပွောပါတယျ။ “ကနြျောတို့ဘကျကတော့ ပွညျနယျလြှပျစဈနဲ့ ခြိတျဆကျပွီး အခုပွတျ တောကျ နတေဲ့နရောကို သှားခှငျ့ရဖို့ တာဝနျရှိသူတှကေို တငျပွထားတယျ။ ဒီနအေ့ထိ သှားခှငျ့မပွုသေးဘူး။ အခြိနျတော့ နညျးနညျးကွာနိုငျမယျထငျတယျ။ ဘာကွောငျ့ သှားခှငျ့မပွုတာလဲဆိုတော့ အဲ့ဒီနရောတဝိုကျမှာ တိုကျပှဲတှဖွေဈနသေေး တာကွောငျ့ လုံခွုံရေးစိတျမခရြလို့ ပွောတယျ။”မောငျတောခရိုငျဖွဈတဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့နဲ့ မောငျတောမွို့တှမှော အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျ မှနျးလှဲ ၁၂ နာရီကြျောလောကျကစပွီး လြှပျစဈမီးပွတျတောကျနရောမှာ အောကျတိုဘာ ၂၂ ရကျ အထိ ပွနျလညျရရှိခွငျးမရှိသေးတာပါ။
အခု လြှပျစဈဓာတျအားလိုငျး ပွတျတောကျတဲ့နရောဟာ ရသတေ့ောငျမွို့နယျ၊ ထီးစှဲကြေးရှာနဲ့ သောငျးဒရငျးကြေးရှာ အကွား ဖွဈနိုငျတယျလို့ လြှပျစဈ အငျဂငျြနီယာက ပွောပါတယျ။ အဆိုပါနရောဒသေတဈဝိုကျမှာ အခုရကျပိုငျးအတှငျး တပျမတျောနဲ့ အအေတေို့ တိုကျပှဲအပွငျးအထနျဖွဈပှားနပွေီး တဈဖကျနဲ့တဈဖကျ လကျနကျကွီးတှနေဲ့ ပဈခတျရာကနေ လကျနကျကွီးကညျြစထိမှနျကာ ဓာတျအားလိုငျးကွိုး ပွတျတောကျသှားတာလို့ ဒသေခံတှကေ ပွောပါတယျ။ မောငျတော မွို့နဲ့ ဘူးသီးတောငျမွို့တှမှော ပွီးခဲတဲ့ သွဂုတျ ၂၄ ရကျကလညျး လကျနကျကွီးကညျြထိမှနျသှားပွီး လြှပျစဈကွိုးပွတျ တောကျသှားလို့ ရကျ ၁၀ ကြျောကွာ လြှပျစဈမီးပွတျသှားခဲ့ဖူးပါတယျ။ http://burmese.dvb.no/archives/418572
ရှမျးပွညျနယျ မွောကျပိုငျး သီပေါမွို့နယျမှာ ကိုဗဈ-၁၉ အတညျပွုလူနာ ၂ ယောကျတှတေ့ယျလို့ နယျစညျးမခွား ပရဟိတ အဖှဲ့က ပွောပါတယျ။ အောကျတိုဘာလ ၁၇ ရကျနကေ့ တခွားမွို့နယျကနေ သီပေါမွို့ကိုလာတဲ့ ကြောငျးဆရာမ ၁ ဦး အထက(၁)ကြောငျးမှာ ကှာရနျတငျးဝငျနရောက ရောဂါပိုးစဈဆေးတှရှေိ့ခဲ့ပွီး သီပေါဆေးရုံကို ပို့ဆောငျထားတယျလို့ သိရပါတယျ။
အောကျတိုဘာ ၂၁ ရကျနကေ့လညျး ရနျကုနျကနပွေနျလာတဲ့ အမြိုးသမီးကို သူရဲ့ နမျ့လနျမွောကျပိုငျး ရပျကှကျနအေိမျမှာပဲ ကှာရနျတငျးထားရာကနေ ရောဂါပိုးတှရှေိ့ခဲ့ပွီး နမျ့လနျပွညျသူ့ဆေးရုံကွီးကို ပို့ဆောငျထားတယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ပိုးတှေ့ လူနာ ၂ ဦး နဲ့ ဆကျစပျတဲ့သူတှကေို လတျတလောမှာ ကှာရနျတငျးထားထားတယျလို့ သိရပါတယျ။ http://burmese.dvb. no/archives/418674
လကျရှိဖွဈပှားနသေညျ့ COVID-19 ကပျရောဂါကွောငျ့ မွနျမာနိုငျငံအတှကျရေးဆှဲနသေညျ့ နိုငျငံအဆငျ့ရနေံယိုဖိတျမှု တုနျ့ပွနျဆောငျရှကျရေး စီမံခကျြအတှကျ ရခိုငျပွညျနယျသို့ ကှငျးဆငျးစဈဆေးမှုမြား မလုပျဆောငျနိုငျကွောငျး ရကွေောငျးပို့ ဆောငျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနမှ သိရသညျ။
အဆိုပါ စီမံခကျြကို အပွညျပွညျဆိုငျရာပငျလယျရကွေောငျးအဖှဲ့(IMO)၏ ပံ့ပိုးမှုဖွငျ့ ရကွေောငျးပို့ဆောငျရေး ညှနျကွားမှု ဦးစီးဌာနမှ ပွီးခဲ့သညျ့ ၂၀၁၈ ခုနှဈ နိုဝငျဘာလက စတငျရေးဆှဲနခွေငျးဖွဈကာ မွနျမာ့ကမျးရိုးတနျး တဈလြှောကျတှငျ ရနေံ ယိုဖိတျမှုဖွဈပှားပါက အရေးပျေါတုနျ့ပွနျမှု ပွုလုပျနိုငျရနျအတှကျ ရေးဆှဲရခွငျးဖွဈကွောငျး ရကွေောငျးပို့ဆောငျရေး ညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ(နညျးပညာ) ဦးကိုကိုနိုငျကဆိုသညျ။“ပွောရရငျတော့ ရခိုငျပွညျနယျက အရေးကွီးဆုံးလို့ ပွောလို့ရတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရခိုငျပွညျနယျ မဒေးကြှနျး တဈခုတညျးမှာတငျ မတျောတဈဆမှုဖွဈ ခဲ့ရငျ တဈမိနဈမှာတငျ တနျရာနဲ့ခြီပွီး ယိုဖိတျတာတှေ ဖွဈနိုငျတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပထမဦးစားပေးပွီး ရေးဆှဲခငျြပမေယျ့ ဒီအခြိနျ မှာ လမျးတှအေကုနျပိတျထားတော့ သှားလာဖို့မလှယျတဲ့အတှကျ ရနျကုနျနဲ့ ဧရာဝတီတိုငျးအတှကျကိုပဲ အရငျဆုံးပွီးသ လောကျဆှဲနတေယျ”ဟု သူကပွောသညျ။
ရနေံယိုဖိတျမှု တုနျ့ပွနျဆောငျရှကျရေးစီမံခကျြမှာ နိုငျငံတိုငျးတှငျ မဖွဈမနရှေိသငျ့သညျ့ စီမံခကျြတဈခုဖွဈပွီး သဘွောင်ျကီး မြား၊ သဘောငယျမြား သှားလာနသေညျ့ဒသေမြားတှငျ ရနေံယိုဖိတျမှုဖွဈပှားခဲ့ပါက မညျသို့တုနျ့ပွနျဆောငျရှကျရမညျမြားကို Plan ရေးဆှဲထားခွငျးဖွဈကွောငျး သားငှကျထိနျးသိမျးရေးအဖှဲ့ (WCS-Myanmar)မှ ဒုတိယဌာနတောဝနျခံ ဦးကြျောသငျးလတျ က ဆိုသညျ။ လကျရှိတှငျ နိုငျငံအဆငျ့ရနေံယိုဖိတျမှု တုနျ့ပွနျဆောငျရှကျရေးစီမံခကျြတှငျ အစိတျအပိုငျး ပါဝငျသညျ့ Sensitivity Mapping Survey လုပျဆောငျခွငျးကို ကမျးရိုးတနျးဒသေအခြို့တှငျ ဆောငျရှကျနကွေောငျး ရကွေောငျးပို့ဆောငျရေးညှနျကွားမှုဦးစီးဌာနထံမှ သိရသညျ။ https://www.bnionline.net/mm/news-76454